Noocyada Waxsoosaarka Raadinta - Florida International Expo Expo
Goobta, Gobolka, Dalka
Ku soo Dhawow warqadda
Qaybaha Wax soo saarka Raadinta
Tilmaamaha Dhacdooyinka Kaqeybgalayaasha
Xarunta Abaalmarinta Expo
Saxaafadda / Warbaahinta
3 Daughters Brewing Manufacturer Alaabada Cunnada cabitaanka At 3 Daughters Brewing, waxaan ka taxaddarnaa seddex waxyaalood oo ka sarreeya wax kasta oo kale: farsamaynta biirka weyn, la wadaagida biirka asxaabtayada, iyo taageerida bulshada. 3 Daughters Brewing waa warshad khamri farsamo oo ku taal St Petersburg, Florida. Waxaan soo diyaarinay mudo 7 sano ah anagoo noqonayna shirkada lixaad ee ugu weyn gobolka Florida. Waxaan sameysaneynaa biirkeena, khamriga, seltzer adag, soodhaha adag, Sangria (khamriga laga helo canabka!), Iyo qamriga aan qamriga ahayn ee CBD. Waxaan haynaa 42 qasabadood oo wareegaya 3 baarar oo kala duwan taas oo noo ogolaaneysa inaan u soo bandhigno curiyayaal cusub macaamiisheenna si aan jawaab celin ugu soo dhiibno gacmaha ugu horreeya ka hor inta aan la kari karin macaamiisha goobta ama ka baxsan Sannadka 2019, waxaan ku tijaabinnay 233 halabuur oo kala duwan Qolka Dhadhaminta. Waxaan hadda u qaybinaa gobolka Florida oo dhan waxaanna u dhoofinnaa Faransiiska iyo Midowga Yurub. Waxaan ku siineynaa alaabteena daasadaha u dhexeeya 12oz ilaa 32oz waxaanan leenahay awood u lahaanshaha sumadaha gaarka loo leeyahay Fadlan fiiri kheyraadkeena tusaalooyinka sanduuqa. Waxaan jeclaan laheyn fursada aan kula shaqeyno. Beer - Cider - Seltzer adag - Soda adag - Sangria - Cabitaannada aalkolada ah
AABACO Environmental Industries Manufacturer Qalabka iyo Qalabka Warshadaha Qarxinta daadinta La aasaasay 1984, Aabaco waxay bixisaa noocyo kala duwan oo tayo sare leh oo Saliid iyo Kiimikada Daadinista & Badbaadada Alaabada laga helo dhamaan soo saarayaasha waaweyn: 3M, DuPont, Honeywell, MSA, Kimberly Clark, Moldex, Pyramex, Ergodyne, Showa Gloves iyo kuwa kaloo badan. Waxaan bixinaa in ka badan 200,000 oo badeecado ah waxaana ka rarnaa 14 xarumood oo lagu qaybiyo dalka oo dhan. Qashin-Qubid - Nadiifiyaha dareeraha Biyo-biyoodka - Daatayaasha Daata - Saliida nuugta - Qalabka xirmooyinka daadinta
Airo Industries, Inc Manufacturer Qalabka iyo Qalabka Warshadaha Qalabka dhismaha Hal-abuure hormood ah oo soo saare ka ah nidaam gaarsiinta alaab-sheeko-badan oo hufan oo loogu talagalay mashaariicda dhismaha Wiishka - Nidaamyada Qaadista Qalabka - Qalabka Dhismaha Dhismaha
Airocide Air Purifier Manufacturer Nadiifinta Farsamada Nidaamyada Nadiifinta Hawada Airocide waa tikniyoolajiyad lagu nadiifiyo hawada oo ay soo saartay NASA. Waa FDA la cadeeyay, waana la xaqiijiyay inay wax ku ool u tahay fayrasyada, bakteeriyada, iyo arrimaha kale ee tayada hawada 25kii sano ee la soo dhaafay. Oxidation Photocatalytic - Nadiifinta Hawada Gudaha - Teknolojiyada Nadiifinta Cirka ee khalkhalka leh
Allied Steel Buildings Manufacturer Qalabka Dhismaha Dhismayaasha horay loo sii diyaariyay Allied Steel Buildings, waa shirkad la aqoonsan yahay oo keenta tayo sare leh dhismayaasha birta horay loo farsameeyay iyo nidaamyada dhismaha birta. In ka badan 17 sano oo waayo-aragnimo ah, shirkadeennu waxay soo bandhigtay in ka badan 5,000 oo mashruuc oo bir ah adduunka oo idil, oo ay u gudbineyso xalal dhisme oo loogu talagalay warshado kala duwan, laga bilaabo duulimaadka illaa ganacsiga e-commerce & qaybinta. Dhismayaasha Birta ee Hore loo Sameeyay - Injineerka Dhismaha
American Manufacturing Co. Manufacturer Automotive Alaabada Daryeelka Baabuurta American Mfg. Co., qoysku waxay lahaayeen oo ay shaqeynayeen in ka badan 25 sano. Khibrad u leh soo saarida Gawaarida, Daryeelka Guriga & Kiimikooyinka Warshadaha. Caan ku ah tayada iyo waxqabadka alaabada sumadaha gaarka loo leeyahay iyo sumadeena Shirkadaha Lagu Abaalmariyay - RUDSON, PurpleTUFF iyo BugOFF. Gawaarida Gawaarida - Alaabada Daryeelka Gawaarida - Xalalka Nadiifinta - Qaybaha gawaarida
American TelePhysicians: The Home of Digital Healthcare Adeeg bixiye Sayniska Nolosha & Teknolojiyada Caafimaadka Telemedicine TelePhysicians American waa shirkad dhakhtar hogaamisa telemedicine iyo shirkad adeeg dhakhaatiir leh howlo ka socda Aasiya, Australia, iyo Mareykanka. Waxaan jecel nahay daryeelka bukaanka waxaanan si hagar la'aan ah uga shaqeynaa sidii aan u keeni lahayn daryeel caafimaad oo tayo leh, oo la awoodi karo oo la siiyo muwaadiniinta meel kasta oo ay joogaan. Sanadkii la soo dhaafey wuxuu muujiyey baahida loo qabo xulashooyinka bixinta daryeelka caafimaadka iyo badeecadaheena waxaa loogu talagalay inay taageeraan bukaanka xarumaha iyo guriga. Xarumaha caafimaadka, oo ay qaabeeyeen dhakhaatiirtu, waxay si qoto dheer uga fiirsadeen khibrada bukaan socodka, xarunta / dhakhtarka / daryeel bixiyaha / waayo aragnimada qoyska, baahida loo qabo helitaanka waqtiga dhabta ah ee taariikhada caafimaad, sirta bukaanka, iyo adeegyada dhaxalka ah - sida elektiroonigga qoritaanka ama Imtixaanada guriga ee 'EEG tests' - oo wax ka qabta baahiyaha guriga iyo la-socodka fog. Teknolojiyada Telemedicine waxay carqaladeyneysaa warshadaha daryeelka caafimaadka qaab wanaagsan. Xarumaha iyo bukaannadu si isku mid ah ayey u aqbalayaan telemedicine sidii ikhtiyaar macquul ah marka booqashooyinka shakhsiyadeed aan macquul ahayn. Waxaan jeclaan lahayn inaan wadaagno aragtideena. Diiwaanka Caafimaadka elektaroonigga ah ee daruuriga ku saleysan (EMR) - Nidaamyada Maareynta Bukaanka - SmartClinix - Telemedicine - Barnaamijka Caafimaadka ee Caafimaadka iyo Horumarinta Codsiga
Anderson Connectivity Manufacturer Duulista iyo Hawada Teknolojiyada Nidaamka Isgaarsiinta Anderson Connectivity waa shirkad injineernimada isgaarsiinta isgaarsiinta gaarka loo leeyahay oo ku takhasustay naqshadeynta, soo saarista, iyo u adeegsiga nidaamyada anteenada satcom ee hawada, dhulka, iyo badda. In-Duulista Duulimaadyada iyo Nidaamyada Isgaarsiinta - Naqshadeynta Nidaamka Antenna
Anjon Holdings Manufacturer Sayniska Nolosha & Teknolojiyada Caafimaadka Qalabka Caafimaadka Anjon Holdings waxay soo saartaa oo iibisaa Nidaamka loo yaqaan 'Anjon Bremer Halo System' adduunka oo dhan. Anjon Holdings waa shirkad soosaara qandaraas caafimaad oo soosaaraysa qalab iyo qalab loogu tala galay lafaha. Shirkadu waa ISO 13485: 2016, MDSAP shahaado iyo FDA Diiwaangashan. Shirkadda waxay raadineysaa qeybiyeyaal ka baxsan Mareykanka nidaamka halo. Shirkaddu waxay raadineysaa matalaad iib ah oo loogu talagalay mashaariicda wax soo saarka qandaraaska ee ka baxsan Mareykanka. Nidaamka Dayactirka Ilmo-galeenka Dibadda - Nidaamka Anjon Bremer Halo - Soo-saaridda Qalabka Caafimaadka ee Qalabka - Qalabka Lafaha - Taageerada Lafdhabarta
Argonide Corporation Manufacturer Nadiifinta Farsamada Daaweynta Biyaha iyo Dabiiciga La aasaasay 1994, Argonide wuxuu u heellan yahay sayniska iyo soo saarista badeecooyinka sifeynta biyaha ee soo saaraya kaliya biyo nadiif ah oo dhadhamin weyn, laakiin sidoo kale biyo nadiif ah. Tikniyoolajiyadda iyo sifeynta gaar ahaaneed ee Argonide iyo nidaamyadeeda waxay si togan u saameynayaan balaayiin galaan oo biyo ah adduunka oo dhan suuqyo badan oo toosan laga soo bilaabo caafimaadka iyo wax soo saarka ilaa deganaanshaha iyo martigelinta. Iyada oo loo marayo shabakada 'Argonide' ee OEM iyo shabakada ganacsadaha, waxaa jira fursad wanaagsan oo aad ku isticmaashay badeecad ama adeeg farsamada shaandhaynta Argonide ay u ahayd qayb muhiim ah. Argonide wuxuu had iyo jeer ku dadaalaa inuu soo saaro sifaynta biyaha iyadoo la adeegsanayo ikhtiraac iyo shatiyadaha ay dhiiri galisay tikniyoolajiyadda laga soo xigtay NASA (sida tikniyoolajiyadda sifeynta NanoCeram®), si loogu adeegsado DEAL® nidaamyada deganaanshaha (nidaamyada sifeynta CoolBlue®). Argonide wuxuu u taagan yahay gadaashiisa tikniyoolajiyadiisa sida lagu caddeeyay shahaadada IAPMO. Argonide waa soosaaraha diiwaangashan ISO 9001: 2015. Waxyaabaha Sifeeya Biyaha - Siiraynta Biyaha Guriga - Nadiifinta Biyaha Deegaanka - Shaandhaynta Biyaha Ganacsi - Biyo wasakhaysan
Armor Screen Hurricane Protection Manufacturer Qalabka iyo Qalabka Warshadaha Ilaalinta Dabaysha Armor Screen waa la yaqaan oo lagu kalsoon yahay naqshadaha, injineerada iyo caymisyada si ay u siiyaan difaac ka sarreeya xitaa duufaannada ugu xun. Alaabtayada waxaa loo isticmaalay in lagu difaaco dhismayaasha dhammaan noocyada, oo ay ku jiraan guryaha, maqaayadaha, hudheelada, meelaha dalxiisyada, qaybo farshaxan oo aan qiimo lahayn iyo dhismayaal taariikhi ah oo xitaa ka mid ah noocyada 5-aad ee ugu xooggan, duufaannada iyo duufaannada. Kaliya maahan shaashadahayada duufaanku inay adiga iyo hantidaada ka ilaalin doonaan waxyeellada, waxay sidoo kale ka dhigayaan bannaanka bannaanka mid aad u xiiso badan sannadka oo dhan. Shaashadan daahfuran waxay ka samaysan yihiin dhar adag, adkeysi leh, UV-xasilloon oo xannibaya dabaylo xoog leh, roob wadista, qorraxda oo xun, iyo cayayaanka, iyaga oo ka dhigaya kuwo ku habboon isticmaalka agagaaraha barxadaha iyo balbalooyinka. Makhaayadaha leh fadhiga bannaanka waxay ku wargeliyaan Armor Screen, inay arkeen dakhligooda oo kordhaya illaa 70% inta lagu jiro bilaha xagaaga kulul, roob-qabow. Muraayadaha Duufaanta - Nakhshadda Dabaysha - Qalabka Dhismaha Warshadaha iyo Ganacsiga - Muraayadaha Dabaysha
ASAR Automated Storage Adeeg bixiye Adeegyada Maaliyadeed iyo Xirfadle Adeegyada Dhismaha ASAR automated storage waa xal lagu kalsoonaan karo, muddo-dheer soconaya in badan oo ka mid ah caqabadaha kaydinta ee badda, baabuurta iyo milkiilayaasha xarumaha bakhaarradu maalin kasta la kulmaan. Xalkan xifdinta xariifka ahi wuxuu bixiyaa kaydinta cufnaanta sare, dakhli badan iyo ROI, iyo inyar oo aan yareyn. ASAR automated storage marinas waxay bixisaa 30-50% kororka booska kiimikada ah ee la kireysan karo marka la barbar dhigo keydka forklift dhaqameedka, waxay abuureysaa suurtagalnimada dakhli sare iyo ROI waxayna si weyn u yareyneysaa halista waxyeellada iyo qaladka hawlwadeenka. ASAR waxay awood u leedahay inay bixiso koror weyn oo ku saabsan meelaha la isticmaali karo, yareynta halista xatooyada iyo waxyeelada, iyo hagaajinta waxtarka garaashyada baabuurta la dhigto, tas-hiilaadka keydka baabuurta, iyo xitaa ganacsiyada iyada oo laga saarayo aagga darawalnimada. Ku beddelida hababka keydinta dhaqameed ee xalka otomaatigga ah waxay labanlaabmi kartaa tirada konteenarrada ku kaydsan wax soo saarka ama qaybinta iyada oo aan la kordhin raad, taas oo keenaysa kor u kac weyn oo dakhliga iyo iibka qiimaha. Dhismaha Kaydinta Marina Drystack - Dhismaha Hanger Diyaaradeed - Dhismaha Bakhaarka - Qalabeynta Bakhaarka - Dhismaha Dhismaha Xafiiska - Nidaamka Ilaalinta nabaad-guurka Xeebta - Nadiif ah La taaban karo
Ashley Furniture Industries Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Guryaha Ashley Furniture waxaa la aasaasey sanadkii 1945 waana soo saaraha ugu weyn aduunka ee alaabta guryaha iyo lambarka 1aad ee iibka alaabta guryaha ee Waqooyiga Ameerika. Maaddaama aan nahay urur farsamo oo isku dhafan, waxaan ku dadaalnaa inaan ka badino waxyaabaha ay naga filayaan lamaanayaasheena tafaariiqda iyo macaamiisha in ka badan 155 dal oo adduunka ah. Waxaan nahay soo saare adeeg-buuxa leh oo jumladle ah oo bixiya khadka wax soo saarka alaabta guriga oo buuxa. Tafaariiqleyda dadaalka adag ee tafaariiqda, qiimaha, tayada iyo adeegga ayaa kasbaday daacadnimada iyo kalsoonida macaamiisheenna adduunka oo dhan. Maanta, Ashley Furniture HomeStore waxay leedahay in ka badan 1,000 goobood oo adduunka ah. Haddii aad xiisaynayso inaad ku iibiso alaabadayada dukaankaaga ama aad hesho liisankaaga Ashley Furniture Homestore, jadwal kulan si aad noolala hadasho. Soosaarida Alaabada Guryaha - Jumladleyda Alaabooyinka Guryaha - Dukaanleyda Alaabta Guryaha
asphericon, Inc. Manufacturer Photonics iyo Optics Photonics iyo Optics Keenida himilooyinka nolosha. Hadafkan, asphericon wuxuu si isdaba joog ah u riixayaa xuduudaha waxa suuragalka ah wuxuuna aasaasayaa guullo cusub oo adduunka indhaha ah. Rabitaankeena ku aaddan isbeddelka soosaarka qaybaha aspheric-ka ee teknoolojiyada cusub ayaa beddelaya heerka saxda iyo tayada ee suuragalka ah. Ku saabsan shirkadda: Waxaa la aasaasay Jena / DE sanadkii 2001, asphericon waxay horumarisay hoggaamiye teknolojiyadeed oo ku saabsan waxsoosaarka nidaamka asphere und aspheric iyadoo ay ugu wacan tahay khibrad badan iyo xamaasad. Teknoolojiyadaha soo-saarista ee ugu dambeeyay, oo si isdaba-joog ah u kobcaya software-ka xakamaynta lahaanshaha, qalabka cabbiraadda heer caalami, iyo shaqaale aqoon sare leh ayaa hubiya in asphericon ay siiso macaamiisha 750 adduunka oo dhan xalal cusub. Waxaan kaa caawin doonaa naqshada bilowga ah ee indhaha, iyada oo loo marayo wax soo saarka iyo dusha sare, saxnaanta metrology iyo dukumiintiyada, illaa iyo isku imaatinka 'modules optical' iyo astaamaha muuqaalka. Lens Aspheric - Muraayadaha Indhaha - Optics -Optometry - Prisms - Lenses Industrial
ASSET Engineering Adeeg bixiye Adeegyada Maaliyadeed iyo Xirfadle Engineering Engineering Aasaasay 2000, ASSET Engineering waa shirkad la-talin oo loo aqoonsan yahay khabiir ku takhasusay qaabeynta iyo falanqaynta nidaamka awoodda. Kooxdayadu waxay kuxiran yihiin hoggaamiyeyaasha nashqadeynta nidaamka awoodda halyeeyga ah iyo koox sii kordheysa oo nidaamka injineernimada xirfadlayaal ah. Waxaan u fidinaa macaamiisheenna khibrad tobanaan sano ah oo ku saabsan naqshadaynta injineernimada korantada gaarka ah, nidaamyada ilaalinta iyo xakamaynta, iyo adeegyada maaraynta mashruuca. Macaamiishayada waxaa ka mid ah shirkadaha korontada, soo saarayaasha korantada madaxabannaan, iyo kuwa adeegsada awoodda warshadaha iyo hay'adaha. In ka badan 100 macmiil ayaa ku tiirsanaa ASSET Engineering loogu talagalay naqshadaha korantada ee la hagaajiyay ee istaagay imtixaanka waqtiga. Korantada - Daraasadaha injineernimada iyo falanqaynta - injineernimada iyo naqshadeynta - Naqshadaynta walxaha - injineernimada dhamaadka iyo naqshadeynta - xakamaynta awooda - qorshooyinka dhulka iyo laydhka
Associated Industries of Florida Urur aan dawli ahayn Urur aan macaash doon ahayn Ololeynta Dowlada Tan iyo 1920, Associated Industries of Florida (AIF) waxay meteshay mabaadi'da barwaaqada iyo ganacsiga xorta ah horteeda saddexda waaxood ee dowladda gobolka. U ogow sida "Codka Ganacsiga Florida" ee Sunshine Sate, AIF waa urur iskaa wax u qabso ah oo ganacsiyo kala duwan leh, oo loo abuuray in lagu kobciyo jawi dhaqaale oo ku yaal Florida oo ku habboon koritaanka, horumarka, iyo samafalka warshadaha iyo ganacsiga iyo dadka gobolka. . U-doodista Ganacsiga - Tallaabo Siyaasadeed
Atlas Specialty Lighting Manufacturer Sayniska Nolosha & Teknolojiyada Caafimaadka Laydhyada beddelka caafimaadka, baytariyada, modullada iyo tamarta korontada Atlas Specialty Lighting waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee kaydiya alaabada, Module, Lamps, Powers Supply & Biomedical baytariyada warshadaha caafimaadka. Bixinta alaab tayo leh, qiimo aad u tartan badan, iyo adeeg macmiil oo heer sare ah. ATLAS waxay haysaa Cermax xenon light light modules, nalalka, korontada inta badan daaweynta, qalliinka, iyo isticmaalka Endoscopic. Microscopes, Lambarrada Howlgalka, Fibre optic, Endoscopes, Qalabka Bio-Medical, Mashruucyo iyo kuwa kale. Module, Lamps iyo baytariyada ayaa laga heli karaa qalabka: Stryker, Zeiss, Olympus, Pentax, Fujinon, ConMed Linvatec, Leica, Storz, Smith & Nephew, Welch Allyn, EXCELITAS iyo inbadan! Nalalka Caafimaadka - Baytariyada Caafimaadka - Sahayda Awoodda Caafimaadka
AVATRADE Adeeg bixiye Duulista iyo Hawada Qaybaha Duulista iyo Qalabka Nabadgelyo RFQs. Hello daahfurnaan! Suuqa ugu wanaagsan ee khadka tooska ah looga ganacsado qaybaha duulimaadyada iyo shirarka. Saxiix waa bilaash! Qaybaha Diyaaradaha iyo Qalabka Diyaaradaha - Qaybaha iyo Qalabka Duulista
Avparts International LLC Qaybiyaha Duulista iyo Hawada Dayactirka Dayactirka Diyaaradaha iyo Dayactirka AVPARTS INTERNATIONAL LLC waa shirkad iib iyo iibin oo bixisa qaybo diyaaradeed. Waxaa lagu aasaasay Miami, Florida USA, qorshaha muddada dheer ee shirkadda waxaa ka mid ah wax soo saar leh teknolojiyad aad u casri ah si loo keeno qaybo aad loogu kalsoon yahay. AVPARTS waxay ujeedadeedu tahay dhinaca qaybta iibka ee qaybaha iibka, iyagoo raadinaya inay noqdaan alaab-qeybiyeyaasha ugu fiican. Hadafka koowaad ee shirkaddu waa inay la shaqeyso shirkadaha caalamiga ah iyo kuwa duulista hawada iyo dayactirkooda farsamo. Ku siinta macaamiisheena tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay, adeeg deg deg ah oo lagu kalsoonaan karo si loogu qanciyo dalabkooda heerarka sarsare ee sarreeya. Macaamiishayadu waxay doortaan Avparts International iyagoo ku saleynaya sumcadda la xiriirta amniga ee lagu dhisay si dhakhso leh oo lagu kalsoonaan karo. Dhamaan qeybaheena waxaa si buuxda loogu heli karaa Boeing Licensee iyo soo saaraha. AVPARTS waxaa si buuxda loo waafajiyay FAA, ASA, heerarka iyo xeerarka ISO. Qaybaha Diyaaradaha Boeing - Biyoodka - Nuts - Sleeves - Qaansada - Bushings - Springs - Qalabka Geariga
B.S.T. Medical Supply Manufacturer Sayniska Nolosha & Teknolojiyada Caafimaadka Ku dheji Qalabka Qalliinka Waxaan soo saareynaa oo qeybineynaa dharka wax lagu riixo iyo qalabyada lagu kabayo qalliinka isqurxinta. Taageerada Qalliinka Boosta - Corsets - Girdle - Dharka Gaarka ah ee Gaarka ah - Cadaadiska Xiro - Qalabka Qalliinka
Balanced Guru Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Waxaan aasaasnay Balanced Guru iyadoo ay ka go'an tahay dareen miyir leh oo xamaasad leh si kor loogu qaado samaqabka macaamiisheenna iyo meeraha aan wadaagaan. Waxaan tan ku sameeynaa annagoo farsameynayna alaabooyin caafimaad leh oo la aqoonsan yahay dabiici ahaan, naxariisdarro-xor ah oo waarta iyadoo la xaddidayo saameynta bey'adeena iyo in la kordhiyo saameynta bulshada iyadoo dib loogu celinayo bulshooyinka macnaha weyn noo leh Balanqaadka aan idiin balanqaadeyno waa inaad kaliya isticmaasho maaddooyinka iyo walxaha badbaadada u leh jirkeena iyo bey'ada, haddii aad halkan u joogtid kareemka jirka ee dabiiciga ah ama saliidaheena timaha. Waxaan si gaar ah u isticmaalnaa maaddooyinka ceyriinka ah ee la xaqiijiyey inay yihiin kuwo dabiici ah oo lagu beero iyada oo loo marayo goosashada waara. Daaweynta Udgoon - Nadiifiyeyaasha Wejiga - Toners - Cudurka Wajiga - Jidhka jirka - Burushka Jirka - Saliidaha Muhiimka ah
Barricade International, Inc. Manufacturer Dabka iyo Badbaadada Olol iyo Dab-damis Madaxweynaha Caalamiga ah ee Barricade, John Bartlett waa dab-demiyehii Florida ee ikhtiraacay jeelkii ugu horreeyay ee ka hortagga dab ka dib markii uu arkay in xafaayad cunug oo la tuuri karo oo qoyan uusan gubin inta lagu gudajiray qashinka caadiga ah. Laga soo bilaabo bilowgan hoose, wuxuu noo keenay nidaam si fudud loo isticmaalo oo beddelaya sida milkiilayaasha guryaha ay u ilaashadaan hantidooda iyo qaab nololeedkooda ugu qaalisan. Dab-demiyeyaasha xirfadlayaasha ah waxay leeyihiin aalad wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo loogu talagalay ilaalinta magaalooyinka iyo guryaha ay u hanjabaan dabka kaymaha. U shaqeynta sida polymer-ka aad u nuugaya xafaayada, Barricade waxay qaadataa marar badan culeyskeeda oo biyo ah waxayna sameysaa "isbuunyo qoyan, dhegdheg ah." Xumbooyinkan biyaha ka buuxsamay waxay u hoggaansamaan dusha sare ee lakabyo moleculeed badan - mid kasta oo ka mid ah waa in la uumi bixiyaa ka hor inta lakabka salka ah uusan saameyn. Dab ka dib, waxay ku maydhaan biyo waana baaba'aya. Ka hortagga dabka - Daahfurka ololka - jelka xannibaadda dabka
Bell Performance Manufacturer Kiimikooyinka iyo Kiimikada kiimikada Waxyaabaha lagu daro shidaalka 112 jir Bell Performance, soo saaraha shidaalka ee Maraykanka ee uu aasaasay Robert Bell (oo soo saaray shidaalkii ugu horreeyay ee adduunka lagu daro 1909), wuxuu u dhoofiyaa adduunka oo idil. Waxaan ku xallineynaa dhibaatooyinka shidaalka ee warshad kasta, ha ahaato ethanol ama bio, shidaal, naafto, ama shidaalka dhalinta korantada, waxaanna u qaabeyneynaa baahiyaha shirkad kasta ee leh xalalka kiimikada, xalalka farsamada, iyo borotokoolka tijaabada ugu fiican, waxbarashada heer sare ah, iyo khibradda tababarka. Waxaan raadineynaa qeybiyayaal si ay u daboolaan suuqooda gaarka ah ee caalamiga ah ee kuxiran noocyadooda gaarka ah ee suuqyada warshadaha, ganacsiga iyo macaamiisha. Waxaan nahay Khabiir si aan adiga Khabiiro uga dhigno macaamiishaada! WeFixFuel.com! Ku darida Shidaalka - Waxyaabaha lagu daro Shidaalka - Ku darida Shidaalka Naaftada
Big Storm Brewery Manufacturer Alaabada Cunnada cabitaanka Waxaa la aasaasay sanadkii 2012 gudaha Pasco County, Duufaanta Weyn ayaa hada leh afar taprooms oo ku yaal Gobolka Sunshine: Clearwater, Odessa, Orlando iyo Cape Coral. Big Storm waxay qaadatay astaanta "Florida's Craft Beer Forecast," iyada oo soo saareysa saf firfircoon oo ka mid ah kuwa ugu cadcad Florida sida Tropic Pressure Florida Ale, oo lagu dhajiyay ubaxyo hibiscus ah, iyo Key Lime Shandy, oo lagu kariyey liin muhiim ah. Beer Farshaxan - Cabitaannada Aalkolada ah
Blue Tunnel Corp. Qaybiyaha Technology Information Amniga iyo Suuqgeynta BLUE TUNNEL waa shirkad Mareykan ah oo wax ka qabata xalinta amniga internetka si ay u siiso wax soo saarka iyo adeegyada teknoolajiyada ugu wanaagsan uguna wanaagsan si loo wanaajiyo amniga iyo tayada nolosha dadka. UJEEDDADA Si loo soo saaro natiijooyin wax ku ool ah iyadoo la adeegsanayo barnaamijka 'Sirdoonka Cilmiga Artifishaalka ah' (Video Analysis Deep Deep) barnaamijyada kaamirooyinka ilaalada ah si loo ogaado oo loo ogeysiiyo dhacdooyinka si otomaatig ah iyo waqtiga dhabta ah. PORTFOLIO Qoraalka ugu Wanaagsan Dunida. In ka badan 30 qaybood oo Cilmiga Sirdoonka ah oo loogu talagalay codsiyada kala duwan. VERTICALS Cities Smart, Warshadaha & Kaabayaasha Halista ah, Ganacsiga Agro, Tafaariiqda & Suuqgeynta, Bangiga & Maaliyadda, Gaadiidka, Xarumaha Dadweynaha & Dhismayaasha, Meelaha La Deggan Yahay, Deegaanka & Territory. QIIMAYNTA MADAXWEYNAHA Qiiq & DAB: Kaliya adduunka ee awood u leh in lagu ogaado qiiqa iyo / ama dabka leh kaliya hal kamarad IP ah. SILBADA & DHACA: Ogaanshaha qofka siibanaya iyo / ama ku dhaca xaalad khatar Aqoonsiga wajiga: Wuxuu aqoonsan yahay qofka, isirka, jinsiga, da'da, iwm. COVID-19: Waa xirmo lagu hubinayo inay dadku u hoggaansamayaan xeerarka faafa. Amniga Cyber ​​- Sirdoonka Artificial - Video iyo Falanqaynta Cilmiga - Software - Smart Cities IoT
Bob's Machine - Outboard Accessories Manufacturer Wax soo saarka Badda iyo Teknolojiyada Alaabada Gawaarida Dibedda Bob's Machine waa hogaamiyaha aduunka ee soo saarida qalabka mashiinka doonyaha dibada. Ujeedada ugu weyn waxay ku jirtaa Taarikada Hawada ee Haydarooliga, taas oo kor u qaadaysa mootadaada kor iyo hoos adigoo taabanaya badhanka badhanka dhaqaalaha shidaalka, waxqabadka, iyo helitaanka biyo qoto dheer. Qalabka kale waxaa ka mid ah sanka qaboojiyaha sanka qaada, alaabada mootada, iyo waxyaabo kaloo badan. Saxanka Haydarooliga - Qalabyada Waxqabadka Mootada ee Dibedda - Wiishka Korantada Dibadda - Qalabka Gawaarida Korantada
Broward College International Admissions Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Caawinta Fiisaha ee F-1 Broward College (BC) waxaa la aas aasay sanadkii 1960 waxayna ku taalaa qorax dhaca Koonfurta Florida agagaarka Miami iyo Ft. Lauderdale. BC waxay u adeegtaa 63,000+ arday oo ka kala socda 150 + dal waxayna leedahay 500+ F1 ardayda fiisaha ah. BC waxay bixisaa boqolaal barnaamijyo shahaadooyin ah. Shahaadada Associate of Arts (AA) waa qayb ka mid ah barnaamijkeena 2 + 2 ee u oggolaanaya ardayda inay dhammaystiraan 2-da sano ee ugu horreysa ee shahaadada bachelorka qiime aad u hooseeya, ka dibna si toos ah loogu wareejiyo mid ka mid ah 24 jaamacadood si loo dhammeeyo labadii sano ee la soo dhaafay. kuwa bacheeradooda. Darajooyinka Associate of Science (AS) waa barnaamijyo 2-sano ah oo loogu talagalay in loogu diyaariyo ardayda shaqo deg deg ah oo ku saabsan xirfadaha gaarka ah sida sayniska caafimaadka, tikniyoolajiyadda macluumaadka, farshaxanka garaafka iyo inbadan. Barnaamijka Ujeeddooyinka Waxbarashada Ingiriisiga (EAP) waxaa loogu talagalay in lagu baro in aad tahay arday isticmaalaya luqadda Ingiriisiga iyo MA AHA barashada Ingiriisiga aasaasiga ah. Barnaamijkani wuxuu kaloo ka caawiyaa ardayda haysta shahaadooyinka jaamacadeed ee dalkooda inay ka aqbalaan iskuul ka qalin jabiya USA. Barnaamijka Ardayda Caalamiga ah - Baro Barnaamijka Dibedda - Barnaamijka F1 Visa
Bugs Off Pads - Awesome Products Corp. Manufacturer Automotive Alaabada Nadiifinta Baabuurta Baaskiiladayada 'US Bugs Off® Pads' ee Mareykankeennu sameeyey ayaa si fudud u ah habka ugu wanaagsan ee looga saari karo cayayaanka dusha baabuurkaaga dushiisa, laakiin, wax badan ayey qabtaan! Si dhakhso ah & si fudud ayey u nadiifiyaan maxaa yeelay waxay u baahan yihiin oo keliya saabuun & biyo waxayna aad ugu badbaadaan dhammaan dusha sare ee gaadhiga oo aad baabuurkaaga oo dhan iyaga ku dhaqi karto, adiga oo ka qaadaya wasakhda, wasakhda, cayayaanka, daamurka waddada, saxarada shimbiraha, iwm. si aad ugu isticmaasho: Rinjiga, jaakad cad, Caag, Sawirro, Bir, Muraayad Ma jiro shey kale oo cayayaanka looga saarayo sheegashadaas. Waxaan u dammaanad qaadeynaa badeecadeena inay ku qanacdo macaamilka 60 maalmood, oo ka dheer inta badan badeecadaha ugu dambeeya. Waxyaabaha loo yaqaan 'Awesome Products Corp.' waxaa la aasaasay 1996 ilaa waqtigaasna waxay soo saareysay suufkan nadiifinta diyaaradaha, gawaarida, gawaarida waaweyn, iyo RV-yada. Waxaan leenahay 1 shati iyo 5 calaamado ganacsi oo federaal ah. Qaar ka mid ah macaamiisheenna ku sugan qaybta baabuurta waa: Ace Hardware, Automotive Intl., Dukaamada Guriga ee Menard, Stoner Inc., Warren Distribution. Faahfaahinta suufiyada - Tafaasiisha Baabuurta - Nadiifinta Baabuurta - Alaabada Nadiifinta Doomaha - Alaabta Nadiifinta Gawaarida
Caliber Sales Engineering Manufacturer Duulista iyo Hawada Dayactirka Dayactirka Diyaaradaha iyo Dayactirka Aasaasay sannadkii 1987, Caliber Sales Engineering waa hogaamiye la aqoonsan yahay ee wadarta taakulaynta saadka ee wakaaladaha Dhulka, Cirka, iyo Badda. Oo ay ku jiraan, maareynta qandaraaska, shaqaalaha, hagaajinta nidaamka, injineernimada & waxsoosaarka, tababarka, iyo taageerada goobta. Awoodaheena waxay kujiraan cilaaqaadkayaga dhow ee wada shaqeynta leh OEM-da waaweyn iyo soosaarayaasha qeybaha iyo sidoo kale xarumaha dayactirka ee FAA. Intaa waxaa sii dheer, CSE waxay leedahay awood soo saarid gudaha iyo dayactir ah oo ay ku jiraan Foomka Fit & Function, Barnaamijyada Kordhinta Adeegga Nolosha ee Teknolojiyada & Casriyaynta, soo saarida batteriga iyo xeedho, iyo sidoo kale dib u habeynta iyo dayactirka qeybaha militariga. Sida WOSB, ISO 9001: 2015 Diiwaangashan, AS9100D & AS9120B Compliant, iyo TRACE shirkad la xaqiijiyay, Caliber wuxuu fahamsan yahay muhiimadda ay leedahay ilaalinta heerka ugu sarreeya ee Maareynta Tayada. Waxaan sare u qaadnay baarka sida aan ognahay macaamiisheennu. Taageerada Saadka ee Wakaaladaha Dhulka, Hawada, iyo Badda - MRO - Maareynta Qandaraaska - Isbedelada Nidaamka - Injineeriyada Dib udhaca - Soosaarka Qandaraaska- Taageerada Goobta - Tababar Farsamo
CellAntenna Adeeg bixiye Technology Information Isgaarsiinta CellAntenna Naqshadeynta caalamiga ah, soosaarista iyo dhoofinta xalalka balaadhinta dhamaadka-hore ee loogu talagalay barnaamijyada raadiyaha si loo kordhiyo baaxadda iyo waxqabadka nidaamyada xeeladeysan ee RF oo ugu horreyn ku saleysan tiknoolajiyadda lagu qeexay barnaamijyada 'Software Defined Radio (SDR)'. Macaamiisheenna adduunka oo idil waxaa ka mid ah shirkado iyo hay'ado dawladeed oo isku daraya xalalka isku dhafan iyo softiweerka si looga hortago, loo helo, loona xakameeyo taleefannada gacanta ee dambiilayaashu isticmaalaan - oo ay ku jiraan argagixisada. Waxaan naqshadeynaa iskuna dhafnaa qalabkeena Nidaamka Antenna ee loo qeybiyey (DAS) oo bixiya amniga taleefanka gacanta ee dhismayaasha dowladda, xarumaha iyo xabsiyada. Xalkeenna la qaadan karo waxay siinayaan xiriir sugan oo aamin ah hawlgallada taatikada. CellAntenna Adeegyada cusub ee caalamiga ah iyo taakulaynta ayaa xaqiijiya guusha hawlgalka. Kooxdayada khibrada leh ee injineernimada waxay siisaa taageero naqshadeynta isdhexgalka goobta. 19 sano oo khibrad ah, CellAntenna Wax soo saarka caalamiga ah “Waxaa lagu sameeyay Mareykanka” waxaana lagu soo saaray xaruntayada Florida. Bixiyaha Adeegga Isgaarsiinta - Injineernimada Isgaarsiinta - Horumarinta Nidaamyada Isgaarsiinta iyo Isku-darka
Central Florida Development Council Urur aan dawli ahayn Ururka Horumarinta Dhaqaalaha Horumarinta Ganacsiga The Central Florida Development Council (CFDC) waa Iskaashiga Horumarinta Dhaqaalaha ee Degmada Polk sida ay ugu talagaleen Gudiga Gobolka ee Komishanka Degmooyinka. Hadafka CFDC waa inuu kobciyo dhaqaale ku saleysan xirfad sare, ganacsi waarta mushahar sare. Waxaan diiradda saareynaa qorista iyo ballaarinta ganacsiga gudaha iyo kuwa caalamiga ah, u doodista ganacsiga, fududeynta iskaashiga iskaashiga iyo hormarinta dadaallada istiraatiijiyadeed ee Bartamaha Florida ee Polk County. Dawlada Hoose - Horumarinta Dhaqaalaha - Dib u Dejinta Shirkadaha - Dhiirrigelinta Dhoofinta
CHAMPS Software Inc. Adeeg bixiye Technology Information Horumarinta Barnaamijka Barnaamijka 'CHAMPS Software' wuxuu diiradda saarey soo saarista iyo hirgelinta xalalka softiweer ee shirkadaha u suurta gelinaya inay hagaajiyaan wareegyada nolosha ee hantidooda raasumaalka ah oo ay ku jiraan xoogagga shaqada, qalabka, tas-hiilaadka, gawaarida, qalabka, qalabka dayactirka, iyo hantida toosan. Haatan iyada oo loo yaqaan 'CHAMPS Mobile', shaqeynta xalalka 'CHAMPS CMMS' ayaa lagu kordhiyay iyadoo la siinayo awoodo qadla'aan ah. Waad sii wadi kartaa helitaanka macluumaadkaaga muhiimka ah oo aad duubi kartaa waxqabadyadaada xitaa intaad go'an tahay. Barnaamijka Dayactirka Hantida Hantida - Barnaamijka Maareynta Alaabada- Barnaamijka Maareynta Qulqulka Shaqada - Barnaamijka Maareynta Iibsiga - Barnaamijka Nidaamyada Ganacsiga
Chemical Injection Technologies, Inc. SUPERIOR™ Manufacturer Nadiifinta Farsamada Daaweynta Biyaha iyo Dabiiciga Qayb ka noqo Heerka Dahabka. SUPERIOR systems Nidaamka quudinta gaaska iyo dareeraha iyo qalabaynta. Markaad iibsaneyso SUPERIOR ™ Gas Chlorinator ama Nidaamka Quudinta Kiimikada ee VacuFeed, waxaad ka heli doontaa suuqa wax soo saarka ugu fiican uguna farsamada sareeya. Muddada. Teknoolojiyada duritaanka kiimikada, Inc., waxay u heellan tahay qanacsanaanta macaamilka, amniga, tikniyoolajiyadda firfircoon, iyo qaabeynta ka sareysa. Waxaan ballanqaadeynaa in dhammaan xooggeena iyo hibooyinkeenna si joogto ah looga faa'iideysan doono si loogu ilaaliyo alaabada SUPERIOR ™ geeska geeska teknolojiyadda si had iyo jeer laguu xaqiijiyo tayada ugu sareysa ee naqshadeynta iyo qalabka. Waxaan sii ballan qaadaynaa inaadan waligaa ka badnaan doonin taleefan ama fakis ka fogaan dareenkaaga shaqsiyeed. Inta badan su'aalaha joogtada ah waxaa qaban kara ganacsadahaaga SUPERIOR,, laakiin haddii aad waligaa u baahato ama aad rabto jawaabta su'aal farsamo ama aad leedahay faallooyin iyo soo-jeedino ku saabsan qalabkaaga SUPERIOR,, marwalba waan kuu joognaa adiga. Aynu ku tusinno sababta dhammaan alaabooyinkeennu u yihiin KHATAR! Waxyaalaha Daaweynta Biyaha Qashinka - Chlorinators - Qalabka Falanqaynta Biyaha Qashinka - Teknolojiyadda Daaweynta Biyaha Qashinka
Chicago Stainless Equipment, Inc. Manufacturer Qalabka iyo Qalabka Warshadaha Aaladaha iyo Dareemayaasha Qiyaasaha cadaadiska nadaafadda iyo heerkulbeegyada dijitaalka ah ee fayadhowrka, dareemayaasha heerkulka (RTD's & Transmitters) dareemayaasha cadaadiska, heerkulbeegyada analog (Bi-Birta) Qiyaasaha cadaadiska warshadaha ee birta aan caadiga ahayn, Thermo-ceelasha. Cabirrada Cadaadiska Nadaafada - Heerkulbeegyada Dijital ah - Qiyaasaha - Qalabka Warshadaha
Citrusway Nail & Skin Solutions Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Citrusway® waxaa laga abuuray fikradda ah in la keeno fungus aamin ah oo dabiici ah iyo alaabada maqaarka tirada sii kordheysa ee macaamiisha raadinaya beddelaad wax ku ool ah. Hadafkeenu waxaa ka mid ah ujeedka ah in la baro macmiilka mashiinka cajiibka ah ee jirka bini'aadamka yahay iyo sida ugu wanaagsan ee uu u shaqeeyo iyada oo aan saameyn ku yeelan kiimikada. Maaddaama isdhexgalka alaabooyinka dabiiciga ay ka dhacayaan qayb kasta, Citrusway waa wax weyn oo lagu daro qeyb ka buuxan sunta, waxyaabaha kiimikada ku saleysan Daryeelka Shakhsi ahaaneed - Alaabada Qurxinta - Qurxinta - Daryeelka Cagaha - Daryeelka Cidiyaha- Daryeelka Maqaarka
City of Miramar, FL Dowladda Ururka Horumarinta Dhaqaalaha Dawlada Hoose Miramar waa beel ka kooban 31 mayl laba jibaaran oo leh qiyaastii 140,000 oo qof. Da'da dhexdhexaadka ah ee dadku waa 36 iyo kuwa 25 ama ka weyn 90% waxay haystaan ​​diblooma dugsiga sare iyo 30% waxay haystaan ​​shahaadada bachelorka. 40% dadku waxay ku dhasheen dalka dibadiisa halka 47% ay ku hadlaan luqad kale guriga. Waxaa jira ku dhowaad 43,000 oo guryo, 70% ka mid ah ayaa iska leh oo leh qiime dhexdhexaad ah oo qiyaastii ah $ 264,000. Dakhliga dhexdhexaadka ah ee qoyska waa qiyaastii $ 66,560. Dhinaca ganacsiga, waxaa jira ku dhowaad 2,700 ganacsiyo leh 40,000+ shaqaale. Qeybaha ganacsiga ee caanka ah waxaa ka mid ah duulista hawada, isgaarsiinta, daryeelka caafimaadka iyo wax soo saarka. Waxaa jira xafiisyo qorsheysan iyo jardiinooyin ganacsi oo warshadeed iyo xarumo tafaariiqeed heer-bulsho ah. Laga soo bilaabo 2021, waxaa jira 3.5 milyan oo dhudhun laba jibbaaran oo xafiiska ah; 3.5 milyan fuudh oo laba jibbaaran oo tafaariiqda ah; iyo 9.6 milyan oo laba jibbaaran oo warshad ah. Dib-u-dejinta Duulimaadka - Soo-saare Wax-soosaara - Horumarinta Ganacsiga - Maalgashiga Tooska ah ee Dibadda - Dib-u-dejinta Shirkadaha
CityVitae - Electromobility At Your Service Manufacturer Nadiifinta Farsamada Alaabada Gawaarida Korantada iyo Teknolojiyada Kaalay oo la kulan kooxda meesha CityVitae! Waxaan u fidinaa adeegyo elektiroonig ah adeegsiga shirkadaha iyo dhismayaasha. Qalabka Dib-u-buuxinta Gawaarida Korantada - Teknoolojiyadda Dib-u-buuxinta Gawaarida Korantada - Teknolojiyada Gawaarida Korantada - Nidaamyada Qaybinta Tamarta Korantada
Collection 2000® & Hombre® Qaybiyaha Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Iyadoo sannado khibrad iyo khibrad u leh soo-saarka iyo soo-dejinta / dhoofinta Mareykanka, Collection 2000, Inc waxay ku faraxsan tahay in loo tixgeliyo inay tahay hoggaamiye wax soo saar. Go'aan kasta waxaa dhiirrigeliya himiladeenna ugu weyn, oo ah inaan siino heerka ugu sarreeya ee wax soo saarka iyo adeegyada dukaamada iyo macaamiisha labadaba. Anaga oo u hogaansamayna ku dhaqanka Hab-soosaarka Wanaagsan iyo habka wax-u-qaybinta, waxaan ku dadaalnaa sidii loo ilaalin lahaa xiriirada xirfadeed ee muddada fog lala yeelanayo dhammaan qeybiyeyaashayada iyadoo aan loo eegin goobta. In warshadani si dhakhso leh u beddeleysa, waxaan ogaanay muhiimadda ay leedahay inaan si joogto ah u cusbooneysiinno qaabkeenna si aan ula sii joogno suuqa, oo ay naga go'an tahay sidaas. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ka baaraandegto liiskayaga oo aad nala soo xiriirto wixii su'aalo ah. Alaabada Daryeelka Shakhsiyeed - Udgoon - Looshinnada - Kiriimyada - Qurxinta
CONNEX Florida Adeeg bixiye Ururka Horumarinta Dhaqaalaha Isku xirka Warshadaha Connex Florida waa xog-ururin karti-online ah iyo iskuxir ku xirnaanta kaa caawinaysa inaad ku xirnaato soosaarayaasha, inaad hesho ilo isla markaana aad la qabsato baahida dalabyada ee beddelaya. Dhiirrigelinta Alaabada Florida - Macluumaadka Soo-saaraha - Soo-saarka Alaabta - Raadinta Alaabada - Soo-saareyaasha - Warshadaha
CreditBench Powered By First Home Bank Adeeg bixiye Adeegyada Maaliyadeed iyo Xirfadle Adeegyada Bangiga CreditBench, oo ay maamusho Bangiga Guriga ee Hore, ayaa xarunteedu tahay magaalada St. Petersburg, Florida. Si joogto ah u qiimeynta mid ka mid ah 10 deyn bixiyeyaasha SBA ee Mareykanka, iyo deynta ugu sareysa ee SBA ee deymaha ka hooseeya $ 350,000, Qeybta First Home Bank ee CreditBench waxay maalgelisay in ka badan $ 1 bilyan oo deyn ah SBA macaamiisheena dalka oo dhan. Bixinta amaahda ganacsiga yaryar laga bilaabo $ 50,000 illaa $ 5 milyan si loo daboolo baahiyahaaga ganacsi, sicirkayaga tartanka, shuruudaha is bedbeddelaya, iyo go'aan qaadashada degdegga ah ayaa naga caawisay inaan kasbano Xaaladda Qaranka ee Amaahda ee SBA. Soo Dhoofinta iyo Dhoofinta Maalgelinta - Amaah Ganacsi - Hantida Shaqada - Barnaamijyada Amaahda ee SBA - Amaahda guryaha
Crescent Garden Manufacturer Alaabada Macaamiisha Jardiinooyinka Beeraha Maaddaama ay tahay hoggaamiye ay ku kalsoon yihiin qandaraasleyda, khubarada dhirta, xarumaha jardiinooyinka madaxbannaan iyo xannaanooyinka adduunka oo dhan, waxaan bixinnaa weelal iyo agabyo kala duwan oo ay ku kala duwan yihiin naqshad casri ah iyo hal-abuurnimo horumar leh oo soconaya oo soconaya oo loogu talagalay guusha, dhiirrigelinta dhirta At Crescent Garden, waxaan aaminsanahay in beeraleydu ay adiga kuu shaqeyso, oo aysan u shaqeyn si kale. Waan fahamsanahay waxa sida ugu fiican ugu shaqeeya dhirta caafimaadka qabta iyo dadka iyaga jecel. Iyada oo leh aragti ah in beerta laga dhigo mid la heli karo oo ku habboon qof walba, iyada oo la riixayo heerarka warshadaha wixii suurtagal ah, waxaan u huraynaa nafteena Crescent Garden ballanqaad macmiil oo fudud: Waxaan kaa caawinaynaa inaad korto. Beeraleyda Gudaha iyo Dibadda - Agabka Beeraha - Sahayda Muuqaalka - Dhul Beereyaasha - Weelasha Ubaxa
Cusano's Bakery Manufacturer Alaabada Cunnada Roodhida iyo Alaabada rootida Cusano's Bakery waa jiilka 5-aad ee rootiga rootida qoysku leeyahay, kuna takhasusay alaabooyinka la qaboojiyey. Cusano wuxuu bilaabay inuu dubto magaalada New York sanadkii 1907 kadib markuu ka yimid Talyaaniga. Warshad Bakery Cusano waa xaalad farshaxan 250,000 sq. Ft. Xarunta ku taal Koonfurta Florida. Waxaan nahay SQF Qeybta 3aad oo Hantidhawr lagu hubiyay laguna xaqiijiyey qiimeyn heer sare ah. Waxaan hadda soo saarnaa in ka badan 150 nooc oo rooti ah. Waxaan dayactireynaa nidaamyo badan oo dubista wax soo saar si aan u soo saarno rootiga / farshaxanka rootiga / kalluunka duban / duub dhab ah. Waxaan hadda u qeybineynaa alaabtayada barafaysan Mareykanka oo dhan, Kariibiyaanka, Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika. Roodhi La Qaboojiyey - Rooti Fresh ah - Alaab Caano ah
DermaSensor Manufacturer Sayniska Nolosha & Teknolojiyada Caafimaadka Qalabka maqaarka DermaSensor waa shirkad qalabka caafimaadka ee qalabka caafimaadka oo qaabeysay isla markaana ganacsi ka sameysay qalab dareemayaal gacmeed la awoodi karo oo u oggolaanaya daaweeyayaasha inay qiimeeyaan dhaawaca maqaarka bukaanka halista kansarka ilbiriqsiyo gudahood. Qalabku wuxuu adeegsadaa shey-baaris baahsan oo laastik ah iyo algorithm-ku-barashada mashiinka si loo helo halista sare ama natiijada halista hoose ee dhaawacyada maqaarka. Qalab Lagu Ogaado Kansarka Maqaarka - Baadhista Kansarka Maqaarka - Melanoma - Qalabka Dermatolojiga - Qalabka Caafimaadka
DiSTI Corporation Adeeg bixiye Technology Information Tababarka Farsamada iyo Software Xarunteeduna tahay Orlando, Florida the DiSTI Corporation wuxuu ahaa hogaamiye caalami ah xalka tababarenimada dalwaddii iyo aaladaha horumarinta HMI muddo ka badan 25 sano. Duuliyeyaasha Duulista - Jilayaasha Tababarka - 3D Tababbarka Fudud - Tababbarka Sayniska Nolosha - Nidaamyada Dayactirka Farsamada ee Nidaamka Tababarka
Doc-Solutions - Secure Your Documents Adeeg bixiye Technology Information Dukumentiga Teknolojiyada Amniga We secure your documents xitaa kadib qeybinta! Dunida maanta, dukumiintiyadaada waxaa laga heli karaa goob kasta, waqti kasta, qalab kasta. Oo aan lahayn nabadgelyo sax ah, cidna. Caqabada: ilaali dhamaan dukumiintiyadaada waqtiga oo dhan aalad kasta. Xalka: Doc-Secure wuxuu ku ilaalin karaa macluumaadkaaga dhammaan qalabka iyo shabakadaha, labadaba nasashada iyo socdaalka. Doc-Secure waxay si aan kala go 'lahayn ugu shaqeysaa darawallada adag ee maxalliga ah, emaylka iyo keydinta daruuraha. Maaddaama ay u fududahay qof walba inuu ka soo galo feylashaada meel kasta, way kula fududdahay inaad ka ilaaliso feylashaada meel kasta. Dukumiintiga Maareynta Xuquuqda Dijital ah - Amniga Dukumentiga - Teknolojiyada Maareynta Dukumintiyada - Teknolojiyada Amniga Dukumentiyada - Qarsoodi - Barnaamijyada iyo Isdhexgalka Macaamiisha - La-tashiga Teknolojiyada
Douglas Washing and Sanitizing Systems Manufacturer Qalabka iyo Qalabka Warshadaha Diyaarinta Cuntada In ka badan 40 sano oo waayo-aragnimo ah, Douglas Maydhista iyo Nadiifinta waa hoggaamiye warshadeed oo bixiya xalal wax ku ool ah oo hufan iyo fayadhowr xalal ah. Waxaan gacan ka geysaneynaa yareynta halista badbaadada cuntada iyadoo la adeegsanayo nidaamyo dhaqda oo nadiifiya konteynarrada, rack-yada, iyo qeybaha ay wasakhdu ku horumari karto. Ku takhasusay soo saarista cuntada, cabitaanka, xashiishadda iyo warshadaha qaybinta, Douglas waxay bixisaa in ka badan 80 nooc oo ah qalab nadaafad oo otomaatig ah. Dhammaan qalabka waxay buuxinayaan heerarkii ugu dambeeyay ee FSMA. Xarunta Douglas Maydhista iyo Nadiifinta waxay bixisaa waxsoosaar ballaadhan, uruurin, iyo tijaabooyin. Jawigaani wuxuu hubiyaa tayada, wuxuu xoojiyaa heerarka sare ee amniga, wuxuuna muujiyaa sida ay nooga go'an tahay inaan macaamiisheenna ka horreysiino. Nidaamyada Aaladda otomaatiga ah - Nidaamyada Nadaafadda otomaatigga ah - Qalabka Soo-saarka Cuntada iyo Cabitaanka - Qalabka Wax-soosaarka Nafaqada
DRV Institute of Management Adeeg bixiye Adeegyada Maaliyadeed iyo Xirfadle Tababar iyo Shahaadayn Waxaan nahay khubaro ganacsi caalami ah oo bixinaysa khibrad & xeelado wax ku ool ah si looga caawiyo milkiilayaasha ganacsiyada inay koraan. Waxaan haynaa gacmo fara badan oo khibrad u leh maareynta. Waxaan barnaa xirfadaha maaraynta ee ku habboon ee aad u baahan tahay si aad ugu maamusho ganacsigaaga si wax ku ool ah oo aad u guuleysato. Meelahayaga khibrada leh waxaa ka mid ah tababarka adeegga macaamiisha, la talinta ganacsiga & tababarka, ka caawinta ganacsatada inay bilaabaan / u raraan shirkadaha Florida iyo sida loo ballaariyo adduunka, badbaadada cuntada & fayadhowrka, iyo tababarka shaqaalaha. Waxaan nahay koox xirfadlayaal ganacsi ah (maamuleyaal) iyo aqoonyahanno aqoonyahanno ah oo wata shahaadooyin qalin-jabin ah iyo in ka badan 20 sano oo khibrad ah. Adeegyada La-talinta Maareynta ee Marti-gelinta iyo Ganacsiga Aasaasiga ah - Tababbarka Adeegyada Cuntada - Tababbarka Warshadaha Martigelinta - Tababbarka Adeegga Macaamiisha - Tababarka Shaqaalaha
Ecologel Solutions, LLC Manufacturer Kiimikooyinka iyo Kiimikada kiimikada Kiimikooyinka Beeraha Ecologel waxay leedahay 30 + sano oo waayo aragnimo ah oo bixisa xalal hal abuur leh oo ku saabsan maareynta qoyaanka carrada, nafaqada dhirta, xididaynta biostimulants, sharaxayaasha balliyada, iyo xakamaynta boodhka wadada. Wax soo saarka waxaa ka mid ah: Hydretain® - waa xalka hygroscopic humectant oo ka caawiya dhirta inay adeegsadaan huurka carrada oo haddii kale uumi baxa uumi baxa. Tirtir dhibco qalalan, yaree niyadda, kordhinta wax soo saarka dalagga, hagaajinta biqilka, iyo in si weyn loo yareeyo dalabyada waraabinta ee cawska, qurxinta, iyo dalagyada beeraha. CytoGro® - biostimulant xidid-ku-soo-saarka badda oo kordhiya xididdada iyo koritaanka dambe iyada oo aan keenin koritaan saaid ah. Bakteeriyada Biya-biyoodka ee loo yaqaan 'Aqua-T ™ Pond Bacteria' - oo si dabiici ah u dhacda bakteeriyada si loo caddeeyo biyaha iyadoo la yareynayo haraaga balliga iyo urta. Xakamaynta Boodhka ee GelTrak® - waxay isticmaashaa ciidda iyo huurka hawada si loo yareeyo boodhka loona yareeyo waraabinta dusha sare ee wasakhda. Teknolojiyada BioPro® - xariiqda alaabada cuntada dhirta dareeraha ah, xirmooyinka nafaqeeyayaalka yar yar iyo alaabada xoojinta carrada. Daryeelka Biyaha Beeraha - nafaqeeyayaalka dareeraha ah - Biyoolajiyeyaasha - Alaabooyinka Xakamaynta Algae - Ku darida Ciida
Embry-Riddle Aeronautical University Adeeg bixiye Hay'adda Waxbarashada Dugsiga Duulista ee Duulista iyo Teknolojiyada Embry-Riddle Aeronautical University waa jaamacadda adduunka ugu weyn, si buuxda loo aqoonsan yahay oo diiradda saareysa Hawada, Duulista, Kombuyuutarrada iyo Teknolojiyada, Amniga iyo Sirdoonka iyo warshadaha khuseeya Sayniska. Labadeena xarumood ee la degan yahay ee Mareykanka, mid ka mid ah Arizona iyo mid kale oo ku yaal Florida, ardaydeena si aad ah ayaa loogu diyaar garoobay, in 95% ay ka shaqeeyaan warshadooda kala duwan hal sano gudahood qalin jabinta. The Embry-Riddle Aeronautical University Xarunta Aasiya waxay ku taal Singapore, waxayna bixisaa waqti-dhiman, barnaamijyo qalin-jabineed oo isku-dhafan oo qaas ah loogu talagalay xirfadlayaasha shaqeeya. Booska - Duulista- Kombuyuutarrada iyo Waxbarashada Teknolojiyada- Amniga iyo Sirdoonka iyo Tababbarka Sayniska La Adeegsaday
Enterprise Florida Adeeg bixiye Ururka Horumarinta Dhaqaalaha Horumarinta Ganacsiga Beddelida Muuqaalka Muuqaalka Horumarinta Dhaqaalaha ee Florida. Enterprise Florida, Inc (EFI) waa iskaashi guud iyo mid gaar ah oo udhaxeeya ganacsatada Florida iyo hogaamiyaasha dowlada waana ururka hormarinta dhaqaalaha ee Florida. Hadafka EFI waa balaarinta iyo kala duwida dhaqaalaha gobolka iyadoo loo marayo shaqo abuur. EFI waxay lashaqeysaa shabakad gobolka oo dhan iskaashatooyin ka ah horumarinta dhaqaalaha waxaana maal galiya Gobolka iyo ganacsiyada ganacsiga gaarka loo leeyahay. EFI waa hay'adda aasaasiga u ah gobolka ganacsiga iyo horumarinta dhoofinta oo taageera in ka badan 60,000 ganacsiyada FL. EFI sidoo kale waxay taageertaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa laga tirada badan yahay iyada oo loo marayo barnaamijyada raasamaalka, iyadoo kor u qaadaysa Florida oo ah meel ganacsi oo horudhac ah. Enterprise Florida qortaa ganacsi cusub waxayna ka shaqeysaa sidii loo hanan lahaa loona ballaarin lahaa kuwa jira. EFI waxay diirada saareysaa qeybahan warshadaha: duulista iyo hawada, cilmiga nolosha, tikniyoolajiyadda macluumaadka, difaaca & amniga wadankiisa, tamar nadiif ah, adeegyo maaliyadeed & xirfadeed, wax soo saar iyo wixii ka baxsan. Horumarinta Dhaqaalaha - Horumarinta Ganacsiga - Dhoofinta - Ganacsiga Caalamiga ah - Haysashada - Qorista
Enzymedica Manufacturer Sayniska Nolosha & Teknolojiyada Caafimaadka Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Waxa la aasaasay 1998 Florida USA, Enzymedica waa # 1 nooca ugu fiican ee lagu iibiyo enzyme-ka oo ku saleysan xogta baaritaanka tafaariiqda tafaariiqda SPINS ee madaxa bannaan kanaalka tafaariiqda dabiiciga ah. Tobankii sano ee la soo dhaafay, Digest Gold wuxuu sii wadaa inuu u qiimeeyo sida # 1 Waxyaabaha ugu fiican ee Iibinta enzyme-ka oo leh tiknoolajiyaddeeda Thera-blend ™. Shirkaddu waxay ballaarisay faylalka ay ka kooban tahay waxyaabaha ka soo baxa enzyme-ka si ay uga jawaabto baahida sii kordheysa ee macaamiisha kuwaas oo raadinaya ikhtiyaarro caafimaad leh oo loogu talagalay hagaajinta caafimaadka dheefshiidka iyo guud ahaan caafimaadka jirka. Caafimaadka Dheefshiidka Dabiiciga ah - Enzymes - Sunta sunta - Kaabisyada nafaqada ah - Nadiifinta - Taageerada Difaaca
etherium® by E-Stone Manufacturer Qalabka Dhismaha Waxyaabaha dhagaxa ee la farsameeyay In ka badan 20 sano oo waayo aragnimo ah oo aan ku hoos jirnay suumankayaga, waxaan soo saarnay habab casri ah iyo habab wax soo saar hal abuur leh si macaamiisha maanta loo keeno waxay rabaan, markay rabaan. Kuweena etherium® By E-Stone dusha sare waxay leeyihiin muuqaal dhagxaan dhif ah laga soo jaray meelaha laga soo qodayo walina waxaa lagu sameeyay ilaa 78% alaabada dib loo warshadeeyay kadib, taasoo kuu keeneysa wax soo saarka ugu tayada sareeya iyadoo la ilaalinayo lana ilaalinayo kheyraadka dhulkeena. etheriumAces sagxaduhu waa kuleyl, wasakh iyo xoqida waxayna u roon yihiin sidii hore weligood iyadoo 24/7 lagu dhisay Microban® Antimicrobial Technology. TREND Group sidoo kale waa hogaamiye caalami ah soosaarka mosaic muraayad midab leh, dhaldhalaalka venetian, iyo tesserae caleen dahab ah. Iyada oo leh soosaarid iyo tas-hiilaad isugu jira afar qaaradood iyo in kabadan 50 wadan, TREND Group waxay awood u leedahay inay gurigaaga ama ganacsigaaga kuugu keento agabka ugu tayada sareeya adduunka oo dhan. Dhismeyaasha Dhagaxyada Injineerka ah - Dabaqyada - Gogosha - Darbiyada iyo Daboolka Saqafka Etherium - Sahayda Dhismaha - Dayactirka Ganacsiga iyo Degaanka
Export-Import Bank of U.S. Dowladda Adeegyada Maaliyadeed iyo Xirfadle Maalgelinta Dhoofinta EXIM waa hay'ad madaxbanaan oo federaal ah oo kobcisa isla markaana taageerta shaqooyinka Mareykanka iyadoo siineysa amaah dhoofinta tartan iyo lama huraan ah si ay u taageerto iibinta alaabada iyo adeegyada Mareykanka ee iibsadayaasha caalamiga ah. Aaladda adag ee loo yaqaan 'EXIM' waxay u dhigmi kartaa garoonka caalamiga ah ee dhoofinta Mareykanka markay la tartamaan shirkadaha shisheeye ee taageerada ka helaya dowladooda. EXIM waxay kaloo gacan ka geysaneysaa kobaca dhaqaalaha Mareykanka iyadoo gacan ka geysaneysa abuurista iyo joogtaynta boqolaal kun oo shaqooyin ah dhoofinta ganacsiyada iyo silsiladahooda saadka ee Maraykanka oo dhan. Sanadihii la soo dhaafay, ku dhowaad 90 boqolkiiba wadarta tirada oggolaanshaha hay'adda ayaa si toos ah u taageeray ganacsiyada yaryar. Caymiska Daynta Dhoofinta - Dhoofinta Shaqada Dhoofinta - Dammaanadaha Amaah Ganacsi - Deymaha Ganacsiga - Maalgelinta Ganacsiga
Falcon's Creative Group Adeeg bixiye Adeegyada Maaliyadeed iyo Xirfadle Horumarinta Beerta Mawduuca Falcon's Creative Group waa hay'ad caalami ah oo ku takhasustay abuurista khibrado mug leh. Labaatankii sano ee la soo dhaafey, shaqadeenna waxaa shidaal ku darsaday iskudhaf isku-qas ah oo ku xeel dheer cilmiga farsamada, naqshadeynta caqliga leh, soosaarida waxyaabaha dhijitaalka ah ee firfircoon, iyo horumarinta wax soo saarka cusub. Shirkaddu waxay ka kooban tahay saddex qaybood: Falcon'Treehouse, FalconWarbaahinta Dijital ah, iyo FalconRuqsad siinta. Falcon'Treehouse' wuxuu boosaska u beddelaa adeegyada naqshadeynta sida qorsheynta heerka sare, muuqaalka dhismaha, qaabeynta xafiiska shirkadaha, iyo qaabeynta khibradaha. Falcon'' Digital Media 'waxay soo saartaa khibrado gaar ah oo ku saleysan waxyaabaha la adeegsanayo iyadoo la adeegsanayo horumarkii ugu dambeeyay ee saameynta muuqaalka (VFX), xaqiiqda dalwaddii (VR), xaqiiqda la kordhiyay (AR), xaqiiqda isku dhafan (MR), naqshada maqalka, isdhexgalka, iyo horumarinta software Falcon'' Shatiyeynta waxay bixisaa alaabooyin badan oo hal abuur leh, oo ay ku jiraan xalal jilitaan isku dhafan oo isku dhafan, tikniyoolajiyad is-dhexgal, iyo sifooyin aqooneed. Naqshadaynta Mowduuca Park - Soosaarida Mawduuca - Naqshadeynta Biyaha - Qorshaynta Masterka
FIU Online - eLearning Services Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Daraasaadka Kuleejka Guud FIU Online waa waaxda barashada internetka ee Florida International University. In ka badan 20 sano, waxaan ku jirnay geeska naqshadeynta koorsada dijitaalka ah. Maanta waxaan bixinnaa in ka badan 100 darajo oo khadka tooska ah ah waxaanan u adeegnaa in ka badan 42,000 oo arday, dhammaantoodna waxaan kasbaneynaa qiimeyn heer qaran oo tayo iyo marin u leh. Laakiin FIU Online sidoo kale waxay horumarisaa barashada internetka oo tayo sare leh oo loogu talagalay warshado kala duwan, sidoo kale. Waa tan waxa aan kuu qaban karno: Wax-soo-saarka Wax-barashada: Iyadoo isha lagu hayo isbeddellada ugu dambeeyay ee ka-qaybqaadashada, waxaan ka dhigi doonnaa mawduuca inuu noolaado. La-tashiga Horumarinta Xirfadeed: Waxaan u qaabeyneynaa waxqabadyada barashada tooska ah ee ganacsigaaga ganacsigaaga si loo hubiyo heer sare kooxdaada Naqshadeynta Tababarka: Khabiirradeena ma ahan oo keliya inay la socdaan tiknoolajiyada ugu kulul ee la heli karo laakiin waxay la socdaan cilmi baaristii ugu dambeysay ee ku saabsan barashada fogaanta, sidoo kale. Naqshadeynta Muuqaalka: Waxaan u adeegnaa bilic-heer heer hay'adeed ah oo ku aaddan baahida waxbarasho ee ka jirta dhammaan warshadaha. Multimedia: Waxaan soo saarnaa fiidiyow ku saleysan bartaha, sawir qaadis, iyo cod. Daraasaadka Guud ee Kuleejka - Baro Barnaamijyada Dibedda - Machadka Cilmi-baarista
Flame Boss - Controllers & Thermometers Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Bannaanka Kariska Flame Boss ilaaliyayaasha heerkulka ee waxyaabaha lagu karsado dhuxusha iyo kuwa sigaar caba waxay kaa dhigayaan inaad noqoto maamule wanaagsan. Qiiq jilicsan iyo hilib qoyan leh xakameyn heerkul sax ah oo lagu celin karo qiijiyehaaga sida dabiiciga loogu talagalay - hooseeya iyo gaabis. Kaliya ku xir, deji oo iska illow. Flame Boss halkaas ayey kaga qaaddaa iyadoo kuleylka ku koontarooleysa afuufiyaha kor iyo hoos u dhacaya, halka baaritaanka hilibka uu kormeerayo heerkulka gudaha si aad u ogaato goorta si fiican loo cabayo. Heerkulbeegteena cusub ee wifi waxay kormeeri kartaa ilaa afar heerkul isla markiiba qalabkaaga, foornada, cooker-ka gaabiska ah, iyo in ka badan. Adiga oo ku siinaya hadiyad ku habboon, waxaad isha ku hayn kartaa heerkulkaaga meel kasta oo aad nagala joogto Flame Boss barnaamijka waxaa laga heli karaa Android iyo iOS. Heerkulbeegyada Karinta - Xakameeyayaasha Heerkulka - Qalabka Qiijiye Dhuxusha- Karinta Dibedda- BBQ - Dareemayaasha Heerkulka
Florida A&M University MMERI Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Daraasaadka Kuleejka Guud The Florida A&M University Marijuana Medical and Initiative Research (FAMU-MMERI: http://mmeri.famu.edu), oo uu hogaaminayo Dr. Patricia Green-Powell (Baaraha Maamulaha Dr. Charles A. Weatherford), ayaa kaqeybgalaya 2021 Bandhigga Ganacsiga Caalamiga ee Florida (Maarso 16-18). Bandhigu waa bandhig faneedyo badan oo kaladuwan oo wax soo saarka iyo adeegyada hormuudka u ah Florida. FAMU-MMERI waxaa loo aasaasey 2018 si loo baro dadka laga tirada badan yahay marijuana si loogu isticmaalo caafimaadka iyo saameynta isticmaalka sharci darada ah ee marijuana ee beelaha laga tirada badan yahay. Maalgelinta waxaa bixiya Waaxda Caafimaadka ee Florida iyada oo loo marayo jihada sharci dejinta Florida. Baadhista shatiyada iyo Baadhista Shatiyada - Baro Barnaamijyada Dibada
Florida Atlantic University Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Daraasaadka Kuleejka Guud Florida Atlantic University, oo la aasaasay 1961, ayaa si rasmi ah albaabada loo furay 1964 oo ah jaamacadda shanaad ee dadweynaha ee Florida. Maanta, Jaamacaddu waxay u adeegtaa in ka badan 30,000 oo ah ardayda shahaadada koowaad iyo kuwa qalin-jabinta ku kala jira lix xarumood oo ku yaal xeebta koonfur-bari ee Florida waxaana lagu magacaabaa jaamacad guud oo sare oo ay soo saartay US News iyo World Report. FAU waa hay'ad firfircoon oo firfircoon, oo ay ka go'an tahay inay isku muujiso hormarinta hal-abuurnimada iyo deeqda waxbarasho. Sanadihii ugu dambeeyay, Jaamacadu waxay labalaabtay qarashkeeda cilmi baarista waxayna ka badisay asxaabteeda heerarka guusha ardayda. Ardaydeenu waa geesiyiin, hami leh diyaarna u ah inay adduunka qabsadaan. Daraasaadka Guud ee Kuleejka - Baro Barnaamijyada Dibedda - Machadka Cilmi-baarista
Florida Export Finance Corporation (FEFC) Urur aan dawli ahayn Adeegyada Maaliyadeed iyo Xirfadle Maalgelinta Dhoofinta The Florida Export Finance Corporation (FEFC) waxaa abuuray Gobolka Florida sanadkii 1993 oo ah shirkad aan macaash doon ahayn oo loo igmaday inay balaadhiso shaqooyinka iyo fursadaha dakhliga dadka degan Florida iyadoo la kordhiyay dhoofinta alaabada iyo adeegyada taasoo ka dhalatay caawinaada ay FEFC siisay shirkadaha Florida. Macluumaad, kaalmo farsamo iyo la-talin ayaa la bixiyaa. Si kastaba ha noqotee, kaalmada lacageed ee qaab dammaanad qaadka ah waa adeegga aasaasiga ah ee ay bixiso FEFC. Dammaanad qaadku waa mid macaamil ganacsi gaar ah leh laakiin sida caadiga ah waxaa loo soo saaraa sidii amaah lagu soo rogo Intaa waxaa sii dheer, FEFC waxay kaqeybgaleysaa Barnaamijka Dhiirrigalinta Dhoofinta ee Gobolka (REPP) ee Bangiga Dhoofinta Soo Dhoofinta ee Mareykanka (EX-IM Bank) waxayna u fidisaa dhoofiyayaasha Florida marin u helidda barnaamijyada kaalmada dhoofinta ee ay bixiyaan EX-IM Bank iyo SBA. Adeegyada waxaa ka mid ah baakadaha loogu talagalay EX-IM Bank iyo damaanadaha SBA ee dhoofinta dhoofinta, iyo amaahda kale, caymiska iyo barnaamijyada dammaanadda leh ee ay bixiyaan hay'adahaas Dowladda Mareykanka Dammaanad-qaadyada Amaah - Lacagta Dhoofinta - Raasamaalka Shaqeynta - Maalgelinta Ganacsiga Yaryar - La-tashiga Ganacsiga - La-talin Farsamo - Gargaar Maaliyadeed
Florida Institute of Technology Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Daraasaadka Kuleejka Guud The Florida Institute of Technology (Florida Tech) waa mid gaar loo leeyahay, oo la deggan yahay, cilmi-baaris deg-deg ah leh, deeq dhakhtar, jaamacad tiknoolajiyadeed oo ku taal Melbourne oo ku taal Florida “Space Coast”. Florida Tech waxaa la aas aasay sanadkii 1958 subaxnimadii circa cirka oo dhawaan qeexi doona xeebta Atlantic ee Florida isla markaana soo jiidan doonta aduunka. Hadda, in ka badan 60,000 oo ka qalin jabisay, Florida Tech ayaa ka mid ah kuwa ugu sarreeya 5 boqolkiiba hay'adaha 20,000 ee bixiya shahaadada ee 2020-21 Jaamacadaha Adduunka. Florida Tech waxay bixisaa shahaadooyin cilmiga hawada iyo duulista, injineernimada, xisaabinta iyo amniga internetka, ganacsiga, sayniska iyo xisaabta, badaha, cilmu-nafsiga, waxbarashada iyo isgaarsiinta. Ardayda ka kala socota in ka badan 100 waddan waxay doortaan inay wax ku bartaan Florida Tech ee gacan-ku-qaadashada, mashruuca ku saleysan, habka. Ururadu waxay u doortaan Florida Tech raadinta cilmi baarista, mashaariicda dhagaxa weyn, layliyo, iyo la talinta fursadaha shaqo. Sayniska - Teknolojiyada - Injineerinka - Xisaabta (STEM) Barashada Diirada - Barnaamijyada Ardayda Dibadda
Florida International University's English Language Institute Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Daraasaadka Kuleejka Guud Hadafkeenna: Siinta waxbarid tayo sare leh oo luqadda Ingiriisiga ah dhammaan shakhsiyaadka u doortay Ingiriisiga inay noqdaan dhexdhexaadkooda xiriirka ee tacliinta ama xirfadaha iyo kor u qaadista fahamka caalamiga iyo dhaqamada kala duwan. Daraasaadka Guud ee Kuleejka - Baro Barnaamijyada Dibedda - Machadka Cilmi-baarista
Florida Ports Council Urur aan dawli ahayn Kaabayaasha dhaqaalaha iyo Gaadiidka Horumarinta dhaqaalaha The Florida Ports Council waxay mataleysaa 14-ka Florida ee leh biyaha qotada dheer, iyagoo siinaya hogaamin iyadoo loo marayo cod wada jir ah oo ku saabsan aagagga u doodista gobolka iyo federaalka, cilmi baarista iyo xogta, iyo suuqgeynta iyo isgaarsiinta. Florida waxay leedahay nidaam deked sifiican loo dejiyay oo leh xiriir xariir badeed gaar ahaaneed oo leh Kariibiyaanka iyo Latin Amerika, iyo waliba suuqyo badan oo caalami ah. Waa gobolka kaliya ee Mareykanku ku leeyahay dekedo ku yaal laba marin biyood oo waaweyn - Atlantic iyo Gacanka, taas oo u oggolaanaysa ganacsiyada ku yaal Florida ama isticmaalaya tas-hiilaadka Florida in ay gaaraan meel kasta oo ka mid ah Mareykanka iyo adduunka maalmo gudahood. Faa'iidooyinka kale ee laga leeyahay ganacsiga Florida waxaa ka mid ah helitaanka suuqa macaamiisha gobolka ee 21 milyan oo qof oo deggan iyo 126 milyan oo soo booqdayaal sanadle ah, canshuuro hooseeya, sahay shaqaale oo fara badan iyo tiro badan oo ah bakhaarro iyo dhismayaal qeybinta marka loo barbar dhigo gobollada kale ee Koonfur-bari. Maraakiibta Badda - Maareynta Xamuulka - Bakhaar - Qaybinta -Guddiga Maraakiibta Burburka - U doodista Badaha - Golaha Badaha
Florida Realtors® Urur aan dawli ahayn Adeegyada Maaliyadeed iyo Xirfadle Estate Real Florida Realtors® waa urur ganacsi oo xirfadlayaal ah oo loogu talagalay xirfadleyda guryaha shatiyeysan oo shati leh waxayna u adeegtaa sidii urur gobolka oo dhan u ah 51 ururada maxalliga ah iyo kuwa gobolka ee Realtor® ama guddiyada ku yaal Florida. Xubinnimadu waa ikhtiyaari waxayna ka kooban tahay wakiilo degaan iyo ganacsi iyo dillaaliin, iyo sidoo kale qiimeeyayaal, la-taliyayaasha guryaha, maareeyayaasha guryaha iyo takhasusleyaal kale oo badan oo guryaha ah iyo kuwa la xiriira warshadaha. Florida Realtors'Xubinnimadu hadda waxay gaareysaa ilaa 200,000 oo rukhsad guryo ah waana ururka ugu weyn ee xirfadleyda ganacsiga ee Gobolka Sunshine Xarunta dhexe ee ururku waxay ku taalaa Orlando, halka xafiiska sharci dejinta ee siyaasada guud uu ku yaalo bartamaha Tallahassee. Ururka Guryaha ee Florida - Adeegyada Dejinta - Dhismayaasha Ganacsiga - Dhismayaasha Degenaanshaha - Adeegyada Xulista Goobta - Maalgashiga Dhismooyinka - Horumarinta Warshadaha
Florida SBDC Network Urur aan dawli ahayn Ururka Horumarinta Dhaqaalaha La talinta Ganacsiga Yaryar Fursadaha ganacsi ee caalamiga ah ee shirkadaha fadhigoodu yahay Florida way sii fidayaan, iyo Florida SBDC Network waxay kaa caawin kartaa diyaarinta meheraddaada caalamiyeynta. Adeegyadeena Caalamiga ah ee Ganacsiga Caalamiga ah ayaa loogu talagalay inay iskuxiraan dhoofinta diyaarka ah, suuq cusub, ganacsiyada cusub ee dhoofinta leh khabiiro kugula talin doona adiga oo ku hormaraya isla markaana fulinaya istiraatiijiyad kobcineed oo caalami ah. Khabiiradayada Caalamiga ah ee Ganacsiga waxay leeyihiin qalab, istiraatiijiyad, iyo khibrad si ay uga caawiyaan meheraddaadu inay u koraan oo ay ugu guuleystaan ​​dibedda. Ka faa'iideyso Adeegyadayada Caalamiga ah ee Ganacsiga sida la-tashiga hal-hal iyo tababarka muuqaalka leh, oo ay ku jiraan Taxanaha Dhoofinta Florida, Aasaaska Ganacsiga Caalamiga ah, iyo Barnaamijka Shahaadada Ganacsiga Caalamiga ah. Waxaan kaa caawin doonaa inaad fahamto aasaaska ganacsiga caalamiga ah, wax soo saarka dalka iyo shuruudaha shatiyeynta, ururinta cilmi baarista suuqa, iyo diyaarinta Qorshaha Suuqgeynta Dhoofinta. Suuqgeynta Dhoofinta - Tababarka Ganacsi - Horumarinta Qorshaha Ganacsiga - La-talinta Soo Iibinta Federaalka
Florida State College at Jacksonville Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Daraasaadka Kuleejka Guud Iyada oo leh taariikh fog oo ah bixinta qiimo iyo tayo sare leh iyo tababbar bulshadeena ah, FSCJ waxay sii wadaa inay door hoggaamineed ka qaadato u fidinta loo shaqeeyayaasha gobolka shaqaale xirfad sare leh, aqoon leh. In ka badan 160 + barnaamijyo shahaado ah, shahaadooyin xirfadeed iyo farsamo, iyo sii wadida barnaamijyada tacliinta shaqaalaha ee lagu bixiyo warshadaha baahida weyn leh sida Farshaxanka, Bani-aadmiga, Isgaarsiinta iyo Naqshadeynta, Ganacsiga, Waxbarashada, Sayniska Caafimaadka, Warshadaha, Waxsoosaarka iyo Dhismaha, Amniga Bulshada, Sayniska , Teknolojiyada, Injineerinka iyo Xisaabta, Cilmiga Bulshada iyo Dhaqanka iyo Adeegyada Aadanaha. Marka lagu daro barnaamijyada shahaadada iyo shahaadada, FSCJ waxay bixisaa ilo iyo barnaamijyo kaa caawinaya la kulanka baahida shaqaalaha maxalliga ah iyo ka caawinta shirkadaha maalgashiga tababarka, waxbarashada iyo horumarinta shaqaalaha. Tababarka Shirkadaha - Waxbarashada Ganacsiga - Horumarinta Shaqaalaha - Baro Barnaamijyada Dibedda - Darajooyinka Qalinjabinta iyo Qalinjabinta - Horumarinta Ganacsiga
Florida State University Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Daraasaadka Kuleejka Guud Mid ka mid ah jaamacadaha cilmi baarista ee qaranka, Florida State University wuxuu ilaaliyaa, ballaadhiyaa, oo faafiyaa aqoonta sayniska, teknolojiyadda, farshaxanka, cilmiga aadanaha, iyo xirfadaha, isagoo qaadanaya falsafadda barashada oo si adag ugu xidhnayd dhaqanka fanka deeqsi iyo fikirka halista ah. Xarunta soo dhaweynta ee FSU waxay ku taalaa goobta ugu da'da weyn ee tacliinta sare ee Florida, beel kobcinaysa baaritaan bilaash ah oo soo dhaweyneysa kala duwanaanta, oo ay weheliso ciyaaraha fudud, iyo meesha ugu muhiimsan ee bartamaha caasimada gobolka. XAQIIQOOYINKA DEGDEG AH Waxaa la aasaasay 1851; goobta ugu da'da weyn ee tacliinta sare ee Florida Carnegie Commission classification: "Jaamacadaha Dhakhaatiirta: Waxqabadka ugu sareeya ee cilmi baarista" 41,717 arday oo ka kala socota degmo kasta oo Florida ah iyo 131 dal oo la aqbalay astaanta cusub ee xagaaga / deyrta 2018: Fall: 4.4 celcelis ahaan GPA; 31 celcelis ahaan dhibcaha isku dhafan ee ACT; 1360 celcelis ahaan dhibcaha SAT Xagaaga: 4.0 celcelis ahaan GPA; 27 celcelis ahaan dhibcaha isku dhafan ee ACT; 1260 celcelis ahaan dhibcaha SAT. Cilmi baaris - Waxbarashada Dugsiga Sare kadib - Ku Baro Barnaamijyada Dibada
FloridaMakes Urur aan dawli ahayn Ururka Horumarinta Dhaqaalaha warshadaha FloridaMakes waa wadashaqeyn guud, warshadeed, iskaashi dowladeed iyo mid gaar loo leeyahay oo ay wada shaqeeyaan isbahaysi ka socda ururada wax soosaarayaasha gobolka ee Florida iyadoo hadafka kaliya ee ah xoojinta iyo horumarinta dhaqaalaha Florida iyadoo la hagaajinayo tartanka, waxsoosaarka iyo waxqabadka tikniyoolajiyadeed ee waaxdeeda wax soo saar, iyadoo xooga la saarayo yar yar - iyo shirkadaha dhexdhexaadka ah. Waxay tan ku fulisaa iyada oo siisa adeegyo diiradda saaraya seddex mabda 'qiimo leh: korsashada tikniyoolajiyadda, kobcinta hibada, iyo kobaca ganacsiga. FloridaMakes waa wakiilka rasmiga ah ee Iskaashiga Waxsoosaarka Kordhinta Waxsoosaarka (MEP) ee gobolka Florida, oo ah barnaamij ka socda Machadka Heerarka iyo Teknolojiyada Qaranka, oo ah wakaaladda Waaxda Ganacsiga Mareykanka. Qiimaynta Shirkada - Qorshaynta Istiraatiijiga ah - Dardargelinta Teknoolojiyada - Horumarinta Suuqa Caalamiga ah - Tababarka Shaqaalaha - Iskuduwaha Shayda Bixinta - Hormarinta Habka
Genesis Water Technologies Manufacturer Nadiifinta Farsamada Daaweynta Biyaha iyo Dabiiciga Genesis Water Technologies waa hogaamiye ku guuleystey abaalmarin gaar ah oo ku saabsan biyaha la cabbo & xalka biyaha dib loo isticmaalo. Waxaan ku takhasusay u adeegida warshadaha iyo adeegyada biyaha ee gudaha Mareykanka iyo adduunka oo dhan si aan ula kulano caqabadaha tayada biyaha iyadoo loo marayo xalka daaweynta horumarsan iyo adeegyada lagu aasaasay hal abuurnimada iyo iskaashiga. Adeegyada La-talinta Injineernimada ee Nidaamaynta - Daaweynta Biyaha Qashinka - Daaweynta Biyaha Qashinka Warshadaha - Sifeynta Biyaha - Warbaahinta Daaweynta iyo Flocculants
Global Tampa Bay Urur aan dawli ahayn Ururka Horumarinta Dhaqaalaha Horumarinta Ganacsiga Global Tampa Bay waa iskaashi heer gobol ah oo u dhexeeya Golaha Horumarinta Dhaqaalaha ee Tampa Bay, Horumarinta Dhaqaalaha ee Gobolka Pinellas iyo Golaha Horumarinta Dhaqaalaha ee Pasco si loo kordhiyo fursadaha ganacsi ee caalamiga ah ee shirkadaha ka jira gobolka dhexdiisa iyo in gobolka loo suuq geeyo adduunka oo dhan inuu noqdo meesha ugu sarreysa ganacsiga. At Global Tampa Bay, waxaan si sharaf leh ulashaqeynaa wada-hawlgalayaashayada dhaqaalaha ee gobolka sida Madaarka Caalamiga ah ee Tampa iyo Port Tampa Bay iyo sidoo kale hay'ado kala duwan oo heer Federaal, heer Gobol iyo heer degmo ah si ay u gaarsiiyaan istiraatiijiyad caalami ah oo isku dhafan. Hadafkeenu - in aan shaqaalaysiino shirkado caalami ah oo raadinaya goob ganacsi oo raaxo leh oo ku taal Mareykanka iyo kordhinta fursadaha ganacsi ee caalamiga ah ee shirkadaha maxalliga ah sidaa darteed kobcinta ballaarinta kororka dhaqaalaheena. Ganacsiga Caalamiga ah iyo Maalgashiga Tampa Bay - Dawlada Hoose - Horumarinta Dhaqaalaha - Dib u Dejinta Shirkadaha - Maalgashiga Tooska ah ee Dibadda
Goodyear Rubber Products, Inc Manufacturer Qalabka iyo Qalabka Warshadaha Qeybaha Hawada Goodyear Rubber Products Inc. waa 73 sano jir qaybiya waxsoosaarka caagga warshadaha isla markaana sameeya, xarunteeduna tahay magaalada St. Petersburg, Florida oo leh 6 goobood oo gobolka oo dhan ah. Waxaan ka daabulnaa adduunka oo dhan meesha ugu weyn oo aan la soconno oo aan ka rarayno maraakiibteena wax soosaarka warshadaha adduunka oo dhan. Waxaan lashaqeyn karnaa xamuulka xamuulka ee aad doorbideyso iyo / ama FedEx, DHL ama UPS International sida loobaahanyahay ama hadaadan haysan gudbin, waxaan kugula talin karnaa mid adiga kugu haboon. Waxaan bixinaa heerka ugu sareeya ee khibrada farsamada shaqaalaha celcelis ahaan 35 sano khibrad u leh dalabka Warshadaha iyo Haydarooliga Hose & Isku-xidhka, tubbada, Waxsoosaarka Dareeraha dareeraha oo ay ku jiraan Gaskets iyo Qalabka Sheet gaasta, O-Rings, Fiditaanka Jaangooyooyinka, Dharka Heerkulka Sare iyo Alaabooyinka Gudbinta Awoodda oo ay ku jiraan V-Belts, Timing Belts Sheaves iyo Pulleys. Waxaan sidoo kale ku takhasusnay Conveyor Belts iyo qalabyada la xiriira. Hoosaska Haydarooliga - Rakibka Haydarooliga - Lamaanayaal Haydarooliga ah - Khatimidii Haydarooliga - Suumanka Warshadaha - Soo-saarayaasha - Hoosaska Dabka
GreenTechnologies, LLC Manufacturer Kiimikooyinka iyo Kiimikada kiimikada Bacriminta iyo Teknolojiyada Daaweynta Biyaha Qashinka GreenTechnologies waxay soosaartaa tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah biosolids oo hoos timaada magaca calaamadda GreenEdge®. Khadkeena GreenEdge® ee waxsoosaarka ayaa adeegsada habka dib u warshadeynta nafaqada ee loo yaqaan patent-ka si loo siiyo macaamiisha codka bacriminta waxtarka leh ee deegaanka. GreenTechnologies waxay u adeegtaa suuqyo badan oo bacrimin ah oo ay ka mid yihiin beeraha, muuqaalka, cowska xirfadleyda ah, iyo tafaariiq gudaha iyo caalamkaba. Bacriminta - Ka-shaqeynta Biosolids - Maareynta - Adeegyada Maareynta iyo Qashinka ee Degmooyinka
Grid Electrical Solutions Adeeg bixiye Nadiifinta Farsamada Tamarta nadiifka ah GRID ELECTRICAL SOLUTIONS (GES) waa Shirkad Mareykan ah oo in kabadan 25 sano oo khibrad ah oo bixisa xalalka tamarta ee leexashada oo ay kujiraan jiilkii ugu dambeeyay ee tamarta la cusbooneysiin karo, qeybinta korantada, iyo jiilka / jiilka seddexaad. GES Custom waxay naqshadeysaa xalalka Microgrids ee ku milmaya ilaha la cusboonaysiin karo iyo ilaha dhaqameed ee nidaamka wax qeybinta iyadoo ujeedadu tahay kordhinta waxtarka, kalsoonida iyo adkeysiga nidaamka guud iyadoo la dhimaayo qiimaha macmiilka. Shirkaddu waxay kaloo bixisaa adeegyo kale sida hawlgal iyo dayactir iyo sidoo kale adeegyo maaliyadeed oo ay ka mid yihiin heshiisyo kireysi iyo iibsi awood (PPA). dhismayaasha Warshadaha: Cuntada & cabitaanka Marti gelinta: Hoteellada iyo meelaha la nasto Hay'ad ahaan: Xarunta, iskuulada, isbitaalada Dowladda: Degmooyinka Nidaamyada Isku-dhafka Tamarta Cusboonaysiinta - Naqshadeynta Nidaamka Is-dhexgalka Tamarta Cusboonaysiinta - Awoodda Qoraxda - Awoodda Dabaysha - Maamulka Awoodda - Saldhigyada - Microgrids - Kaydinta Tamarta
H2O International Manufacturer Alaabada Macaamiisha Qalabka Sifeynta Biyaha Soo saaraha nidaamyada sifeynta biyaha iyadoo la adeegsanayo warbaahinta GAC ​​iyo KDF. Khadkeenna alaabada ah waxaa ka mid ah miiska dushiisa, hoostiisa, qalabka wax lagu kala iibsado iyo qaybaha guriga oo dhan, iyo sidoo kale, weel lagu nadiifiyo biyaha iyo madaxyada maydhashada. Nidaamyada Sifeynta Biyaha - Shaandheeyaasha Biyaha Deegaanka - Qalabka Jikada iyo Qasabadaha - Qalabka Qubeyska Musqusha - POU / POE Sifeynta Biyaha
Hassell Free Exports, Inc. Qaybiyaha Qalabka Dhismaha Dhismaha Qaybaha Waxaa la aasaasay 1999, Vernon Hassell iyo qoyskiisa, oo asalkoodu ka soo jeedo jasiiradda Caribbean ee Dutch ee Saba, waxay leeyihiin oo ka shaqeeyaan Hassell Free Companies, Inc. Palm City, Florida. Diiraddeenu waxay tahay Bandhiggan Hassell Qalabka Dhismooyinka Bilaashka ah & Dhoofinta. Waxaan qabannaa iibsiga, keydinta, iyo xoojinta Qalabka Dhismaha iyo sahayda kale ee loogu talagalay mashruucyada waaweyn iyo kuwa yar yar ee dhismaha dhammaan jasiiradaha Caribbean-ka. Waxaan haynaa shabakado badan oo alaab-qeybiyeyaal ah oo bixiya waxyaabo badan oo kala duwan oo noo oggolaanaya inaan ka soo qaadno alaabada waqtigii loogu talagalay iyo qiime macquul ah. Waxaan sidoo kale ku siineynaa caawimaad xagga saadka si aan u gaarsiino agabyada halka ay ku dambeyn doonaan iyadoo loo marayo laantayada Maraakiibta. Hadafkeena ugu weyni waa inaan ka caawinno kuwa ku jira warshadaha dhismaha Caribbean-ka agabyada laga helo alaabada, si kastaba ha noqotee, waxaan marwalba raadineynaa inaan lashaqeyno alaab-qeybiyeyaasha qalabka dhismaha ee tartami kara suuqayada. Waxaan rajeyneynaa inaad kahelayso qafiskeena waxaadna xor u tahay inaad laxiriirto wixii su'aalo ah. Dhoofinta Shirkadda Ganacsiga - Maraakiibta Kariibiyaanka - Qalabka Dhismaha - Dabaqa - Windows - Albaabada - Kabadhada - Dayactirka Degaanka-Dhismaha Guryaha
Help Hair Inc Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Ka caawi Timaha® Rux iyo Caawi Fiitamiinnada Timaha, isticmaal dhammaan noocyada 'Natural formula' oo ay ku jiraan Protein, oo lagu daro Biotin, Niacin iyo B-12 oo muhiim u ah fiitamiinnada luminta timaha ee ka caawiya koritaanka timaha. Ruxida borotiinka iyo fiitamiinada timaha waxay ku quudiyaan duleellada timaha gudaha si koritaan degdeg ah timo u hesho. Waxaan nahay # 1 Dhaqtarka lagula taliyay Wax soo saar aan dhakhtar qorin ee timaha. Isticmaal Caawinta Timaha® Maalin kasta ku gariir Caawintaada Timaha® Fiitamiinnada si aad uhesho timo caafimaad leh, oo dhammaystiran. Alaabtayadu waxay suuqa ku jireen in ka badan 14 sano waxaanan leenahay 1000 ka mid ah macaamiil faraxsan. Waxaa kugula taliyay in kabadan 400 Xarumaha maqaarka iyo xarumaha timo luminta aduunka oo dhan. Nidaamka Caawinta Timaha® wuxuu ka kooban yahay 4 tallaabo oo loogu talagalay timaha caafimaadka leh iyo ciddiyaha quruxda badan. Shaamboogayaga iyo qaboojiyahayagu wuxuu u shaqeeyaa si looga soo saaro saliida iyo DHT-ga xad-dhaafka ah madaxa. Labadooduba waxay ka kooban yihiin waxyaalaha dhirta dhirta ah oo markii uu madaxu nuugo ay ka caawiso dhiirrigelinta koritaanka caafimaadka leh. Dhammaan alaabooyinka waxaa soo diyaariyay Dr Shapiro oo in ka badan 30 sano ah Khibrad Soo Celinta Timaha. Dheeraadka nafaqada ee Kobaca Timaha - Shaambo - Qalliinka timaha - Timo luminta - Fiitamiinada -Bilinta Daaweynta - Waxyaabaha Collagen
Hernon Manufacturing Manufacturer Qalabka iyo Qalabka Warshadaha Koollo iyo Dareemo Hernon Manufacturing, Inc.® wuxuu soosaaraa koolada waxqabadka sare, daboolka, UV Nalalka daaweynaya nalalka iyo nidaamyada bixinta saxda. Hernon® waxay haysaa maktabad ka badan 5000 qaaciddo iyo qaaciidooyin qaas ah marka lagu daro sameynta qaaciidooyin habaysan oo wax looga qabanayo caqabadaha wax soo saar gaar ah. Sheybaar kiimiko ah oo guriga gudihiisa ka buuxa ayaa xaqiijinaya in dhaqso loogu soo jeesto tijaabooyinka iyo mashaariicda horumarinta iyo qeybta wax soo saarka qalabka ee goobta ayaa u oggolaaneysa Hernon® inay dhisto, adeegto, iskuna dubarido nidaamyada wax lagu kala bixinayo ee u gaarka ah xitaa tilmaamaha ugu habboon. Isku-dhafkan wuxuu ka caawinayaa Hernon® inay macaamiisha siiso Wadarta Xalka wixii codsi gaar ah. Soo saarista Hernon® waxay xarunteedu tahay magaalada Sanford, FL., Waxayna ilaalisaa shabakad sii ballaaraneysa oo ka badan 100 qeybiyaasha iyo goobaha lammaanaha ee adduunka. Hernon shipping horeyba waxay ugu rarneyd 60 wadan, Hernon® waxay kubixin kartaa xalal dhejis ah howlaha waxsoosaarka meelkasta oo aad aduunka ka joogto. Xabagta Warshadaha - Dareereyaasha - Mawjadaha Mawjadaha - Xalinta Daaweynta - Robotyada Bixinta Cufnaanta - Dareeraha Gaasta - Ka Hortagga Dheecaanka
Honeycomb Company of America Manufacturer Duulista iyo Hawada Qaybaha Duulista iyo Milatariga Honeycomb Company of America waxay siineysay badeecado iyo adeegyo tayo leh Warshadaha Aerospace ilaa 1948. Shirkadu waxay ku takhasustay aerostructures isku xiran oo ka faa'iideysanaya birta birta, birta ilaa malabka malab, iyo dhismaha isku dhafan. Honeycomb waa shirkad isku dhafan oo isku dhafan oo ka kooban injineernimada, wax soo saarka, iyo waxqabadyada hubinta tayada. Shirkaddu waxay leedahay kheyraad ay ku maareyso dhismaha si ay u daabacdo wax soo saarka qaab dhismeed kasta. Marka loo baahdo, Honeycomb wuu rogi karaa alaabada injineerka ee aan haysan xogta farsamada ee looga baahan yahay soo saarista. Wax soo saarka ka sokow, Honeycomb wuxuu leeyahay tas-hiilaad dayactir oo xamili kara dayactirro kaladuwan oo kaladuwan. Markay dayactirku ka baxsan tahay xadka dayactirka soo jireenka ah, kooxdayada injineernimada ayaa inta badan naqshadeyn kara oo diiwaangelin kara istiraatiijiyad dayactir ah oo loogu gudbinayo hay'adda sharciyeynta ku habboon. Xaalado badan, Honeycomb wuxuu hagaajin karaa qaybo haddii kale u baahnaan lahaa beddelaad qaali ah. Aerostructures - Honeycomb Core iyo Composites Composites - Nadcap la aqoonsan yahay - Birta isku darsanta Honeycomb Birta - Qaybaha Duulista Hawada
Hosmed Inc Manufacturer Sayniska Nolosha & Teknolojiyada Caafimaadka Qalabka Isbitaalka Hosmed Inc. wuxuu qeexay daryeel dhameystiran oo ku saabsan bixinta qalabka caafimaadka, aaladaha caafimaadka, qalabka sheybaarka iyo dawooyinka. Waxaan nahay shirkad Mareykan ah oo fadhigeedu yahay Miramar, Florida illaa iyo 2009. Hosmed Inc. waa soo saare hormuud u ah qalab caafimaad oo tayo sare leh qaabab kala duwan sida: Suuxdinta iyo Neefsashada, Xalka Daryeelka Nolosha, Baaritaanka Wadnaha, Daryeelka Dhallaanka Hooyada, Ultrasound, X-Ray, IV Therapy, Qolka Howlgalka, Sheybaarka, Qalabka Isbitaalka iyo wixii la mid ah alaabooyinka isbitaalada, rugaha caafimaadka, iyo daryeelka aasaasiga ah. Hosmed Inc. waxay leedahay koox shaqaale ah oo heegan ah si ay u qaadaan tababbarka biomedical iyo farsamada iyo taageerada qeybiyeyaashayada ka socda adduunka oo dhan iyadoo ujeedadu tahay in laga caawiyo rakibida, howlgelinta, iyo dayactirka qalabkeena caafimaadka. Wax soo saarkayagu si ballaaran ayaa loogu dhoofiyaa Latin America, Bariga Dhexe, Afrika, Koonfur Bari Aasiya. Suuxdinta iyo Neefsashada, Xalka Daryeelka Nolosha, Daaweynta Wadnaha, Daryeelka Dhallaanka Hooyada, Ultrasound, X-Ray, Daaweynta IV, Qalabka Qalliinka Qalliinka
HospitalesMoviles.com Qaybiyaha Sayniska Nolosha & Teknolojiyada Caafimaadka Xarumaha Caafimaadka iyo Gurmadka ee la qaadan karo HospitalesMoviles.com qorshayaasha, naqshadeynta iyo fulinta mashruucyada caafimaadka iyo kuwa laxiriira ee adduunka oo idil - ahmiyaddeena iyo ujeedkeenu waa inaan bixino Isbitaalo Qaas ah oo Fudud oo La Kordhin karo! Mashaariicdan waxay noqon karaan, Isbitaalada Goobta Wareegta, Prefabricated, Hospitals Modular iyo Clinics. Isbitaalada Guur-guura - Xarumaha Caafimaadka - Isbitaalada Goobta - Isbitaalada Wadajirka ah ee PreFab - Tiknoolajiyadda Qashinka Caafimaadka iyo Gawaarida - Isku-darka Qalabka Caafimaadka
IBT Online Adeeg bixiye Technology Information Suuq Internet Laga soo bilaabo 2002, waxaan diirada saarnay inaan ka caawinno shirkadaha inay kobciyaan ganacsigooda si caalami ah. Barnaamijyadeenna Caalamiga ah ee Caalamiga ah waxay leeyihiin rikoodh rikoodh ah oo la oggol yahay oo u keenaya dhoofinta la qiyaasi karo, iibka, sumadda, iyo kobaca ganacsiga ee macaamiisheenna shirkadaha, iyada oo loo marayo habka ugu fiican ee ku habboon degel deggen, suuqgeynta caalamiga ah ee internetka iyo ecommerce Degel Degmo-Suuqgeynta Internetka Caalamiga ah
IMR Environmental Equipment Manufacturer Qalabka iyo Qalabka Warshadaha Qalabka Kormeerka Hawada iyo Gaaska IMR Environmental Equipment, Inc. wuxuu naqshadeeyaa oo soo saaraa falanqeeyayaasha gubashada. Waxaan leenahay joogitaan caalami ah. Waxaan u soo saarnaa qalab loogu talagalay baaritaanka goobta degdegga ah iyo sidoo kale qalabka CEMS ee loogu talagalay falanqaynta goobta. Kuwani waa tusaalooyin yar oo ku saabsan kiisaska isticmaalka qalabkeenna: HVAC, Tamarta, Xakamaynta Habka, Soosaarka Muraayadaha, Dhirta Awoodda, Cuntada, Jaamacadaha, Meelkasta Falanqaynta Gaaska ayaa loo baahan yahay. IMR Falanqeeyayaasha - Baarayaasha Gaaska Gaaska - Falanqeeyayaasha Qiiqa Gaaska - Kormeerayaasha Qiiqa Hawada iyo Gaaska - Kormeerayaasha Tayada Hawada - CEMS - Gaaska La qaadan karo iyo Falanqeeyayaasha Hawada.
Indian River State College Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Daraasaadka Kuleejka Guud Ka hoggaamiye ahaan xagga waxbarashada iyo hal-abuurnimada, Indian River State College waxay badashaa nolosha iyadoo siineysa waxbarasho tayo sare leh, oo la awoodi karo, oo la heli karo. IRSC waa kulleejo dhameystiran oo la aqoonsan yahay inay bixiso Shahaadooyinka Baccalaureate, Shahaadooyinka Associate, iyo Shahaadooyinka Xirfadaha iyo Farsamada. Shahaadooyinka Farsamada - Darajada Bachelor-ka - Baro Barnaamijyada Dibadda
Industry Equipments Inc. Manufacturer Dabka iyo Badbaadada Dab-bakhtiiyeyaasha iyo Qalabka Samatabbixinta Ugu adeeg si xirfadeysan iyo iskudhaf ah howlaha warshadaha, badbaadinta nolosha, keydinta waqtiga iyo lacagta, si isdaba joog ah u hagaajinta xaaladaha mustaqbalkeena si wax ku ool ah iyo qalabka waxqabadka ugu badan. Mini Bambooyin (Qalabka Dab-damiska) - Qalabka Ambalaaska - Qalabka Tamarta Dabka - Qalabka Dhismaha ee Dib-u-cusboonaysiinta - Baabuurta Dab-demiska ee Dib-u-cusboonaysiinta - Ambalaasyada dib loo cusboonaysiiyay
Infinium Medical Manufacturer Sayniska Nolosha & Teknolojiyada Caafimaadka Qalabka Caafimaadka Aasaasay 2001, Infinium Medical waa horumariyaha iyo soo saaraha qalabka caafimaadka. Ku saleysan Mareykanka, Infinium Medical sumcad ku leh bixinta tikniyoolajiyad hoggaamineed iyo tayo leh. Waxaan ku takhasusay Kormeerayaasha Bukaanka, Nidaamyada Suuxdinta, Miisaska Qalliinka, Video Laryngoscopes, Shockwave Therapy iyo Telehealth Solutions. Suuqa Mareykanka ka sokow, Infinium Medical wuxuu leeyahay shabakad caalami ah oo caalami ah, oo ka kooban 87 dal. Qalabka Caafimaadka ee Kormeerka Bukaanka - Xaragada - EKG - Bixinta Suuxdinta - Shaxda Qalliinka - Oximeter Garaaca wadnaha
iQ Valves Manufacturer Sayniska Nolosha & Teknolojiyada Caafimaadka Qalabka Caafimaadka iQ Valves waa soo saaraha saxda ah ee dareeraha dareeraha soodhaweynta bixiya xalal farsameysan oo loogu talagalay codsiyada OEM. iQ waxay haysaa shatiyo fara badan oo loogu talagalay aaladaha xakamaynta socodka. Waxaan ku faraxsanahay injineernimadayada hal abuurka leh iyo waqtiga soo celinta degdega ah. iQ Valves Co. waxaa lagu soo daray 2005 ka dib sannado badan oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan soo-saarka iyo warshadaha soodhaweynta magaca hore Teknocraft Inc. Shirkaddu waxay siisay adeegyo wax-soo-saar iyo injineernimo oo lagula tacaalayo tiknoolajiyada qalabka loo yaqaan 'solenoid valve' ee loogu talagalay caafimaadka, qalabka, iyo codsiyada warshadaha ee soo bilaabanaya 1984. 9001: 2015 shirkad la xaqiijiyay. Xakamaynta Dareeraha Solenoid Valve - Qalliinka Qiyaasta - Solenoid Qaliinka - Qaybaha Qalabka Qalabka Hawo
IRI, The CoSort Company Manufacturer Technology Information Maareynta Xogta Weyn iyo Ilaalinta La aasaasay 1978, Cusbooneysiinta Jadwalka Caalamiga ah (IRI), a / k / a IRI, The CoSort Company, waa maareynta xogta Mareykanka ISV caan ku ah khalkhalgelinta xogta degdegga ah iyo xalalka amniga xogta lala beegsado. Xarunteeduna tahay Melbourne, Florida, IRI waxay wakiil uga tahay 40 magaalo oo adduunka ah. Macaamiisha IRI waxay ku jiraan warshado fara badan oo leh xog ballaaran ama xasaasi ah ilo kala duwan si ay u farsameeyaan, u ilaaliyaan, u soo bandhigaan, ama ugu hormarsadaan. Waxaa ku shaqeeya IRI CoSort ama Hadoop matoorada, barnaamijka maareynta xogta ee IRI Voracity wuxuu isku daraa helitaanka xogta, isdhexgalka, socdaalka, maamulka, iyo falanqaynta hal muraayad quraarad ah, oo lagu dhisay Eclipse. Voracity waxaa ku jira badeecadaha ku jira Maamulaha Macluumaadka IRI [CoSort, Extract Extract, NextForm iyo RowGen] iyo IRI Data Protector [FieldShield, CellShield EE, iyo DarkShield] qolalka si loo bixiyo xog-is-weydaarsi iyo kala-sooc badan oo xog fara badan laga helo, isbeddel dhakhso leh oo xog iyo soo guuritaan, xog bakhaarka ETL iyo isku duubnaanta xogta, nadiifinta xogta iyo qarinta PII, xogta tijaabada dhabta ah, iyo inbadan. Asturnaanta Macluumaadka - Ka Hortagga Jebinta Xogta - Maareynta Macluumaadka Weyn - Qarinta Maskaxda - Dhibcaha Dib u Aqoonsiga - Kaydinta Xogta - ETL - Xogta Tijaabada - GDPR - Sirdoonka Ganacsiga - Socdaalka Xogta - Amniga Internetka
Jacksonville Port Authority (JAXPORT) Adeeg bixiye Kaabayaasha dhaqaalaha iyo Gaadiidka Maamulka Dekada Waxay ku taalaa Koonfurta-bari Mareykanka halka laga soo galo ee isku xirka tareenka iyo jidadka waaweyn ee waddanka Jacksonville Port Authority (JAXPORT) waa albaabkaaga caalamiga ah ee loo maro Florida, gobolka saddexaad ee ugu weyn dalka. JAXPORT waa dekedda konteenarrada ugu weyn Florida iyo mid ka mid ah dekedaha ugu waaweyn ee gawaarida lagu qaado. Daraasiin maraakiibta xamuulka qaada ah ayaa soo wacaya JAXPORT, iyagoo ku siinaya waqtiyo ku-meel-gaadh ah oo aad ku dhaafto 140 dekedood oo ka badan 70 dal. JAXPORT waxay siisaa gaadiidleyda xamuulka qaada gaadiid aan kala go 'lahayn oo loo maro 100 shirkado oo xamuul ah iyo 40 tareen maalinle ah oo loo maro tareenada Class I CSX iyo NS iyo khadka tareenka ee gobolka FEC. Kooxda iibka khibrada leh ee JAXPORT ayaa kaa caawin kara inaad soosaarto qorshe shaqsiyeed si aad uga faa'iideysato ganacsigaaga. Nala soo xiriir maanta ama waxbadan ka baro faa'iidooyinka JAXPORT. Maraakiibta Badda - Maareynta Xamuulka - Bakhaarada - Qaybinta - Terminalka Markabka Maraakiibta
Just Fur Fun Manufacturer Alaabada Macaamiisha Qalabka Xayawaanka Labbiska ayaa noqon kara wax aad u xiiso badan! Hadda markaad marin u hesho sidaas oo kale asxaabtaada dhogorta leh! Just Fur Fun® wuxuu leeyahay khad buuxa oo ah canine, feline, qalab bini'aadan iyo gacal; sidaas darteed isku dhejinta koofiyad eyga ugu fiican iyaga, oo leh suun kuu habboon, waxay noqon doontaa mid xiiso leh oo sahlan! Just Fur FunWaxay rabtaa inay gacan ka geysato abuuritaanka xiriirkaas dheeriga ah ee u dhexeeya adiga iyo xayawaankaaga maxaa yeelay waxaan aaminsanahay inaad muujineyso qaabkaaga shaqsiyeed inay ku sii soconeyso xarkaha! Leasheskeena maqaarka ee jilicsan iyo silsiladaha waxaa lagu qurxiyay gacmo-gacmeed lagu qurxiyo si ay midba midka kale u dhigmaan, iyo sidoo kale qalab xiiso leh oo aad adigu u sameysay gaar ahaan si aad uhesho! Kuweena Just Fur FunLine khadka wax soo saarka ee gaarka ah waxaa ka mid ah: silsiladaha xayawaanka, xirmooyinka xayawaanka, suumanka maqaarka, iyo qalabka loo yaqaan 'equine set'; boodhadh gacmo lagu sameeyey oo gacmo lagu sameeyey, spurs iyo spur straps. Dhammaan Just Fur Fun® alaabtu 100% wax lagu sameeyo gudaha Mareykanka. Diyaar u ahaw ooh iyo ahhhs maxaa yeelay hadda socodka beerta ayaa madaxa u rogi doonta xayawaankaaga xayawaanka ah iyo qalabka dadka! Koolalka Eeyaha Gacanta Lagu Xidho - Leashes Dog Gacmeed - Suumanka Gacanta Lagu Xidho - Qurxinta Qurxinta
Keiser University Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Waxbarashada Shaqaalaha, Caafimaadka Isbahaysiga, iyo Ganacsiga Caalamiga ah At Keiser University, waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawinno inaad ku guuleysato adiga oo ku siinaya aasaaska xirfadeed iyo tacliimeed ee loo baahan yahay si loo gaaro himilooyinkaaga waxbarasho iyo ujeeddooyinkaaga. Waxaa wada aasaasey Dr. Arthur Keizer, Chancellor, hal arday keliya 43 sano ka hor, maanta Keiser University waa jaamacadda ugu weyn Florida, ee aan macaash doonka ahayn. Keizer waxaa gobol ahaan u aqoonsan Ururka Isboortiga ee Kulliyadaha iyo Iskuulada oo ah heerka lixaad ee jaamacadda, taas oo muujinaysa ballaarinta heerarka dhakhaatiirta iyo danaha cilmi baarista. Xubin ahaan Kulliyadaha Madaxa Bannaan iyo Jaamacadaha Florida Keizer waxay u adeegtaa in ka badan ardayda 20,000 ee xarumheeda 21 ee ku yaal Florida. Keizer waxaa u aqoonsan Ururka Isbaanishka ee Kulliyadaha iyo Jaamacadaha inuu yahay Hay'ad u Adeegta Isbaanishka. Keiser University sii wadayaal qaali u ah loo shaqeeyeyaasha, bulshada, iyo, wax kasta oo ka sarreeya, xulasho qiime leh oo loogu talagalay ardayda halista ku ah waxbarashadooda iyo xirfaddooda. Kuxirnow Barnaamijyada Degree Doctorate - Caafimaadka Isbahaysiga - Sayniska Farsamada - Maareynta Ganacsiga - Teknolojiyada Macluumaadka - Marti-gelinta
KIZANDY Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Macmacaanka Kizandy, Shirkad Mareykan ah ayaa la aasaasey sanadkii 2010 si ay u sameyso xarriiqda alaabada macmacaanka ah oo lagu soo rakibey daasado naqshadeeyayaal hal abuur leh oo soo jiidan kara macaamiisha adduunka oo idil. Waxaan qaadanay waqtigeenna si aan u baarno, u horumarino una abuurno badeecooyin leh dhadhan fiican iyo rafcaan ballaaran oo caalami ah. Awooda aan u leenahay sameynta naqshad xirmo hal abuur leh ayaa keentay in abaalmarinno lagu guuleysto daasadaha naqshadaha. Kaas oo ka faa'iideystay tafaariiqleyda wax soo saarka ka kordhay in ka badan 40 dal! Nacnaca Sonkorta Bilaashka ah - Alaabada Hadiyadaha Nacnaca
Kushae by BK Naturals Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Kushae waa # 1 iyo KELIYA khadadka alaabada nadaafadda haweenka ee dabiiciga ah oo uu abuuray OB / GYN ... Kushae waa dhammaan daryeelka dabiiciga ah ee loogu talagalay halkaas! OB / GYN - Daryeelka Caafimaadka Haweenka
LatamXport LLC Qaybiyaha Alaabada Macaamiisha Sahayda Diyaargarowga Degdegga ah LatamXport LLC waa Shahaado Ganacsi Lahelay Dadka Tirada Yar. Waxaan bixinaa u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah iyo alaabada gargaarka ee musiibada sida COVID-19 Sahayda Caafimaadka, Bacda Sandless, Telefoonada Satelite-ka. Alaabtaan waxaa iibsan kara Hay'adaha Dowladda, Ganacsiyada Yaryar, Qeybaha Gaarka loo leeyahay iyo kuwa Dadweynaha, Ururada Mulkiilayaasha Guryaha, Iskuulada Dadweynaha & kuwa Gaarka loo leeyahay, Isbitaalada, Dabdamiska, Dhismooyinka iyo bulshada kale ee deegaanka iyo qeybaha ka jawaab celinta xaaladaha deg degga ah. Diyaargarowga Degdega ah - Gargaarka Musiibada - COVID-19 Sahayda Caafimaadka - Bacda Ciida aan laheyn - Isgaarsiinta Satelite -ka - Cuntooyinka Degdega ah- Qorraxda kaneecada celisa
Liquid-Vet by COOL PET Holistics Manufacturer Alaabada Macaamiisha Qalabka Xayawaanka Liquid-Vet® waa sumadda # 1 ee qaadashada dareeraha ah "nafaqeeyeyaasha" xayawaanka raba in ay ka macaan yihiin, ka fudud yihiin, kana dhaqso badan yihiin kaniiniyada, budada, iyo qayilaadaha hadda suuqa ku jira. Waxaa intaa dheer, Foomamka Liquid-Vet® waxaa lagu sameeyaa USA & waxay leeyihiin dammaanad lacag celin ah. Kaabisyada Caafimaadka & Fayo-qabka
LOKSAK Manufacturer Alaabada Macaamiisha Kaydinta Alaabada Shakhsiyeed LOKSAK, Inc. ee Naples, Florida waa hal-abuuraha aLOKSAK, OPSAK, SHIELDSAK iyo CBRNSAK. Wax soo saarkeenu waa kuwa kaliya ee dib loo dabooli karo oo aan gebi ahaanba biyuhu xirin, boodhka caddaynaya iyo huurka bacda lagu kaydiyo ee huurka ah ee laga helo suuqa macaamiisha. Alaabtayadu markii hore waxaa loogu talagalay inay ka ilaaliso waxyaabaha ku jira biyaha, laakiin waxay si dhakhso leh u noqotay inay bacdu awood u leedahay wax badan. Sannadkii 2006, markii horumarinta wax soo saarku ay shaaca ka qaadday suurtagalnimada in laga dhigo boorsooyinkeenna aan u babac dhigi karin urta sidoo kale, waxaannu soo saarnay badeecad cusub –Boorsooyinka waara ee OPSAK. Boorsooyinkan ur aan caddayn urku waxay ku habboon yihiin qaboojiyeyaasha inay ka madax bannaanaadaan ur adag iyo inay ka ilaaliyaan xayawaanka duurjoogta ah inay ka fogaadaan cunnada xeryaha. LOKSAK waxay ku iibisaa alaabada suuqyada kaladuwan sida codsiyada alaabadayada. Waxaan caalami ahaan ugu iibinaa suuqyada dibada iyo kuwa rayidka badankood iyo sidoo kale dhamaan laamaha militariga, dowlada iyo sharci fulinta aduunka oo dhan. Marka ay timaado keydinta sare, waxaan diyaar u nahay inaan la kulanno caqabadda weyn ee xigta. Dambiisha Kaydinta Dib Loo Isticmaali Karo - Weelasha Biyo La'aanta - Gaashaanka Joogtaynta Raadiyaha - Weelasha Caddaynta Boorka - Weelasha Caddaynta Uumiga
Loos Naples Manufacturer Duulista iyo Hawada Dayactirka Dayactirka Diyaaradaha iyo Dayactirka Adeeg bixiye buuxa oo ka shaqeeya makiinado qaas ah, xarig silig ah, fiilooyin silig ah, qalab, iyo shirar. Mashiinnada Qaaska ah - Xarigga siligga - Fiilooyinka Xarigga siligga -Cilladaha Xiisadda - Goynaya Fiilooyinka - Jiirarka - Sheaves
Lotus Bio-Mineral Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Ku noolow nolol nadiif ah, qurux badan maalin kasta iyo munaasabad kasta adoo ku kalsoon kalsoonida xirashada alaabada aad ku kalsoon tahay. Quruxdeenna nadiifinta ah ee loo yaqaan 'lotus bio mineral makeup' ayaa si taxaddar leh loo abuuray loona soo saaray iyada oo aan lahayn waxyaabo sun ah. Waxaan isku qabnaa heer sare oo daahfurnaan leh fudeydka howlo badan, maaddooyin tayo ku saleysan. Iyada oo loo marayo hal-abuurnimo caqli-gal ah, u hoggaansamid iyo dhiirrigelin, Dhaqdhaqaaqa Quruxda Nadiifintu waxay isku xireysaa silsiladaha sahayda, ka soo baxdaa shuruudaha u hoggaansanaanta iyo gaaritaanka yoolalka ay dejiyaan macaamiisha iyo noocyaduba. Qurxinta - Alaabada Qurxinta - Alaabada Daryeelka Maqaarka
Madico, Inc. Manufacturer Automotive Dahaarka Muraayaddaha iyo Dareemayaasha Madico, Inc. waa soo saaraha hormuudka u ah filimada daaqadda hal-abuurka ah, daahan, xallinta birta iyo xalalka laminate. Injineerada Madico waxay soo saaraan waxyaabo ka badan filashooyinka laga qabo warshadaha adduunka oo dhan oo ay ku jiraan baabuurta, dhismaha, daryeelka caafimaadka, aerospace iyo macaamiisha elektaroonigga ah. ProtectionPro® waa midka ugu horumarsan taabashada shaashadda iyo difaaca jirka ee dhammaan qalabka. Nidaamkeena jarista dalabka iyo softiweerka daruuriga ku saleysan oo ay kujiraan in kabadan 20,000 aaladaha astaamaha aaladaha ayaa hubiya in tafaariiqlayaashu ay awoodi doonaan inay daboolaan qalab kasta oo ka imaado sii deynta cusub ilaa moodooyinka dhaxalka leh Kumanaan kun oo tafaariiqleyda caalamiga ah ayaa wata ProtectionPro. Xarunteeduna tahay Tampa Bay, Florida., Madico waxay macaamiisha ka dhigtaa midda ugu horreysa leh debecsan, wax soo saar iskaashi. Iyada oo loo marayo cilmi baaris adag iyo horumarin, Madico waxay ku fiicantahay soo saarida codsiyada hal abuurka leh si loo xaliyo caqabadaha macaamiisha. Laga soo bilaabo 1903, Madico waxay hormood u ahayd badeecooyin iyada oo ay ka go'an tahay tayada tayada. Xayeysiinta Filimka - Daaqadaha Daaqadaha - Muraayadaha Muraayadaha - Laminates - Tilmaamida Daaqadda - Muraayadda Muraayadda - Qalabka Gawaarida Gawaarida - Qalabka Badda - Qalabka Gaadiidka
Magic Tilt Trailers, Inc. Manufacturer Wax soo saarka Badda iyo Teknolojiyada Doomaha Doomaha iyo Qaybaha Laga soo bilaabo 1953, Magic Tilt Trailers, Inc waxay had iyo jeer soo saartaa gawaarida tayada leh ee tayada sare leh qiime aan caadi ahayn. Sannadaha waayo-aragnimada, hagaajinta tayada socota, iyo malaayiin mayl oo ah gawaariddeenna ayaa ku siinaya nabadda maskaxda in Magic Tilt soo saarto trailer ah oo u qalma kalsoonidaada iyo maalgashigaaga. Doomaha Doomaha iyo Qaybaha
Magna-Bon International Qaybiyaha Kiimikooyinka iyo Kiimikada kiimikada Fungicides Beeraha Magna Bon International LLC waa qeybiyaha dibedda ee wax soo saarka Magna Bon (www.magnabon.com) oo ay ku jiraan sheygooda caanka ah ee adduunka CS-2005. Waxyaabahan hooseeya ee maadada naaska lagu shubo ee loo yaqaan "fungicide" ayaa cadeeyay inuu yahay hogaamiye warshad iyo xalka baahiyaha beeraleyda. Badeecada hadda waa la iibinayaa oo lagu tijaabinayaa tijaabooyinka ka socda Brazil, Spain, Greece, Turkey iyo Israel. Waxaan soo dhaweyneynaa dhamaan qeybiyeyaasha jecel inay tijaabiyaan oo tijaabiyaan badeecada. Waxaan kaa caawin doonaa bixinta shaybaarka iyo qaabeynta hab maamuuska tijaabada dalaga si loo hubiyo guusha. Fungicides Naxaas dabiici ah oo Naxaas ah - Bakteeriyada Beeraha - Nadaafada Qalabka Beeraha - Sulfate Copper
Mainstream Engineering Corporation / QwikProducts by Mainstream Manufacturer Kiimikooyinka iyo Kiimikada kiimikada Gawaarida iyo Qalabka Daaweynta HVAC iyo Qalabka Mainstream waxaa la aasaasay 1986 by Dr. Robert P. Scaringe. Mainstream waa xal u janjeedha, cilmi baaris, horumarineed iyo soo saarid ganacsi yar oo ku yaal Rockledge, FL. Mainstream wuxuu ku bilaabmay laba qandaraas R&D oo ka socda Ciidamada Cirka ee Mareykanka. Hadda waxaan soo saarnaa qalab waxaanna u qabannaa cilmi baarista R&D hay'adaha ugu badan ee dowladda Mareykanka iyo qandaraaslayaal ra'iisul-wasaareyaal badan. Waxyaabaha caadiga ah waa la iibiyaa adduunka oo dhan waxaanan qabannaa Qeybta Isdhaafsiga Ganacsi ee Waaxda Difaaca oo ah 95%. Waxyaabaha ay soo saarto shirkadda 'Mainstream Engineering' waxay soo saartaa wax soo saar tayo sare leh oo casri ah, waxayna siisaa tababar, tijaabin iyo shahaado HVAC / R Industry. Sifeeyaha Hawada / Nadiifiyaha - Qalabka Dayactirka Terminalka - Qalabka Imtixaanka Aashitada - Dareeraha Dareeraha - Qaboojiyaha iyo Daaweynta Saliida - Nadiifiyaha Xaruufta Xumbo - Qalabka Tijaabada Qaabka - Qalabka Baarista Qalabka Qalabka CO
Mamachas Trading Qaybiyaha Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Iyaga oo matalaya xirfadlayaal caan ah iyo tafaariiqda tafaariiqda iyo noocyada daryeelka maqaarka adduunka oo idil. Qurxinta - Qalabka Qurxinta - Alaabada Daryeelka Shakhsiyeed
Mason Vitamins, Inc. Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Ku Saabsan Tayada Fiitamiinada Mason Waad Aamini Kartaa Ilaa 1967 Sheekadeena Waxay dhammaantood ku bilaabatay 1967 iyadoo leh aragti ah in la soo saaro alaab tayo sare leh lana ilaaliyo adeegga macaamiisha ugu fiican. Ganacsigeennu wuxuu ka bilaabmay dukaamada dawooyinka maxalliga ah, tan iyo markaasna waanu ballaarinay joogitaankeenna suuqa oo waxaan ka helnay aqbalaad macmiil adduunka oo dhan. Waan ognahay caafimaadka qoyskaaga inuu yahay ahmiyadaada koowaad, sidaa darteed, sanadihii la soo dhaafay waxaan ku darnay in ka badan 300 fiitamiinno iyo dheeri ah khadkayaga si ay ula jaan qaadaan baahiyahaaga caafimaad iyo inay taageeraan qaab nololeedkaaga. Ballanqaadkayaga Waxaa naga go'an alaabteenna iyo ladnaantaada. Iyada oo qayb ka ah himiladeenna, waxaan ku dadaalnaa inaan soo saarno alaabada ugu wanaagsan ee lagu joogtaynayo qaab nololeed caafimaad qaba adoo adeegsanaya waxyaabaha ugu tayada sarreeya ee buuxiya shuruudaha sharciyeynta. Cuntada dheeriga ah - Fiitamiinnada - Dhirta - Caloosha - Kiriimyada Quruxda - Saliidaha Muhiimka ah
McILPACK Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda At Mcilpack Waxaan ku faraxsanahay inaan awoodno inaan ku siino adeegyo badan oo kala duwan gudaha, taas oo noo oggolaaneysa inaan noqonno hal-joog-dukaameedka dhammaan baahiyaha ka soo bixi kara mashruucaaga wax soo saarka qurxinta. Ma jiro mashruuc aad noogu yar ama weyn. Haddii aad rabto alaabada midabka timaha, daryeelka maqaarka, ama alaabada spa, waan ku caawin karnaa. Haddii aadan 'haysan qaacido, waxaan kaa caawin karnaa inaad mid sameysid. Haddii aad haysato qaacido, waxaan kuu soo saari karnaa sheyga, ama xitaa kaa caawin karnaa inaad hagaajiso caanahaaga. Waxaan dooneynaa inaan kaa caawinno inaad abuurto badeecadaada oo aad suuqa uga baxdid, iyadoo mid ka mid ah waqtiyada ugu dhakhsaha badan ee soo noqoshada warshadaha. Nala soo xiriir si aan ugu bilowno ka shaqeynta mashruucaaga. Soo-saarista Qandaraaska - Daryeelka Timaha - Midabka Timaha - Daryeelka Maqaarka - Badeecooyinka Qubeyska
Meopta Manufacturer Photonics iyo Optics Milatariga iyo Aerospace Optics Meopta waa shirkad caalami ah oo leh dhaqan dheer oo hodan ah oo horumarineed, wax soo saar, iyo isku soo uruurinta heer caalami, heer sare, farsamo-yaqaanno iyo farsamo-yaqaanno optoelectronic ah. MeoptaNaqshadeynta ugu casrisan, soosaarka injineernimada iyo awoodaha isku imaatinka ayaa awood u siinaya inay siiso alaab iyo adeeg tayo sare leh suuqyada warshadaha, militariga iyo macaamiisha. Aragti - Opto Farsamo - Optoelectronic - Mashruucyada Cinematic Dijital ah - Teknolojiyada Hawada - Nidaamyada Hubka Milatariga
Meryt Manufacturer Alaabada Macaamiisha Nadiifinta iyo Nadiifinta Alaabada Meryt Corp waxay soo saartaa gacmo nadiifiyayaal tayo sare leh, jeermis dile, nadiifiyeyaal qaas ah iyo degreasoreyaasha ka shaqeeya gobolka Broward County Florida, USA. Meryt Wax soosaarka Warshadaha Corp waxaa loo qaabeeyey iyadoo la adeegsanayo istiraatiijiyad isku dhafan oo dabiici ah iyo teknoolojiyada deegaanka u habboon. Kooxdayada hal abuurka ah ee farmashiyeyaasha iyo injineerada waxay leeyihiin in ka badan 45 sano oo khibrad isku dhafan ah oo sameynta kiimikooyin gaar ah u leh warshadaha nidaamsan. Our FDA ka diiwaangashan fayodhowrka gacmaha iyo jeermiska EPA waxay la kulmaan heerka ugu tayada sareeya suuqa. Meryt Hadafka Corp wuxuu had iyo jeer soo saaraa alaab cagaaran oo waarta oo loogu talagalay deegaanka abuurista xalalka warshadaha kala duwan. Kiimikooyinka Nadiifinta - Kiimikooyinka Jeermiska - Nadiifiyeyaasha Gacmaha
Miami Dade College Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Daraasadaha Caalamiga ah ee Ganacsiga, Ganacsiga & Gaadiidka Miami Dade College waa hay'adda ugu kala duwan ee qaranka. Sideeda xarumood ee kulleejada, xarumaha fidinta iyo MDC Online ayaa bixiya in kabadan 300 dariiqooyin shahaado oo kaladuwan oo ay kujiraan shahaadooyin iskuduwaha iyo shahaadada jaamacadeed, shahaadooyin xirfadeed iyo tababar shaqo. MDC waa qaataha abaalmarino badan oo heer qaran ah oo ay kujirto abaalmarinta Aspen. Kulliyaddu waxay u adeegtaa sidii hoggaamiye dhaqaale, dhaqan iyo bulsho ahaanba horumarka bulshadayada kala duwan ee adduunka. Qalinjabiyeyaasheeda iyo shaqaalahoodu waxay gacan ka geystaan ​​in ka badan $ 3 bilyan sanad walba dhaqaalaha maxalliga ah, ardayda qalin jabisay ee MDC waxay ku fadhiyaan jagooyinka hoggaamineed ee ugu sareysa warshad kasta oo weyn. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo mdc.edu. MDC waxaa ku matalaya FITE afar ka mid ah dugsiyadeeda: The Miguel B. Fernandez Family School of Global Business, Trade and Transport, Innovation Business and Technology (BIT) Center, Sii wadida Waxbarashada iyo Horumarinta Xirfadeed (SCEPD), Injineeriyada iyo Teknolojiyada (EnTec) ), MDC Online, Iskuulka Sayniska. Ganacsiga Caalamiga ah - Daraasadaha Ganacsiga & Gaadiidka - Ku Baro Barnaamijyada Dibadda
Miami International University of Art & Design Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Sayniska Fanka Jaamacadda Caalamiga ah ee Farshaxanka iyo Naqshadeynta ee Miami (MIU) waa jaamacad farshaxan hal abuur leh oo ku taal meel hordhac u ah ardayda xiiseyneysa inay wax ka bartaan USA. Xarunteena waxay ku taal bartamaha Degmooyinka Fanka iyo Naqshadeynta ee Miami. Barnaamijyadeena shahaadada waxaa loo abaabulay dhinacyada Fashion, Gaming & Technology, Film & Production, Animation & Raadka, Suuqgeynta, Naqshadeynta Gudaha & Warshadaha, Muuqaalka Muuqaalka iyo Cunnada. Dhammaan shahaadooyinkeennu waxay leeyihiin aasaas adag oo xagga ganacsiga iyo ganacsiga ah waxayna diiradda saaraan xoogaa gaar ah, sida Naqshadeynta Dharka iyo Badeecadaynta, Farshaxanka Muuqaalka, Naqshadeynta Sawirka, Naqshadeynta Gudaha, Animation-ka Kumbuyuutarka, Saamaynta Muuqaalka, Soo-saarista Maqalka, Filim-sameynta Dijital ah, Farshaxanka Ciyaaraha & Naqshadeynta iyo dheeraad ah! Naqshadeynta Virtual - Naqshadeynta Gudaha - Nashaad iyo Saamaynta - Filim iyo Soosaaris - Fashion
Miracle Fruit Oil Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Miracle Fruit Oil Shirkaddu waxay siisaa wax soo saar tayo sare leh oo caafimaad / fayoobaanta & quruxda caafimaad ahaan lagu caddeeyay inay waxtar leedahay ayna taageerto saynis adag oo ay ku jiraan Mirac Miraha Abuurka Saliida®. Waxaan nahay shirkadda 1aad ee kaliya ee soo saarta alaab ay ku jiraan Miracle Miraha Abuurka Saliida, saliid abuur dhif iyo naadir ah oo saliid abuur ah oo laga helay ilo dabiici ah oo caafimaad qaba, miraha miraha miraha. Patent-yada ayaa la xareeyay iyo calaamadaha ganacsiga ee ka diiwaangashan USA iyo caalamkaba. Miracle Miraha Abuurka Saliida® Daaweynta Timaha waa soosaarka saliida timaha aduunka ugu horeysa oo kaliya oo ay kujiraan Miracle Miraha Abuurka Saliida®, oo caafimaad ahaan lagu cadeeyay inuu yahay mid amaan ah oo wax ku ool ah xoojinta timaha, yareynta jajabka, hoos u dhaca timaha burburka awgiis, iyo soo celinta timaha dhaawaca . Miraha Daaweynta Timaha Saliida Saliida - Qalabka Qurxinta - Qurxinta - Daaweynta Timaha
Morganna's Alchemy Skin Care Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda At Morganna's Alchemy, waxaa naga go'an inaan abuurno alaabooyinka daryeelka maqaarka ee u adeega nooc kasta oo maqaar ah. Morganna's Alchemy wuxuu muddo dheer u heellanaa helitaanka maaddooyin dabiici ah oo tayo leh oo laga helo adduunka oo dhan raadintana waxay naga caawisay inaan aqoonsanno qaar ka mid ah maaddooyinka ugu fiican ee dabeecadda ay tahay inay bixiso. Adoo adeegsanaya habkayaga saxiixa ee Phyto-Dermo-Cosmeceuticals, waxqabadyada aadka u xoogan ayaa lagu dhex geliyaa iswaafajin, iyagoo si deg deg ah oo aamin ah u keenaya natiijooyin xoog leh. Morganna's Alchemy oo ay taageerto maaddooyin la raad raaci karo oo caafimaad ahaan la xaqiijiyay, ayaa ah awood, waara, iyo daryeel maqaar dabiici ah oo aad ku kalsoon tahay. COSMOS Eco-Certified. Lagu sameeyay USA. Dhimista Laablaabidda - Isqurxinta - Antioxidants - Nadiifiyeyaasha - Daryeelka Indhaha - Daryeelka Timaha - Is xoqidda Wejiga iyo Maaskarada - Daryeelka Maqaarka Dabiiciga ah
Motive Learning Adeeg bixiye Adeegyada Maaliyadeed iyo Xirfadle Tababarka Shaqaalaha Warshadahaaga, howlahaaga, siyaasadahaaga. Ma jiro wax cookie ah oo ku saabsan. • Naqshadeynta Tilmaamaha waxay diirada saareysaa khibrad adeegsade adeegsade ah • Falanqeeyayaasha xogta ee go'aamiya u hogaansanaanta shirkaddaada • Xirfadlayaal fiidiyoow ah oo xirfad u leh farsamada isgaarsiinta At Motive Learning waxaan aaminsanahay in dhammaan mashaariicda waaweyni ay ku bilaabmaan aragti hal-abuur iyo istiraatiijiyad. Waxaan kugu hogaamineynaa habka hal abuurka ah si aan u qaabeyno aragtida tababarkaaga si aan u hubinno inay si istaraatiijiyad leh ugu habboon tahay yoolalkaaga iyo ujeeddooyinkaaga. Si wada jir ah ayaan si taxaddar leh u falanqeyneynaa dhaqanka ururkiina iyo firfircoonidiisa bartayaasha si loo go'aamiyo qaabka ku habboon eLearning, codka, heerka isdhexgalka, isticmaalka kaftanka, iyo astaamaha kale ee sare u qaadaya khibrada waxbarasho. Maareynta Aqoonta Shaqaalaha - Tababarka Shaqaalaha - Tababar Shaqo - Qiimeynta Waxqabadka Shaqaalaha
MRE STAR Manufacturer Alaabada Cunnada Cunnooyinka Diyaarka u ah in la cuno MRE STAR Cunnooyinka 'MRE', Diyaar u ah in la cuno (MREs) waa kuwo iskood u shaqeynaya, nafaqo isku dheelitiran oo nafaqo leh oo loo soo saaray qeexitaannada milatariga ee nolosha muddada dheer iyo dhadhanka weyn. Hal cunno oo dhameystiran waxay kakoobantahay inta udhaxeysa 1,100-1,300 oo kaloori waxaana kujira maadada, istaarijka, cunada fudud, macmacaanka, miraha isku dhafka cabitaanka miraha iyo xirmo siyaado ah oo ay kujiraan dhamaan waxyaabaha muhiimka ah, oo lagu daro kafee, nacnac iyo basbaas cas. Cunnooyinka 'MRE' ayaa diyaar u ah inay cunaan oo haddii aad ku darto kululeeyaha cuntada aan dabka lahayn, markaa waxaad heli kartaa cunno kulul, macaan oo nafaqo leh, meel kasta iyo waqti kasta. Cunnooyinka Milatariga iyo Gurmadka Degdega ah
MRT Cloud Adeeg bixiye Technology Information Isgaarsiinta Iyadoo loo marayo iskaashi lala yeesho Avaya, barnaamijka softiweerka ah ee 'AutoCrew Cloud' wuxuu siiyaa sii wadida ganacsiga, isgaarsiinta la isku halleyn karo iyo dabacsanaanta dhammaan warshadaha, oo ay ku jiraan daryeelka caafimaadka, waxbarashada, shirkadaha iyo federaalka iyo dowladaha hoose. AutoCrew Cloud waxay xaqiijineysaa in ururkaagu uu yahay mid aan kala go 'lahayn waqtiyadan aan la saadaalin karin. Nidaamkeena ayaa loo qaabeeyey si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee ururada inta lagu gudajiray Cudurka faafa ee COVID 19, hubinta jawaabaha waa kuwo waqtigooda, dheecaan iyo waxtar leh - bulshada siiya fursada ugufiican ee amaan lagu sugi karo. Xalalkani ma xadidna laakiin waxaa ka mid ah: Ololaha Wacyigelinta Muwaadiniinta otomaatiga ah ee COVID oo ku soo noqda sahanada shaqada Raadinta Xiriir otomaatig ah (heer urur iyo heer Gobol) U qalmida tallaalka iyo ololeyaasha soo saarista Jadwalka ballamaha iyo xusuusinta Ka sokow COVID 19 xal MRT wuxuu ku takhasusay ogeysiis ballaaran, foomamka IVR Auto iyo Kaqeybgalayaasha otomaatigga ah, Wadahadalka Webka iyo Khadka Taleefannada ee laga beddeli karo baahiyahaaga. AutoCrew Cloud (ACNS) - Teknolojiyadda Isgaarsiinta Degdegga ah - Teknolojiyadda Isgaarsiinta Musiibada - Qalabka Samatabbixinta Badda
Multicom Manufacturer Technology Information Qalabka Isku Xirka Broadband Next Products Gen Fiber Optic - Multicom waxay ku dhawaaqeysaa ficilkeeda jiilka soo socda ee Fibre Optic iyo Passives iyadoo faahfaahin laga helayo Multicom degel: www.multicominc. Multicom sidoo kale waxay ku dhawaaqeysaa gebi ahaanba hal kali keli ah iyo khadadka alaabada badan ee fiber optic-ka ah, oo ay ku jiraan rakibaadda iyo alaabta qalabka: Multicom iswada Fusion Splicer, OTDR, iyo inbadan - hada waa laheli karaa. Jiilka soo socda, muuqaalka hodanka ku ah, qiimaha ku fadhiya Multicom Khadadka waxsoosaarka fiber optic sidoo kale waxaa ka mid ah 1310 iyo 1550nm Optical Transmitters, heerka iyo awooda sare ee 1550nm EDFAs, Qaatayaasha indhaha, heerka caadiga ah iyo kan sare iyo helitaanka-keliya Micro-Nodes, iyo noocyo kala duwan oo ah Corning-fiber-based passives, splitters, WDMs, balastarrada iyo xayndaabyada kala jabka iyo fiilada 'Corning fiber optic cable'. Multicom waxay ku faantaa inay bixiso qaab-casri ah, GPON / FTTH / HFC / Wireless / IT / fiber optic xalalka dhammaadka-ilaa-dhamaadka ee shabakadaha xogta-codka-fiidiyowga - qiime aan caadi ahayn. Qalabka Isgaarsiinta Broadband - Fibre Optic Cable - Qalabka Pole Line - Video Encoders iyo Modulators - Suxuunta Satelite - Qalabka Fibre Optic
Multi-Media Works Adeeg bixiye Adeegyada Maaliyadeed iyo Xirfadle Production Video Multi-Media Works waa shirkad warbaahin ah oo abaalmarino badan ku guuleysata oo soo saarta fiidiyowyo, xiriirka dadweynaha, qorista waxyaabaha ku jira iyo warbaahinta bulshada. Xuduntayadu waa qorista iyo soo saarista fiidiyowyo sheeko-sheekeysi ah - filimaan-yar oo loogu talagalay shirkadaha, hay'adaha dowladda, kuwa aan macaash doonka ahayn Maxaa kaa dhigaya mid cajiib ah? Waxaan ogaanay oo aan u soo qaadaneynaa nolosha fiidiyowyo xusuus mudan. Intaa waxaa dheer, waxaan ku dhiirrigelinnaa fiidiyowyada suuqgeynta dijitaalka ah si aan ugu wadno taraafikada Websaydhkaaga. Haddaan nahay guud ahaan fadhigoodu yahay Koonfurta Florida, waxaan soo saarnay maxalliga, qaran ahaan iyo adduunka oo dhan. Fiidiyowgu waa aalad suuqgeyn xoog leh leh. Waxay ku hawlan tahay oo ku qancineysaa rajooyinka inay kaa doortaan tartankaaga. Maanta dadku waxay doorbidaan daawashada wax ka badan akhriska — 83% dhammaan taraafikada internetka waa fiidiyoow. Soosaarista Fiidiyowga - Qoraalka Mawduuca PR -
Natalie's Orchid Island Juice Company Manufacturer Alaabada Cunnada cabitaanka 30-kii sano ee la soo dhaafay, waxaan u heellanaynay quudinta qoysaska il nafaqada dhabta ah laga helo. Soo saarista casiir sumadeed cusub, nadiif ah ayaa shaqo jacayl u qabay qoyskeenna. Casiirrada Dabiiciga ah - Casiirka dabiiciga ah - Cuntooyinka lagu daro - Waxyaabaha sunta lagu nadiifiyo
Natural Vitamins Laboratory Corp Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Soosaarista gaarka ah ee fiitamiinnada iyo nafaqeeyayaasha ee qiyaaso kala duwan iyo foomam loogu talagalay milkiilayaasha sumadaha Fiitamiinnada iyo Kaabisyada - Kaabayaasha nafaqada, Macdanta - Dhirta - Soo saarista Sumadda Gaarka ah
New England Machinery Manufacturer Qalabka iyo Qalabka Warshadaha Qalabka Baakadaha Waa hogaamiye caalami ah hal-abuurnimo iyo tikniyoolajiyad casri ah, New England Machinery (NEM) waxay soo saartaa mashiinno baako-xawaare sare leh oo loogu talagalay cuntada, cabitaanka, dawooyinka, nafaqada, baabuurta, kiimikada, iyo warshadaha daryeelka shaqsiyeed. NEM waxay ku takhasustay Unscramblers, Cappers, Orienters, Lidders, Cap Tighteners, Overcappers, Pump Sorters, Pump Placers, Scoop Feeders, Pluggers, Hopper Elevators, Spout Inserters and more. Marka lagu daro khad buuxa oo ah badeecooyin heer sare ah oo tayo leh, NEM waxay naqshadeysaa oo dhistaa mashiinno baako gaar ah loogu talagalay codsiyada gaarka ah. New England Machinery waxay leedahay in kabadan 47 sano oo waayo aragnimo ah iyo kumanaan mishiin oo la dhigo aduunka oo dhan, labadaba shirkadaha Fortune 500 iyo waliba ganacsiyada yar yar ee bilowga ah. Waxaa aasaasay 1974 injineero khibrad u leh baakadaha, NEM waxay sii wadaa inay maalgashi ballaaran ku sameyso R&D si ay u siiso xaalad farsamo farshaxan macaamiisheeda badan. Tikniyoolajiyadda horumarsan oo ay weheliso adeegga macaamiisha ee ka sarreeya ayaa kasbatay NEM sumcad tixgelin sare leh. Qalabka Baakadaha - Unscramblers - Cappers - Orienters - Retorquers - Pump Placers - Lidders - Scoop Feeders
NonaMins Gummy Vitamins Qaybiyaha Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Qadka fitamiinada ee 'NonaMins' wuxuu xoojiyaa difaaca jirka iyo caafimaadka guud. Foormulada dhakhtarka ee lagu sameeyo tayada ugu sareysa ee maaddooyinka: * Faytamiinnada aan carruurta lahayn ee loo yaqaan 'MultiVitamins' oo dhammaystiran waxay siisaa kobcin maalinle ah habka difaaca jirka ee carruurtaada fiitamiinnada iyo macdanaha muhiimka ah sida Fiitamiinnada A, C & D, Zinc iyo Calcium. Hab wanaagsan oo lagu horumariyo nafaqada cunnada cunnada leh. * Faytamiinnada Fiitamiin D waxay ku habboon yihiin caafimaadka lafaha, ka hortagga kansarka iyo caafimaadka guud. Waxay yareysaa Murugada, Daalka, jirka xanuun iyo xanuuno. Ka saar blah! * Faytamiinnada birta ah ee leh fiitamiinno badan ayaa ah habka ugu macaan ee lagu galiyo birtaada. Iyada oo ay weheliso B-complex, fiitamiinadan ayaa kaa caawin doona kordhinta heerarka tamartaada, hurdo fiican iyo ka takhalusidda ceeryaanta maskaxda, hagaajinta diiraddaada waxayna kaa caawineysaa nafaqeynta iyo soo celinta jirkaaga dukaamada birta oo yaraaday. Fiitamiinnada - Kaabisyada - Badeecooyinka Caafimaadka iyo Caafimaadka
NovoaGlobal, Inc. Manufacturer Gaadiidka iyo Qalabka Kaabayaasha dhaqaalaha iyo Gaadiidka NovoaGlobal® waa horumariye hormood ah soona saare ka ah maaraynta taraafikada sare, hirgelinta sawirrada iyo xalalka sirdoonka ee loogu talagalay in lagu hagaajiyo nabadgelyada taraafikada, loo yareeyo dhaawacyada waddooyinka iyo dhimashada iyo in laga caawiyo sharci fulinta yareynta / xallinta dambiyada ka dhaca bulshadooda. NovoaGlobal kamarad cas oo si otomaatig ah u shaqeysa iyo xallinta dhaqangelinta sawirrada xawaaraha ayaa lagu daraa tiknoolajiyadaha ugu dambeeya ee kaamirooyinka iyo ogaanshaha fiidiyowga, HD qabashada muuqaalka iyo farsamaynta sawirrada, iyo radar-dabagal badan, si loogu magac daro dhowr. Iyadoo la adeegsanayo Red Light & Speed ​​Speed ​​Enforcement, NovoaGlobal waxay ka caawisaa dawladaha hoose inay gaaraan himilooyinka Vision Zero iyo Safe City. NovoaGlobal waxay bixisaa awoodo fulin oo dheeri ah sida isgoyska, gridlock, calaamada joogsiga, baarkinka gawaarida, gawaarida weyn, isgoyska tareenka, tikidhada elektarooniga ah, iyo kamarada jirka. Intaa waxaa sii dheer, Nidaamka Aqoonsiga Liisanka Liisanka Iswada ee NovoaGlobal ayaa si buuxda loogu dhex daray nalkayaga casaanka iyo xallinta dhaqangelinta xawaaraha. Tikniyoolajiyadda taraafikada ma aha oo kaliya ganacsigeenna; waa hamigeena. Waxaan si hagar la’aan ah uga shaqeynaa sidii aan u horumarin lahayn amniga taraafikada maalin kasta. Fulinta Gawaarida otomaatigga ah (ATE), Badbaadada Dadweynaha, Nabadgelyada Wadada, Maareynta taraafikada, Badbaadada taraafikada, Dhaqangelinta Sawirka, Kaamirada Nabadgelyada Wadooyinka, Dhaqangelinta otomaatiga ah, Dhaqangelinta Sharciga, Kaamirada Casaanka ee Nalalka, Xawaaraha Kameradda
Olivia Oils & Supplements Qaybiyaha Alaabada Macaamiisha Qaybinta Alaabada Tafaariiqda OLIVIA waxaa shidaal siisay u go'naanta. Waxaa naga go'an inaan siino alaab ka caawisa dadka inay ku noolaadaan nolol caafimaad leh, nolol farxad leh.Waxay ku bilaabatay aragti si loo abuuro faylalka tacliimeed oo gaar ah oo diiradda lagu saaray fikradaha cusub. Aqoonteena iyo khibradeena waxay dejineysaa heerka iyo tayada sare ee looga baahanyahay abuurista qeyb kasta.Marka aan sii wadno socdaalkeena aan dhamaadka laheyn ee ku wajahan hagaajinta qaab nololeedyada caafimaadka qaba, ADIGA ayaa had iyo jeer ahaan doona udub dhexaadka OLIVIA. Shirkadda Maareynta Dhoofinta - Alaabada Cuntada - Alaabada Daryeelka Shakhsi ahaaneed - Qeybinta Wax soo saarka Supermarket - Qeybinta Cuntada Tafaariiqda - Alaabada Macaamiisha
Organic Farms Vitamins Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Organic Farms Vitamins wuxuu leeyahay khad ballaadhan oo tayo sare leh, dhammaan fiitamiinnada dabiiciga ah iyo wax soo saarka nafaqada ee lagu sameeyo Maraykanka, oo koray shan iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay. Astaamaha ugu muhiimsan ee naga soocaya inta badan noocyada dheellitirka ayaa ah noocyo kala duwan oo qaaciidooyin isku dhafan oo aan bixinno halkii ay ka ahaan lahaayeen wax soo saarka keliya ee ka kooban. Qaaciddooyinkayaga isku dhafan waxay beegsanayaan sababo badan oo ka mid ah xaaladaha caafimaad qaarkood iyada oo la adeegsanayo habab ballaadhan halkii looga baahnaan lahaa dhowr badeecooyin kale oo isla faa'iidooyin ah. Organic Farms Vitamins waxaa lagu qaadaa dukaamada waaweyn ee farmashiyaha sida Walgreens, iyo farmashiyayaal kale oo badan oo madax banaan iyo dukaamada cuntada caafimaadka. Waxaan sidoo kale ku leenahay barnaamijka iibinta tooska ah ee firfircoon Puerto Rico oo leh xog ururin ka badan macaamiisha 300,000. Waxaan hada sii balaarineynaa si caalami ah si aan u keeno wax soo saarkeena tayada leh ee la xaqiijiyay dalal kale. Waxaan xiiseyneynaa inaan la shaqeyno qeybiyeyaasha ama si toos ah tafaariiqleyaasha doonaya inay siiyaan macaamiishooda miyir qabka ah xal lagu kalsoon yahay. Cuntada dheeriga ah - Fiitamiinnada - Diyaargarowga Dhirta
PABOT Adeeg bixiye Qalabka iyo Qalabka Warshadaha Wakiilka Soo-saaraha HOGAAMIYAHA LA TASHIGA CAALAMIGA AH Shirkadeennu waxay la xiriirtaa xirfadlayaal khibrad u leh dhinacyo badan oo ka kala socda qaaradaha badan. Waxaan diyaar u nahay inaan xallino dhibaatooyinkaaga la xiriira soo saarista aaladaha dheemanka, qalabka isku dhaca, iyo miraha darbi-jiifka. Waxaan bixinnaa alaabta ceyriinka ah, qalabka wax soo saarka, alaabada nus dhammaadka ah, iyo adeegyada la-talinta qeybta saddexaad. Khibradayada caalamiga ah waxay noo saamaxaysaa inaan fahamno dhaqammada kala duwan waxayna na siisaa dabacsanaan iyo karti aan kula macaamilno warshadaha kala duwan. Soosaarida Waxyaabaha ceyriinka ah - Adeegyada La-tashiga ee Xisbiga 3aad - Shirkad Ganacsi Dhoofin ah - Qalab Dheeman - Qalabka Warshadaha
Palladio Beauty Group Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Palladio Beauty Group waa shirkad hormuud ka ah nadaafad qurux badan oo Mareykan ah oo la aasaasey sanadkii 1999 waxaana soo saaray halyeeyo warshadeed waxayna xarunteedu tahay Koonfurta Florida. Waxay diiradda saareysaa khadadka alaabta qiimaha leh ee xirfadlaha ah oo ay ka mid yihiin: Palladio Cosmetics Caan ku ah wanaagga ay u leedahay maqaarkaaga dawooyinka botanical iyo vitamin-ga. Cosmetics-ka Palladio waa Paraben-Free, Cruelty-Free, oo waxay bixisaa noocyo badan oo ah alaabooyinka vegan iyo Gluten-Free. Probelle Waa shirkad hogaaminaysa ciddiyaha cagaha iyo cagaha ee ku takhasustay daaweynta ciddiyaha iyo cagaha, iyo daryeelka anti-fungal Prolana Waa badeecad wax soo saar saloon xirfadlayaal ah oo diiradda saareysa xoojinta ciddiyaha Mareykanka Palladio waxaa lagu iibiyaa kanaalka quruxda badan ee xirfadleyda ah iyadoo leh in ka badan 5,000 oo dhibcood oo iib ah . Adduunweynaha, wax soo saarka Palladio waxaa lagu iibiyaa in ka badan 50 dal. Waxyaabaha la isku qurxiyo - Qalabka Qurxinta - Samee Qalabyada - Qalabka iyo Burushka - Qurxinta Faytamiin Lagu Darey
Palm Beach Atlantic University Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Daraasaadka Kuleejka Guud Palm Beach Atlantic University waxaa la dejiyey bartamaha mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan uguna caansan Ameerika, ee ku taal bartamaha West Palm Beach, Florida. Marka lagu daro quruxda dabiiciga ah ee goobta aan ku leenahay marin biyoodka Intracoastal, PBA waxay bixisaa fursado waxbarasho iyo xirfadeed oo aan la qiyaasi karin. Waxaan bixinaa in ka badan 50 barnaamijyo tacliimeed iyo heer sare iyo iskucelceliska cabbirka fasalkeennu waa ilaa 17 arday. Waxaad noqon doontaa shaqsi qiimo leh oo himilooyinkiisa, danahiisa, baahidiisa iyo riyadiisa ay maalin walba taageerayaan kuliyado isugu jira rag iyo dumar masiixiyiin ah oo khubaro caan ah iyo macallimiin u heellan. Aragtida adduunka Kirishtaanka waxaa lagu dhex daray dhammaan dhinacyada khibrada PBA, laga bilaabo fasalka ilaa nolosha ardayga. Darajooyinka qalin-jabinta iyo qalin-jabinta - Baro Barnaamijyada Dibedda - Farshaxanka - Aadanaha - Sayniska
Palm Beach Naturals Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Aasaasay sannadkii 2014, Palm Beach Naturals waxay u heellan tahay sameynta beddello ammaan ah, dabiici ah oo wax ku ool u ah kiimikooyinka qallafsan ee badanaa sunta ah iyo daawooyinka inta badan loo isticmaalo caafimaadka iyo waxyaabaha quruxda maanta. Khadka FOOM SENSE ee alaabooyinka daryeelka cagaha-dabiiciga ah oo dhan ayaa la ogaaday inuu yahay beddel wax ku ool ah oo waxtar u leh kiimikada ku saleysan iyo waxyaabaha kale ee aan waxtarka lahayn ee ay macaamiishu ku tiirsan yihiin. Waxaan soo saarnaa alaab tayo sare leh iyadoo la adeegsanayo kaliya waxyaabaha dabiiciga ah ee ugufiican aduunka oo dhan. Dhammaan alaabooyinkayagu waxay ku samaysan yihiin Maraykanka oo ay taageerayaan dammaanadda 100% lacag celinta. Si fudud loo dhaho, Khadka XADGUDUBKA CAGTA waa beddel game! Waxyaabaha Cagaha ee Organic - Alaabada Gadhka - Cabbitaannada Borotiinka - Cilmiga Probiotics
Pegasus Medical.net Adeeg bixiye Sayniska Nolosha & Teknolojiyada Caafimaadka Qalabka Isbitaalka Fikradaha Caafimaadka ee Pegasus Incorporated waa hogaamiye caalami ah oo bixiya xalka kaydinta caafimaad ee guuleysta ee maanta hogaaminaya Ururada Daryeelka Caafimaadka Khadkeena balaaran ee wax soosaarka waxaa ka mid ah xalal fara badan oo lagu xaliyo keydinta caafimaadka iyo armaajooyinka caafimaadka iyo sidoo kale gaadiid kala duwan, dib u soo nooleyn, iyo gawaarida nidaamka. Gawaarida - Kabadhada - Rakiilo furan - Kaydinta - Alaabta guriga
Perry Baromedical Manufacturer Sayniska Nolosha & Teknolojiyada Caafimaadka Qalabka Caafimaadka Perry Baromedical waa hogaamiye caalami ah oo qaabeynta iyo soosaarida nidaamyada oksijiin hyperbaric (HBOT). Waxay ka faa'iideysaneysaa in ka badan 60 sano oo waayo-aragnimo ah injineernimada cadaadiska iyo wax soo saarka. Perry wuxuu rakibay in kabadan 1,500 oo nidaam oo ah xarumaha daryeelka caafimaadka ee kuyaala 40 + waddan, iyadoo in kabadan 4.5 milyan oo daaweyn ah si nabadgalyo leh loo dhameeyay. Qolalka 'Hyperbaric' waa aaladaha caafimaadka ee US FDA Class II ee loo isticmaalo daaweynta afar iyo toban (14) tilmaamaha caafimaadka ee ay oggolaatay US FDA ee isticmaalka. Kuwaas waxaa ka mid ah nabarro dabadheeraad ah oo ay ku jiraan DFUs, dhaawacyo shucaaca ka dib, iyo daboollo iyo tallaalmo waxyeellay. Perry wuxuu ka tiriyaa macaamiisheeda silsiladaha adeegyada bukaan socodka daryeelka caafimaad ee ugu horumarsan gudaha Mareykanka, US NAVY iyo AIR FORCE, iyo sidoo kale isbitaalada tixraaca ee USA, Japan, Taiwan, Canada, UK, Spain, Australia, iyo meelo kale. Perry wuxuu soosaaraa monoplace-ka ugu weyn uguna raaxada badan dunida iyo laba-meelood oo lagu daydo qolka HBOT, oo ay kujiraan Sigma iyo BARA-MED alaabooyin taxane ah labadaba. Qolalka Hyperbaric Oxygen Therapy
Pole Star Adeeg bixiye Duulista iyo Hawada Farsamada GPS Tracking At Pole Star waxaan horumarineynaa teknoolojiyada hormoodka ah, adiga oo kaa ilaalinay inaad safka hore ka gasho aragtida badda iyo awoodsiinta go'aamadaada dhabta ah ee dunida. Waxaan ku faraxsanahay inaan la shaqeyno dawladaha iyo ganacsiyada guud ahaan silsiladda wax soo saarka. Wadajir, waxaan ka ciyaareynaa qayb muhiim ah abuuritaanka jawi hawlgal hufan, ammaan ah, oo waafaqsan. Xalalkeena kala duwan ayaa si gaar ah loogu talagalay in macluumaadka gaarka ah loogu rogo aragti la heli karo oo ku saabsan iswaafajinta sharciga, baaritaanka cunaqabateynta, u hogaansanaanta ganacsiga, dabagalka, kormeerka, iyo amniga maraakiibta. Lasocodka Marin - Maareynta Dhacdada - Adeegga Macluumaadka Jilaafiga ee La Kordhiyay - Raadinta Badaha Ganacsiga - LRIT Conformance - Wacyigelinta Badda ee Badda
Port Canaveral Adeeg bixiye Kaabayaasha dhaqaalaha iyo Gaadiidka Maamulka Dekada Port Canaveral waa marin heer caalami ah oo loogu talagalay dalxiisyada, xamuulka, madadaalada iyo saadka, iyo sidoo kale marin laga helo xuduudaha cusub. Port Canaveral waxay leedahay kaalin mug leh iyo masuuliyad dhisida iyo joogtaynta dhaqaale xoogan oo kuyaala Xeebta Space Space ee Florida iyo gobolka Central Florida - oo hada ah suuqa 10aad ee ugu badan macaamiisha Maraykanka, oo leh koboc dhaqaale oo sifiican uga sareeya celceliska qaranka. Iyada oo leh xamuul kaladuwan iyo baahiyaha sii kordhaya ee howlaha meheradaha ganacsiga ee gobolka, dekeddu waxay maalgashanaysaa kor u qaadista awoodda iyadoo la hagaajinayo dekedda iyo kaabayaasha dhulka, sida dhismaha iyo dib u habeynta barkadaha qotada dheer si ay ula jaanqaadaan dalabyada isla markaana loo kobciyo barwaaqada dhaqaale ee gobolka Aagga Shisheeyaha-Ganacsiga ee Dekedda No.136 waxay bixisaa xarun gaadiidka u gaar ah oo laba-geesood ah, isku xidha badda, berriga, hawada iyo booska oo leh faa'iidooyin ay ka mid yihiin marin-u-helidda waddooyinka fudud, qabyo-qoraalka hawada aan xaddidnayn, marin biyoodka qoto-dheer ee 43-ka ah iyo helitaanka dhul-beereed badan. Maraakiibta Badda - Maareynta Xamuulka - Bakhaar - Qaybinta -Talminalka Markabka Burburka
Port Everglades Urur aan dawli ahayn Kaabayaasha dhaqaalaha iyo Gaadiidka Maamulka Dekada Awood caalami ah oo ganacsi caalami ah, Port Everglades sida caadiga ah wax ka qabata in ka badan hal milyan oo TEUs sanadkiiba waxayna u adeegtaa irrid laga galo Latin America, Kariibiyaanka iyo Yurub. Waxay ku taalaa magaalooyinka Florida ee Fort Lauderdale, Hollywood, iyo Dania Beach, Port Everglades waa bartamaha mid ka mid ah gobollada ugu macaamiisha badan, oo ay ku jiraan socodka joogtada ah ee ku dhowaad 112 milyan oo booqdayaal ah oo ku baahsan gobolka oo dhan iyo 6 milyan oo qof oo deggan meel u jirta 80-mayl. Port Everglades waxay marin toos ah u leedahay nidaamka weyn ee wadada dheer iyo xarunta wareejinta konteenaro ee Florida East Coast Railway ee ah 43 hektar, waxayna ka dhowdahay Maraakiibta Maraakiibta Atlantikada marka loo eego dekeddaha kale ee Koonfur-bari Mareykanka. Hagaajinta raasumaalka socda iyo ballaarinta wadarta $ 3 bilyan 10-ka sano ee soo socota ayaa la hubinayaa Port Everglades sii wado la tacaalidda koritaanka mustaqbalka ee taraafikada konteenarrada. Maraakiibta Badda - Qabashada Xamuulka - Bakhaar - Qaybinta
Port Tampa Bay Adeeg bixiye Kaabayaasha dhaqaalaha iyo Gaadiidka Maamulka Dekada Port Tampa Bay ayaa u soo baxday sidii xal u helida silsiladda cusub ee Florida ee xamuulka kontaynarrada, iyada oo ballaarinaysa kaalinteeda ah marinka ay gobolka u tahay marinnada badeecadaha waaweyn & jaban. Ku darida adeegyada tooska ah ee konteenarrada Aasiya & isku xidhka cusub ee Mexico waxay si weyn kor ugu qaadday doorka aan ka leenahay u adeegida gobolka ugu weyn & suuqa ugu koritaanka badan - Tampa Bay / Orlando I-4 Corridor, Florida's Distribution Hub. Gobolkan Bartamaha Florida sidoo kale waa mid ka mid ah suuqyada guryaha ugu warshadaha guryaha ugu wanaagsan dalka & xarunta Florida ee qaybinta, saadka & wax soo saarka. Hoyga u dhow kala badh bulshada Florida ee 21 milyan oo qof, iyo soo dhaweynta aqlabiyadda in ka badan 126 milyan dalxiisayaal sanad walba, Wadada I-4 waxay leedahay isku soo uruurinta ugu badan ee DC-yada gobolka. Sida albaabka hore ee I-4, Port Tampa Bay wuxuu ku yaalaa meel wanaagsan si loogu adeego kobaca sii socda ee gobolka, wuxuu sii hurinayaa baahida loo qabo tafaariiqda, ganacsiga, cuntada & cabitaanka, wax soo saarka tamarta, & dhismaha & qalabka dhismaha. Maraakiibta Badda - Maareynta Xamuulka - Bakhaar - Qaybinta -Talminalka Markabka Burburka
PortMiami Dowladda Kaabayaasha dhaqaalaha iyo Gaadiidka Maamulka Dekada PortMiami dhaqaaqay 1,066,738 TEUs, oo matalaysa in ka badan $ 45 bilyan oo alaab ah. PortMiami ayaa nasiib u leh in rarka laga raro saddex gobol oo waaweyn oo adduunka ah, iyadoo 46% alaabteenna laga keenay Latin America iyo Kariibiyaanka, 33% laga keenay Aasiya, 20% laga keenay Yurub, runna loo yahay Global Gateway. Waxaan rajeyneynaa inaan xamuul sii kordhineyno iyadoo lala kaashanayo dekedaha kale ee Florida. Maraakiibta Badda - Maareynta Xamuulka - Bakhaar - Qaybinta -Talminalka Markabka Burburka
Power-Pole Products Manufacturer Wax soo saarka Badda iyo Teknolojiyada Barroosinka Badda iyo Qalabka JL Marine (Power-Pole Products), hal abuurayaasha asalka u leh Power-Pole Shallow Water Anchors, waxay bixisaa qalab balaaran oo balaaran oo injineernimo ah si ay u bixiso Xakamaynta Guud ee Doomaha, oo ay kujiraan calaamado dhaadheer oo ay kujiraan oo ah Blade Series, Micro Spike Driver, the CHARGE Marine Power Management Station (North America) kaliya) iyo in ka badan. Meelaha Biyoodka Gacmeed - Barroosinka - Maraakiibta Elektaroonigga ah - Troll Motors - Motors Marine Marine
PPP Traffic Safety Innovations Manufacturer Kaabayaasha dhaqaalaha iyo Gaadiidka Badbaadada Dadka Lugta ah iyo Darawalada Waxaan si xamaasad leh u keennaa suuqyada hal-abuurka nabadgelyada waddooyinka ee badbaadiya oo ilaaliya nolosha dadka u gudbiya ururada fikirka, adduunka oo dhan, oo doonaya xalal dhaqaale oo si fudud loo hirgelin karo si loo daboolo baahida waddooyinka ee isbeddelaya loona baabi'iyo dhimashada. Alaabada Calaamaynta Laamiga - Waxyeelada Calaamadaha Wadooyinka - Alaabada Nabadgelyada Wadooyinka - Alaabada Nabdoonaanta Dadka Caga - Lane Separators - Waxyaabaha Badbaadada Baaskiillada - Retroreflectometers - Badeecadaha Amniga Garoonka
Prism Lighting Services Manufacturer Dabka iyo Badbaadada Iftiinka dibadda Soo-saare nidaamyo nalka loo yaqaan Prism Inflatable. Nalalka Daadka - Diyaargarowga Degdegga ah - Qalabka Musiibada - Goobid iyo Samatabbixin - Laydhka Degdegga ah - Laydhka Warshadaha Dibadda
Products On The Go Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Products On The Go horumariyo oo iibiso dhir ku saleysan, dabiici ah, badbaado leh oo bey'ada u fiican iyo alaabta daryeelka qorraxda oo ah sheybaar Mareykan iyo mid caalami ah oo sugaya, NPA sifo sharci ah oo la aqoonsan yahay, iyo takhtar la ansaxiyay. Xalkayaga saxeexan ee saxeexa ah ee ku saleysan jaangooyooyinku waa kuwo ku habboon qaab nololeedka xiisaha bannaanka, safarleyda usbuuca, iyo waalidiinta si isku mid ah. Waxaan u soo bandhigeynaa macaamiisha nidaam dhameystiran oo ah alaabooyin badan oo dabiici ah oo ka shaqeeya laba nooc. Faraha Yar Iyo Qorraxda Oo Socda. Faraha yar waxaa ka mid ah qalabka xafaayadda xafaayadda iyo Sunshine On The Go waxaa ku jira alaab dabiici ah oo qorraxda lagu daryeelo, oo ay ku jiraan maaddooyinka loo yaqaan 'reef mineral' oo loo yaqaan 'sunscreens', iyo sidoo kale huurka, iyo bushimaha. Dhammaan alaabooyinkan waxaa laga iibsan karaa cabirrada tuubbada safarka, waxyaabo badan oo gaar ah oo la bixiyo, iyo qaabab loo qaabeeyey socodka. Kareemka Kiri - Qorrax madoobaadka - Glitter
QCS Adeeg bixiye Alaabada Cunnada U hoggaansanaanta Badbaadada Cuntada Iyadoo joogitaan caalami ah oo sii kordheysa, QCS waxaa ka go'an inay ka caawiso beeraleyda adduunka oo dhan inay ku xirnaadaan oo ay ka go'antahay dhaqamada beerashada ee ugu wanaagsan. Haddii aad naga hesho shahaado ama 12 si fudud aad u hesho su'aal waxaad damaanad qaadi kartaa hal shay: Meel kasta oo aad joogto, annagaa halkaa joogna oo diyaar ayaannu u nahay inaan ku caawinno. Sharciga Casriyeynta Badqabka Cunnada - Badbaadada Cuntada - Shahaadooyinka Caadiga ah - Dhaqanka Wanaagsan ee Beeraha (GAP) - La-taliyayaasha Soo-saarista Cuntada
Ramtech Overseas, Inc. Manufacturer Qalabka iyo Qalabka Warshadaha Caaga caaga ah Waxaa la aasaasay sanadkii 1987 magaalada Tampa, Florida, USA, Ramtech Overseas, Inc. waa hogaamiyaha dhoofinta sibidhka PVC dareeraha iyo walxaha macmalka ah ee soosaarayaasha Mareykanka iyo kuwa caalamiga ah ee macmiilaha ee Turkiga, Bariga Dhexe, Afrika, Aasiya, iyo Latin America. Kala duwanaanshaheena wax soo saarka ayaa sidoo kale ka mid ah robotic, nidaamka saarista shubka ee cadaadiska sare ee warshadaha shubka diyaarka ah. Caaga Sintetikka - PVC - PE - PP - EVA - xabagta PVC
Beerta Cilmi baarista ee FAU Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Education Global Ventures at FAU waxay gacan ka geysaneysaa shirkadaha tiknoolajiyada soo koraya inay ka ballaariyaan suuqyadooda guryahooda illaa Koonfurta Florida, oo ah magaalada 7-aad ee ugu weyn magaalada Mareykanka iyadoo lala wadaagayo shabakaddeeda xirfadlayaal xagga ganacsiga ah oo laga yaqaan Koonfurta Florida iyo cilmi-baaris istiraatiiji ah oo ay shirkadoodu ku kobcayaan iyagoo horumarinaya xiriiro adag oo ka socda suuqa Koonfurta Florida. Global Ventures waxay dardar galineysaa kobacaaga iyadoo adeegsaneysa 20 + sano oo khibradeena ah: iyadoo qeyb ka ah Florida Atlantic University (FAU) bulshada waxaan kugu xireynaa ilaha cilmi baarista ee FAU, oo ku takhasusay daryeelka caafimaadka, sayniska nolosha, dareemayaasha, iyo shabakadaha iyo sidoo kale injineernimada badda iyo cilmiga deegaanka. Ardayda 30,000+ ee FAU waa kuwo dhiirrigeliya oo diyaar u ah inay kula shaqeeyaan sidii layliyo ama shaqaale ku darista kooxdaada maaddaama ay sii kordheyso macaamiisheeda Mareykanka. Adeegyadeena waxaa ka mid ah ilaha soo gelitaanka suuqa hordhaca ah, hordhaca shabakadeena alaab-qeybiyeyaasha iyo kuwa wax iibiya, helitaanka raasamaalka maalgashiga iyo sidoo kale fursadaha dhaqameed iyo tababaro kale. Cilmi-baarista Ku-saleysan Tacliinta - Hal-abuurka - Isku-dubaridaha Ganacsiga - Teknolojiyadda iyo Hal-abuurka
RGF Environmental Group, Inc. Manufacturer Alaabada Cunnada Qalabka Badbaadada Cuntada RGF waxay soo saartaa in kabadan 500 oo ah alaabooyinka deegaanka ah waxayna leedahay 35+ sano taariikh ah inay aduunka siiso hawada ugu fiican, biyaha iyo cuntada iyadoo aan la isticmaalin kiimikooyin. RGF waa shirkadda ISO 9001: 2015 oo ah shirkad cilmi baaris iyo hal-abuurnimo la aqoonsan yahay, oo haysata shatiyado badan oo loogu talagalay nidaamyada daaweynta biyaha wasakhda ah, aaladaha sifaynta hawada, iyo nidaamyada fayadhowrka cuntada. Waxay ku taal bartamaha Port of Palm Beach Enterprise Zone, Xarunta RGF waxay ku egtahay 9 hektar, oo leh 130,000 cag laba jibbaaran oo wax soo saar, bakhaar iyo xafiisyo. RGF waxay dhowaan cusbooneysiisay xarumahooda, iyadoo abuuraysa qaab toosan oo toosan oo wax soo saar ah, taas oo u oggolaaneysa shirkadda inay ku siiso alaabada ugu tayada sareysa uguna fiican injineernimada suuqa. Daaweynta Biyaha Warshadaha - Qalabka Badbaadada Cuntada ee aan Kiimikada ahayn ee Ka Hortagga Cunnooyinka, Badeecadaha Tayada Hawada ee Gudaha - Nidaamyada Nadiifinta Hawada - Daaweynta Biyaha Qashinka - Dib u warshadeynta Biyaha - Fayadhowrka Cuntada
Richard's Paint Mfg. Inc. Manufacturer Qalabka iyo Qalabka Warshadaha Rinjiga iyo Maqaarka In ka badan 60 sano, waxay ahayd himiladeenna inaan ugu adeegno macaamiisheenna daryeelka iyo farsamada gacanta oo si gaar ah ay u bixiyaan ganacsi qoysku maamulo - Qoyska Richard. Sannadkii 1954-kii Ed Richard, Sr, qandaraasle rinjiyeyn xilligaas ah, wuxuu dhisay qaybtiisii ​​ugu horreysay ee rinjiga. Isaga oo u siinaya rinjiyeyaasha kale rinjiyeyaasha kale, wuu socday wuuna la hadlay sidii uu uga bartay waxa ugu badan ee ay ka raadsadaan dahaadhka ay adeegsadaan. Sidaas ayuu ku bilaabmay safarkii iyo dhaxalkii soo saarista Rinjiga Richard. Iyada oo leh xafiisyo, wax soo saar iyo xarumo bakhaarro oo ku yaal Rockledge, FL, Xeebta Xeebta waa gurigeenna. Waxaan ka soo kabanay bilow bilowgiisii ​​yaraa ilaa hada u adeegida macaamiisha suuqyada guryaha, hay'adaha, ganacsiga iyo warshadaha leh boqolaal wax soo saar oo ku dhowaad meel kasta oo u baahan in la qurxiyo lana ilaaliyo. Rinjiyeyaasha - Wasakhda - Varnishes - Caulking - Waxsameeyayaal La taaban karo
Saint Leo University Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Daraasaadka Caalamiga ah Aasaasay sannadkii 1889, Saint Leo University waa jaamacad gaar loo leeyahay oo lagu qiimeeyo, kuna taal Florida. Saint Leo waxay hoy u tahay in ka badan 600 ardayda caalamiga ah ee ka kala socota 100 dal. Waxaan u fidinaa ardaydeena waayo-aragnimo kulleejo oo wanaagsan - oo ka socota aqoonyahanadayada hormoodka ka ah ee leh barnaamijyo ka badan 50 iyo dardar gaar ah oo 3 + 1 ah oo lala yeesho arday ilaa heerka kuliyadaha 14: 1 illaa iyo u heellanaanta qiyamka aasaasiga ah ee Benedictine. Waxaan leenahay siyaasad-ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo aan u baahnayn codsadayaasha shahaadada koowaad inay soo gudbiyaan dhibcaha SAT, ACT ama GRE, GMAT inta lagu gudajiro howsha ogolaanshaha. Saint Leo waxay bixisaa deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda shahaadada koowaad, si ay uga caawiso inay ka dhigto waxbarashada gaarka loo leeyahay Mareykanka mid la awoodi karo oo ay heli karaan ardayda adduunka oo idil. Daraasadaha Caalamiga ah - Ku Baro Barnaamijyada Dibedda
Santa Fe College Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Daraasaadka Kuleejka Guud Santa Fe College waxaa aasaasay dowlad goboleedka 1965 si loogu bixiyo fursad ballaaran oo lagu helo waxbarasho sare oo tayo leh. Tan iyo markaas, kulleejku wuxuu aasaasay barnaamijyo iyo adeegyo fuliya hadafkooda fursadda waxbarasho, ka jawaab celinta bulshada, horumarka dhaqaalaha iyo hal-abuurka danta guud. Falsafadda kulleejku waxay ahayd, welina tahay inay ahaato mid xudunta u ah ardayda. Santa Fe College waxay hoy u tahay meeraha meeraha, xayawaanka waxbarista ee qaran ahaan loo aqoonsan yahay, cilmiga cilmiga dhulka (godadka dhulka hoostiisa) shaybaarka goobta iyo hoolka farshaxanka wanaagsan ee farshaxanka, waxayna sanad walba soo saartaa Farshaxanka Farshaxanka, dhacdada ugu weyn dhaqanka iyo farshaxanka ee Gobolka Alachua, FL . Santa Fe CollegeAdeegyada Ardayda Caalamiga ah (ISS) waxay u heellan yihiin inay siiyaan ardayda caalamiga ah ee mustaqbalka iyo qoysaskooda aqbalitaan iyo hagitaan jiheyn, iyo sidoo kale inay ardayda caalamiga ah ee hadda jira ka taageeraan la-talinta socdaalka iyo taageerada isdiiwaangelinta ee socota. Daraasadaha Kuleejka Guud - Ku Baro Barnaamijyada Dibedda
SCALA Global Accelerator Urur aan dawli ahayn Ururka Horumarinta Dhaqaalaha Maalgashiga Dibadda ee Dibadda Waxaan nahay koox khibrad badan leh oo khibrad leh hogaamiyayaal ganacsi oo guuleysta, khubaro, iyo kuwa gudaha ah oo wada shaqeynaya si aan u siino la-talin heer caalami ah iyo adeegyo farsamo shirkadaha aan Mareykanka ka ahayn, shaqsiyaadka, ama maalgashadayaasha doonaya inay horumariyaan istaraatiijiyad ay ganacsi uga sameeyaan Mareykanka. La-tashiga Maalgashiga Dibadda ee Dibadda
Sea Hawk Paints Manufacturer Wax soo saarka Badda iyo Teknolojiyada Dharka Hull iyo Rinjiga Isbadal sameeye ka sameysan badeecado badeed, Coatings New Nautical Coatings, Inc. iyo nooca loo yaqaan 'Sea Hawk' ayaa la aasaasay 1978 waxayna u heellan yihiin inay keenaan kaliya tayada ugu sareysa, badeecadaha heerka badda ah iyo qanacsanaanta macaamiisha ee badmaaxa maanta. Waxay bixisaa noocyo kala duwan oo codsiyo ah badeecooyin gaar ah oo daboolaya badaha oo ay ku jiraan rinjiga hoosta ka soo horjeeda, biyo-xireenka iyo horjoogsashada shaashadda, daboolka sii deynta foosha xun, jaakadaha jel, epoxy, dareeraha, varnish iyo xarkaha Hadda waxay siineysaa alaab cusub adduunka, Sea Hawk ayaa sii socota si ay u kororto maaddaama badeecooyinkeedu ay noqdeen kuwo baahi badan loo qabo adduunka. Rinjiga - Epoxies-Primers - Hull nadiifiyeyaasha - Ka hortagga Foojiyeynta Maaddooyinka Badda
Sentry View Systems Manufacturer Technology Information Badbaadada iyo Amniga Sentry View Systems (SVS) waxay xarunteedu tahay Melbourne, Florida oo leh goobo dheeraad ah Montana, North Dakota, Utah, iyo Wyoming. Waxay ku taal bartamaha Florida Xeebta Xeebta, SVS waa shirkad hormuud u ah injineernimada cusub. Waxaan ku takhasusay sameynta xalal ku habboon dalbashada deegaanno fog fog oo qalafsan. Waxaan u adeegnaa baahiyaha nidaamka isku-dhafan annaga oo siineyna xalal ku saleysan geedo ku saleysan, ilaalin, Falanqaynta Video Remote (RVA) iyo keydinta, xalalka awoodda fog, injineernimada softiweerka ah, maareynta qalabka caqliga leh ee u diyaarsanaanta nidaamka ugu fiican, iyo cilad-bixinta fog. SVS waxay ku faraxsan tahay inay soo bandhigto Mawduucyada Ogaanshaha Moobilka Magaalada (UMDP) iyo Qalab Isku-dhafan. Nidaamyadayadu waxay abaabulaan xirmooyinka dareemayaasha si loo ogaado, loo aqoonsado, loola socdo, loona bixiyo tallaabooyin ka hortag ah oo loogu talagalay Nidaamyada Cirka ee aan Duuliyaha (UAS). Labada barnaamijba waxaa ku shaqeeya barnaamijka 'SVS Nexus C2 software platform' wuxuuna bixiyaa xalka kharash-ku-ool ah oo dhammaystiran dhamaadka isticmaalaha. Nidaamyada Ogaanshaha CBRN - Qiimeynta Muuqaalka Fog - Amniga Kaabayaasha - Ilaalinta Hantida Qiimaha Sare - Kormeerka Xuduudaha - Amniga Xadka Fog - Falanqaynta Fiidiyowga
SimBlocks.io Adeeg bixiye Technology Information Horumarinta Barnaamijka SimBlocks.io waa ganacsi yar oo ku takhasusay u isticmaalida waqtiga dhabta ah matoorada ciyaarta 3D qaabaynta, jilitaanka, iyo tababarka adoo taageeraya heerarka warshadaha ee dhulka, qaababka 3D, iyo wada xiriirka isgaarsiinta. https://www.youtube.com/simblocksio/videos Khariidaynta Juqraafiga - Khariidaynta Dhul - Teknolojiyada 3D - Teknolojiyada Mashiinka Ciyaaraha - Muuqaalka Dhulka oo Dhan - Jilitaanka Dhexe
SIMETRI, Inc. Manufacturer Sayniska Nolosha & Teknolojiyada Caafimaadka Jilitaanka Tababarka Caafimaadka Aasaasay sannadkii 2009, SIMETRI, Inc. waxay leedahay 32 shaqaale oo bixiya tusaleynta, jilitaanka, iyo tikniyoolajiyadda tababarka; tababarka caafimaadka iyo qalabka gargaarka; takhasus maado caafimaad; kimistariga falanqaynta iyo xisaabinta; iyo cilmi baarista, injineernimada, farsamada, iyo tayada saadka ee taageerada howlaha iyo waxbarida. SIMETRI, Inc. waa haween-yar-yar oo ganacsi yar oo ay leeyihiin oo keena alaabooyin casri ah iyo adeegyo casri ah oo ka faa'iideysanaya hal-abuurka iyo teknolojiyadda aan xad lahayn si kor loogu qaado waayo-aragnimada aadanaha. Tan iyo markii la aasaasay, tani waxay la macno ahayd cilmi baaris, horumarin, iyo gaarsiinta alaabooyin iyo adeegyo horumarsan, ugu horreyn qeybta jilitaanka caafimaadka, laakiin sidoo kale ka kooban shabakadda iyo injineernimada softiweerka, sayniska qalabka, cilmi baarista deegaanka, iyo tababarka. Tababbarka Caafimaadka - Jilaayaasha qaab dhismeedka jirka - Jilayaasha Tababbarka Caafimaadka
Slice Engineering Manufacturer Technology Information Teknolojiyada Daabacaadda 3D Slice Engineering naqshadeeya, soosaara, oo iibiya qaybo loogu talagalay daabacadaha 3D. Waxaan la shaqeynaa macaamiisha iyo ganacsiyada adeegsada daabacaadda 3D, wax soo saarka wax lagu daro), iyo sidoo kale soosaarayaasha daabacaada 3D. Haddii aad haddaba u isticmaaleyso daabacaadda 3D qayb ka mid ah howlahaaga ama aad jeclaan lahayd inaad wax badan ka barto sida loo sameeyo, waan ku caawin karnaa (ama ugu yaraan kuu tilmaami karnaa jihada saxda ah)! Hadafkeena maalinlaha ah iyo ujeedka udub-dhexaadkeenu waa inaan fikradaha u beddelo xaqiiqooyin. Waxaan tan ku sameynaa adoo ka faa'iideysanaya wax soo saarka wax lagu daro si aan xal ugu helno macaamiisheenna. 3D Madbacadaha - Qalabka Daabacaadda 3D - injineernimada daabacaadda 3D - Teknolojiyada daabacaadda 3D
Southeastern Aerospace Services, LLC. Adeeg bixiye Duulista iyo Hawada Dayactirka Dayactirka Diyaaradaha iyo Dayactirka Adeegyada Aerospace ee Koonfur-bari LLC., Waa ruug caddaa naafo ah oo adeeg leh oo haysta oggolaansho laga haysto dadka laga tirada badan yahay ee FAA iyo Xarunta Dayactirka EASA. Waxaan bixinnaa Dayactir / Dayactir / Dib-u-habeyn nidaamyada soo saarista tamarta diyaaradaha iyo millateriga iyo ganacsiga si loogu daro: Generator-yada APU, Generator-ka Bilowga ah ee DC, Aaladda koronto-dhaliyeyaasha Hawada / Saliida, Wadayaasha Xawaaraha Joogtada ah, iyo Is-dhexgalka Dareeyeyaasha Isku-dhafan. Waxaan haynaa in kabadan 150 sano oo isku dhafan khibrada farsamada OEM ee nidaamyada dhalinta awooda. Farsamayaqaanadeena mid kasta wuxuu leeyahay 10-25 sano oo tababaro iyo waayo aragnimo ah taariikhda shaqada hore ee Hamilton Sundstrand / UTAS. Iyadoo sidoo kale la siinayo dayactirka nidaamka xamuulka diyaaradaha iyo awoodaha dib u habeynta, SAS waxaa intaa sii dheer oo ay bixisaa is dhaafsi, taageero xagga saadka ah, iibinta shixnadaha, awoodaha keydinta, iyo xalalka maaraynta dayactirka. Waxaan sidoo kale leenahay aqoon ballaaran oo la xiriirta qalabka kale ee diyaaradaha si loogu daro pneumatic, hydraulic, nidaamyada shidaalka iyo qeybaha kale ee ay soo saartay Hamilton Sundstrand / UTAS. Saldhigga Dayactirka FAA - Qalabka Soo Saara Awoodda Diyaaradaha - Nidaamyada Xamuulka Diyaaradaha - Gear Soo Degista Duulista
Space Florida Dowladda Duulista iyo Hawada Aerospace iyo Spaceport Development Space Florida waxaa loo abuuray si loo xoojiyo booska Florida oo ah hogaamiyaha caalamiga ah ee cilmi baarista hawada, maalgashiga, sahaminta iyo ganacsiga. Maaddaama aan nahay hay'adda horumarinta aerospace ee Florida, waxaan naga go'an inaan soo jiidanno oo aan ballaarinno jiilka xiga ee ganacsiyada warshadaha bannaan. Iyada oo leh shaqaale aad u tababaran, kaabayaal la xaqiijiyay iyo rikoor aan la qiyaasi karin oo ku saabsan guusha, Florida waa meesha ugu fiican ee ganacsiyada aerospace ay ku koraan - iyo Space Florida waa lamaanaha ugu fiican ee ka caawiya inay guuleystaan. www.spaceflorida.gov Cilmi-baarista Hawada - Horumarinta Meelaha - Booska - Horumarinta Dhaqaalaha
Specialty Products of America Manufacturer Qalabka iyo Qalabka Warshadaha Waxyaabaha lagu daro Kiimikada Hogaamiye warshadeed kiimikooyinka qaaska ah in ka badan 15 sano gudaha USA, Specialty Products of America wuxuu ku takhasusay soo saarista Kiimikooyinka Daaweynta Biyaha iyo Kiimikooyinka Sonkorta. Ganacsi jiil labaad ah ayaa bilaabay 1978, Alaabooyinka Gaarka ah waxay diiradda saarayaan xalal hal abuur leh oo waara oo loogu talagalay warshadaha sokorta iyo warshadaha biyaha aadka u xoojiya. Kiimikooyinkayagu waxay gacan ka geystaan ​​hagaajinta waxtarka geedi socodka, dhalidda iyo tayada wax soo saarka. Waxaan iibineynaa Antiscalants, Jareyaasha Miisaanka, Biocides, Qaboojinta & Waxyaabaha Daaweynta Biyaha Daaweynta, RO Antiscalants, Xakamaynta Xakamaynta & More. Tiknoolajiyada suuqyada hogaamineysa ee SP ayaa waxaa kamid ah EVEREST ™, BIORID ™, BIOSPER ™, THERMAPRO ™, TORPEDO ™, RO PRO ™, SWEETOL ™ & RAPISOL ™. Iyada oo khibrad u leh in shaqada si sax ah loo qabto, waxaan kaa caawin karnaa helitaanka xalka ugu fiican ee baahiyahaaga. Kiimikooyinka Gaarka ah - Kiimikooyinka Nadiifinta Warshadaha - Takhasusleyaasha Takhasuska leh - Kiimikooyinka Daaweynta Biyaha
Shirkadda SpecOps Group Inc. Manufacturer Dabka iyo Badbaadada Qalabka badbaadada Kooxda Specops waa koox caalami ah oo ku wajahan xalka. Waxaan horumarin, soosaarid iyo markab tiknoolajiyad nolol badbaadin ah u siineynaa Milatariga iyo Jawaabayaasha Koowaad ee adduunka. Waxaan nahay halyeey naafo ah oo ay leedahay shirkadna ay maamusho. Shaqaalaheenu waxay ka kooban yihiin halyeeyo Milatari, Jawaabayaasha Koowaad iyo Injineero. Dhamaan horumarinteena, isku imaatinkeena iyo waxsoosaarkeena waxaa lagu sameeyaa Florida illaa guddiga ugu dambeeya. Hadafkeenu waa inaan ilaalino kuwa na difaacaya. Qalabka Raadinta iyo Samatabbixinta - Qalabka Dabagalka - Qalabka Meelmarinta Sharciga - Qalabka Howlgallada Milatari
Stimpson Manufacturer Qalabka iyo Qalabka Warshadaha Qalabka Birta / Dhejiyaha Stimpson, oo la aasaasay 1852, ayaa ah shirkadda ugu weyn ee soo saare ka ah Maraykanka isla markaana keenta grommets & washers, eyelets, set snaps, god plugins, iyo lifaaqa makiinado. Sida ISO: 9001: 2015 shirkad la xaqiijiyay, Stimpson waxay bixisaa adeeg macmiil khabiir ah, oo leh xalka xiritaanka darajada ganacsiga oo dhammaystiran hal saqaf. Qoto dheerida iyo ballaadhinta alaabteennu waxay macaamiisheenna u oggolaanaysaa inay hal il ka soo wada saaraan qalabyadooda, oo ay u badbaadiyaan waqti iyo lacagba. Macaamiisha waxay ku tiirsan yihiin heerka cilladdeenna ku dhow-eber iyo soo-saarista warshadaha, waqtiga-keenista si ay uga badato waxyaabaha ay ka filayaan macaamiishooda oo ay la kulmaan waqtiyada adag. Xalka Xiritaanka: Grommets & Washers Eyelets Snap Set Daha Daloollo Daloola Mashiinka Ku Xidhan Booqo Stimpson waab si aad ula hadasho khabiir isku xira oo u sahamiya isbeddellada dhogorta warshadaha ee ugu dambeeyay ama booqo websaydhkeenna si aad u hesho amni fudud oo amni oo amarro leh oo la dhigo illaa 3:00 PM PM oo isla maalintaas la soo dejinayo. Soo hel Stimpson faraqa. Grommets- Dhaqeyaasha - Indhoolayaasha - Qeexitaannada Dajiyeyaasha - Daloolinno Daloolin - Dhejiyeyaal - Makiinado Fudud
Stream2Sea Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Stream2Sea waa MARKII UGU HOREYSAY iyo KELIYA reef saaxiibtinimo qorraxda qorraxda ee socodka hadalka isla markaana hubisa in dhammaan shaashadeena qorraxda iyo daryeelka maqaarka la tijaabiyo lana caddeeyo inay badbaado u yihiin kalluunka iyo dirxiga dhoobada. Daryeelkayaga dabiiciga ah, daryeelka maqaarka ee hypoallergenic kuma jiraan kiimikooyin waxyeello leh sida benzophenones, oxybenzone, avobenzone, parabens, DEAs / MEAs / SHA, SLS ama SLES iyo kuwa wax ilaaliya. Muraayadaha Eco-Friendly - Qalabka Nadaafadda Gacanta - Alaabada Daryeelka Timaha - Dharka UPF
SurveyTelligence, Inc. Adeeg bixiye Adeegyada Maaliyadeed iyo Xirfadle Maamulka La-talinta iyo Tababbarka Himilada caalamiga ah ee SurveyTelligence, Inc. waa in la dhiso ururro ka xoog badan, ka dhaqso badan, isla jaanqaada. Waxaan u adeegsannaa baaritaanka naqshadeeyayaasha awoodda badan, qalabka iyo khibradda, ula macaamilidda ganacsiga sidii hay'ad, oo aan si fudud u ahayn hal xujo. Waxaan ku takhasusnay isbeddelka hay'adda iyadoo la adeegsanayo "Isku-xirnaanta" sida qaab-dhismeedka. Ku soo bandhigida PULSES faa'iidooyin iyo xalal. Tiknoolajiyad cusub oo siisa xisaab hubin joogto ah sida ugu wanaagsan ee ganacsiga dhabta ah, nidaamyada ganacsi ee dhabta ah iyo dadka ay ugu habboon yihiin ka farxinta macaamiisha. 4-ta qaybood ee DNA-da ganacsigu waa inay iswaafajiyaan oo ay ka shaqeeyaan riwaayad si ay u koraan una kordhiyaan dakhliga. Tiknoolajiyaddu waa mid fudud, muraayada habeen kasta la cusbooneysiiyo, iyadoo lala socdo wacyigelinta ku saabsan fulinta ganacsiga iyada oo la siinayo awood lagu gaaro go'aannada saxda ah. Layaab maleh waligaa! Horumarinta Sahaminta - Baadhitaanka Sahaminta - Sahaminta Qancitaanka Macaamiisha
Susa USA, LLC Manufacturer Qalabka iyo Qalabka Warshadaha Qalabka Baakadaha SUSA USA waa shirkad qoysku leeyahay oo ay maamusho oo leh khibrad shan fac ah. Waxaan ku takhasusay naqshadeynta dhirta oo buuxa si loogu daro dhammaan injineernimada, meeleynta qalabka, naqshadeynta CAD buuxa iyo sawirro. Khubaradeenna dhammaantood waxay in ka badan 10 sano oo khibrad ah u leeyihiin soo-saarka qalabka wax soo saarka iyo baakadaha, oo ku takhasusay warshadaha caanaha iyo dareeraha. Naqshadeynta dhirta iyo injineernimada - Nidaamyada Wax Soosaarka Cuntada ee Turnkey - Qalabka Cuntada lagu farsameeyo - Mashiinnada Buuxinta - Qalabka Sameynta Farmaajada - Haamaha Birta ah ee aan Daxurka lahayn
Tactical Superiority, Inc Manufacturer Amniga iyo Difaaca Qaybaha Qoryaha Tactical Superiority, Inc waa soo saaraha OEM qaybo iyo qaybo ka mid ah hubka yaryar ee warshadaha difaaca. In ka badan 10 sano, waxaan siinay Warshadaha iyo soo saarayaasha qeybaha muhiimka ah ee ay u baahan yihiin si ay u dhisaan wax soo saarkooda. Baararka Rifle - Qeybaha Weerarka Weerarka - Qeybaha Qoryaha Gacanta
Techfit Digital Surgery Adeeg bixiye Sayniska Nolosha & Teknolojiyada Caafimaadka Teknolojiyadda Qalliinka Dib-u-dhiska ah TECHFIT Digital Surgery waxay bixisaa xalal dhammaystiran oo loogu talagalay cudurada bukaanka ee u baahan dib-u-dhis adag, kordhinta saxnaanta qalliinka, yaraynta waqtiga qalliinka, hagaajinta natiijooyinka bilicsanaanta iyo waxqabadka, taas oo iyana u oggolaanaysa bukaanada iyo dhakhaatiirta qalliinka inay helaan qorshaynta qalliinka ugu horumarsan iyo qalabaynta qalabaynta caadada. 3D Qaabaynta Caafimaadka - Qalliinka Dib-u-dhiska - Xalka Maxillofacial - Xalka Cranial - Qalitaanka Qalitaanka
The Golf Car Connection Manufacturer Gaadiidka iyo Qalabka Gawaarida Adeegga Xiriirka Gawaarida Golf-ka ayaa dhoofinayay gawaarida golf-ka iyo qeybaha gawaarida golf-ka tan iyo 1981. Waxaan ku yaal Koonfurta Florida, waxaan nahay iibiyaha koowaad ee gawaarida golf-ka iyo qaybaha dhammaan noocyada gawaarida golf-ka. Sida ganacsade Yamaha idman, Golf Car Connection wuxuu keydiyaa gawaarida golf-ka iyo qaybaha gawaarida golf-ka ee dhammaan gawaarida golf-ka Yamaha, iyo gawaarida Yamaha. Xiriirka Gawaarida Golf sidoo kale wuxuu keydiyaa qaybo badan oo gawaarida golf-ka ah oo loogu talagalay soo saarayaasha kale sida Club Car, EZ-GO, iwm. Waxaan heli karnaa qaybo ka mid ah gawaarida korantada ee la joojiyay sida Cushman, Taylor Dunn, iyo Motrec. Gawaarida Golf - Gaadiidka Hoteelka - Gaadiidka Dalxiiska - Gaadiidka Marina- Gawaarida Adeegga - Gaadiidka Adeegyada Martida
The South Florida District Export Council Urur aan dawli ahayn Adeegyada Maaliyadeed iyo Xirfadle La-talinta Ganacsiga The South Florida District Export Council waa urur ka kooban hogaamiyayaal ganacsi oo ka socda bulshada maxalliga ah, aqoontooda iyo qibradooda ganacsi ee caalamiga ahna waxay siisaa ilo talobixin xirfadeed shirkadaha Monroe, Miami-Dade, Broward, Palm Beach Martin, St. Lucie & Indian River. Isaga oo xiriir dhow la leh Xarumaha Caawinta Dhoofinta ee Waaxda Ganacsiga Mareykanka iyo Adeegga Ganacsiga Mareykanka iyo Dibadda, in ka badan 60 DECs ayaa ka jira dalka oo dhan si ay u taageeraan dadaallada dhiirrigelinta dhoofinta ee Dowladda Mareykanka. Adeegyada Ganacsiga Caalamiga ah -la-talinta Ganacsi - Horumarinta Ganacsiga - U hoggaansanaanta dhoofinta - La-tashiga Ganacsiga Caalamiga ah
The Teething Egg Manufacturer Alaabada Macaamiisha Sahayda Caruurta The Teething EggBadeecadaha ku guuleystay abaalmarinta iyo nashqadaha ruqsadda leh ayaa ah cabbirka, qaabka iyo culeyska ugu habboon gacmaha iyo afka yar. Ilko-mareenadeena iyo maacuunteena waxaa lagu sameeyaa halkan USA iyadoo la adeegsanayo qalabka darajada cuntada ee FDA iyo badbaadada lagu tijaabiyey adduunka oo dhan dhallaanka. Dhammaan alaabooyinkeenna waxaa taageeray dammaanad 90-maalmood oo lacag celin ah. Dalbo maanta, oo aan khatar lahayn, oo ka dhig dhoolla-caddaynta ilmahaaga! Giraan ilkaha - Qalabka Ilkaha
Thomalex Adeeg bixiye Technology Information Isgaarsiinta Thomalex waa shirkad teknolojiyad ku taal Miami oo bixisa firaaqo iyo shirkad ballan-qaadasho toos ah iyo adeegyo loogu talagalay Hay'adaha Safarka ee Yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, Shirkadaha Maareynta Safarka iyo Shirkadaha. Sameeyaha Codsiga softiweer - Codsiyada Smart Phone - Qalabka Boos celinta Duulimaadka Onlineka ah
Thompson Pump Manufacturer Qalabka iyo Qalabka Warshadaha bambooyin Thompson Pump waxaa lagu xushmeeyaa adduunka oo dhan khadadka culus ee culus ee bambooyin tayo sare leh, oo u dhexeeyaa cabirka 2 ilaa 18 inji. Thompson Pump waxay ka iibisaa dhamaan xarumahooda bambooyin xaafadaha degmooyinka, dhismaha, guryaha kirada ah iyo macdanta. Qalabka Dhismaha - Qalabka Macdanta - Bambooyin-Warshadeed- Bambooyin Biyood ah- Bambooyin Qashin-qub ah
Total Translations Group Adeeg bixiye Adeegyada Maaliyadeed iyo Xirfadle Translation Wadarta tarjumaada Inc. waa shirkad hormuud u ah turjumaada iyo tarjumaada gobolka Florida. La aasaasay 1999, Wadar ahaan Tarjumaadaha waa shirkad A + la aqoonsan yahay oo ay ka heshay Better Business Bureau iyo xubin shirkadeed oo ka tirsan Ururka Tarjumayaasha Mareykanka. Iyada oo sannado badan oo waayo-aragnimo ah lagu caawinayo dhoofiyayaasha iyo shirkadaha suuqyada caalamiga ah, Wadarta Tarjumaadaha waxay fahamsan tahay awoodda luqadda iyo tikniyoolajiyadda si loogu fududeeyo ganacsiga dhoofiyayaasha iyo shirkadaha Mareykanka. Waxaan isku dareynaa tikniyoolajiyad horumarsan iyo aqoonta aadanaha si aan caalami uga dhigno adeegyada ganacsiga dhoofinta. Aynu kaa caawinno tarjumaaddayada tayada sare leh, tarjumaadaha, suuqgeynta dhijitaalka ah, iyo adeegyada warbaahinta baahiyahaaga. Adeegyada Dhoofiyeyaasha iyo Shirkadaha: Tarjumida dukumiintiyada sharciga iyo maaliyadeed oo ku qoran luqado badan. Tarjumaad leh taageero farsamo oo xagga ganacsiga ah. Joogitaanka khadka tooska ah ee luuqadaha badan, suuq geynta dijitaalka ah. Qalabka wax lagu rakibo iyo xayeysiinta oo ku qoran luqado badan. Muuqaallo iyo sawirro is-dhexgal ah. Tarjumaada Dukumiintiga - Tarjumaada Buugga Farsamada - Turjumaada Foomka Ganacsiga - Adeegyada Tarjumaadda Video
Triple Strand Global Solutions, LLC Adeeg bixiye La-tashiga, Talo-siinta, iyo Horumarinta Duulista Hawada, Aerospace, Amniga, Dhaqangelinta Sharciga, iyo Tababar Shirkad latalin, latalin, iyo shirkad horumarineed. Duulista - Sirdoonka- Caafimaadka - La tashiga Xalinta Difaaca iyo Amniga
U.S. Commercial Service Dowladda Adeegyada Maaliyadeed iyo Xirfadle Maamulka La-talinta iyo Tababbarka Suuqyada Caalamiga ah waxay caawiyaan una doodaan ganacsiyada Mareykanka ee suuqyada caalamiga ah si loo kobciyo barwaaqada dhaqaalaha Mareykanka. Ka faa'iideysiga shabakadeena dhiirrigelinta ganacsiga iyo xirfadleyda siyaasadeed ee ku yaal in ka badan 100 U.S. Commercial Service xafiisyada waddanka oo dhan iyo in ka badan 70 xafiisyada caalamiga ah, Suuqyada Caalamiga ah waxay dhiirrigeliyaan dhoofinta Mareykanka, gaar ahaan shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah; horumarka iyo ilaalinta danaha ganacsi ee Mareykanka ee dibadda; waxayna soo jiidataa maalgashiga gudaha ee Mareykanka. Dhiirrigalinta Dhoofinta - U Doodista Dhoofinta - La-talinta Dhoofin - Xeerarka Dhoofinta Mareykanka
UltraVision Corporation Manufacturer Sayniska Nolosha & Teknolojiyada Caafimaadka Qalabka Caafimaadka UltraVision Corporation waa horumariye nidaamyada qalabka caafimaadka ee ogaanshaha. Alaabtayada ugu caansan waa UltraVision-XS oo ah Nidaamka Ultrasound Nidaamka Daryeelka Ultrasound oo macnaheedu yahay waxaa loogu talagalay in loo qaado sariirta bukaankeeda ama duurka. UltraVision-XS waa FDA la ansixiyay, wuxuu qabtaa dhammaan qaababka ultrasound oo ay ku jiraan elastography, xiirista, iyo sawir qaadista. Shirkaddu waxay sameysaa cilmi baaris u gaar ah waxayna soo bandhigtaa alaabooyin sida UltraVision-XR oo ah barxad cilmi baaris ah oo u oggolaanaysa baaritaanka ultrasound ee dadka kale iyo jaamacadaha. Cilmi baaris la sameeyay ilaa maanta waxay keentay qaabab cusub oo u muuqda microcalcifications-ka baaritaanka kansarka naasaha. Qaybaha barnaamijyada cilmi baarista waxay soo saari karaan illaa 10,000 wareegyo ilbidhiqsi kasta. UltraVision-LM waa iskaan-gacmeed gacan-ku-xiran oo Wi-Fi ku xiran oo batari ku shaqeeya oo loogu talagalay codsiyada qaaska ah. Sawir qaadayaashu waxaa loo heli karaa sida qaybo aan la isku arkin oo shirkadaha u oggolaanaya inay ku daraan waxyaabaha gudaha ka jira si loo yareeyo canshuuraha iyo waajibaadka. Baadhitaanka Caafimaadka Ultrasound - Baadhitaanka Kansarka - Ultras Sound - Neurodiagnostics
University of Florida Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada ELI iyo Dugsiga Sare UF English Language Institute iyo Dugsiga Qalinjabinta ayaa bixin doona macluumaad ku saabsan degdegga ah, Ingiriisiga tacliinta, iyo shahaadada Master iyo Doctoral ee laga heli karo # 1 jaamacadda dadweynaha ee Florida. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad kala hadashid wakiil ku saabsan daraasadda Ingiriisiga ee loo habeeyey kooxaha shaqaalahaaga ama barayaashaada. ELI waxay leedahay koorsooyin fool-ka-fool ah, iyo Koorsooyin Khadka Tooska ah ee Barnaamijka Ingiriisiga ee Muddada Gaarka ah ee loogu talagalay shaqaalahaaga waxsoosaar kasta. ELI iyo Dugsiga Qalinjabinta waxay ku siin karaan hagitaan ku saabsan ogolaanshaha, Ogolaanshaha ELI ee Ogolaanshaha, iyo fursadaha heer sare ee tacliimeed iyo sidoo kale kaqeybgalka bulshada ee Gainesville, Florida. Ku soo dhowow Gobolka Qorrax dhaca. Dhaqanka ku noolow, baro luuqadda, jeclaada Gators! Barashada Ingiriisiga iyo Qalinjabinta
University of North Florida Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Barnaamijka ESL The University of North Florida oo ku taal Jacksonville, Florida oo leh diiwaangelin 17,016, UNF waa cabirka saxda ah ee lagu siinayo ardayda fursado waxbarasho oo gaar ah iyo khibrad weyn oo xerada ah. UNF waxay leedahay in kabadan 55 shahaadada koowaad (shahaadada bachelorka) barnaamijyada leh in kabadan 100 uruurin. Intaas waxaa sii dheer, UNF waxay leedahay 30 + qalinjabin (shahaadada mastarka ama shahaadada dhaqtarka) barnaamijyada. Ardayda ka socota in ka badan 70 waddan waxay ugu yeeraan guriga UNF, iyagoo abuuraya xarun leh aragti caalami ah. Waxaan haynaa fursado waxbarasho oo kala duwan sida Latin America iyo Kariibiyaanka Deeqaha, iyo sidoo kale Deeqda Ardayda Caalamiga ah ee ardayda ka caawisa baahida dhaqaale ee kulleejada. Dhinacyada barnaamijyada shahaadada, UNF waxay bixisaa Barnaamijka Luqadda Ingiriisiga. Barnaamijka ELP wuxuu leeyahay lix heer oo tilmaam ah. Degdeg ah 22 saacadood oo waxbarid ah usbuucii oo leh cabbirka fasallada ee 12-16 arday. Khibradaha dhaqanka waxaa ka mid ah safarada goobta, fursadaha iskaa wax u qabso, iyo ardayda UNF oo ah lamaanaha wada hadalka. Barnaamijyada Luqadda Ingiriisiga - Koorsooyinka Udiyaarinta Kuliyada
University of South Florida Jaamacadda Hay'adda Waxbarashada Daraasaadka Kuleejka Guud The University of South Florida waa jaamacad cilmi baaris caalami ah oo saameyn weyn ku leh guusha ardayda. 10-kii sano ee la soo dhaafay, ma jirto jaamacad kale oo dawladeed oo dalka ka mid ah oo si dhakhso leh uga korodhay qiimeynta jaamacadaha qaranka ee US News iyo World Report. Jaamacaddu waxay hadda ku jirtaa # 46 oo ka mid ah jaamacadaha dadweynaha ee US News iyo World Report National University Rankings (2021) iyo Princeton Review waxay liis garaysaa USF inay tahay Kulliyadda Qiimaha ugu Fiican ee la siinayo ardayda waxbarasho tayo sare leh iyo u diyaarsanaan xirfadeed qiimo jaban. USF waxay diiwaangelisaa in ka badan ardayda 50,000, oo ay ku jiraan 3,450 ardayda caalamiga ah ee ka kala socda in ka badan 140 waddan, saddexda xarumood ee ku yaal Tampa, St. Petersburg, iyo Sarasota-Manatee. USF waxaa loo qoondeeyay inay tahay Jaamacad Cilmi Baadhiseed oo heer sare ah Gudiga Maamulayaasha Florida, iyada oo lagu meeleeyay qaybta ugu caansan ee ka tirsan 12 jaamacadood ee dawladeed. Kuxirnaanta Darajooyinka Dhaqtarka - Ku Baro Barnaamijyada Dibadda - Barashada Internetka
Unnique - The Premium Brand of Hair Treatments Manufacturer Alaabada Macaamiisha Alaabada Caafimaadka iyo Quruxda Unnique - The Premium Brand of Hair Treatments... shirkad ku takhasustay oo diiradda saartay soo bandhigida soo jeedin ka duwan Suuqa Quruxda, iyada oo si joogto ah uga shaqaysa hal-abuurnimada, cilmi-baarista iyo soo-saarka alaabooyinka sida joogtada ah u daboolaya baahiyaha timaha ee kala duwan ee dadka iyo Xirfadleyda Qurxinta. Ujeeddadeeda ugu weyni waa qurxinta timaha, sababtan awgeed, waxay ku soo korodhay waqti ka dib, iskudhafka botanical, kaas oo isku daraya maaddooyinka firfircoon ee ka kala socda gobollada kala duwan ee adduunka si loo kobciyo mid kasta oo ka mid ah qaaciidooyinka faylalka tacliinta ee aan bixinno. Alaabada Daryeelka Timaha - Daaweynta Keratin - Saliida Argon - Sahayda Quruxda - Alaabta Saloon ee Timaha -Qaybaha Takhaatiirta
Venergy Manufacturer Nadiifinta Farsamada Laydhka iyo Iftiinka Cadceeda Laydhka (LED iyo UV-C), Solar, PPE Gear Laydhka (LED iyo UV-C) - Qalabka PPE - Maareynta Dhismaha - Diyaargarowga Degdegga ah - La-tashiga Tamarta - Teknolojiyada Tamarta Qorraxda
Vero Water Manufacturer Qalabka iyo Qalabka Warshadaha Qalabka Nadiifinta Biyaha iyo Teknolojiyada Vero Water waa shirkad horseed u ah raaxada bey'ada saaxiibtinimada leh iyo biyo dhalaalaysa warshadaha soo dhoweynta, oo ay u adeegtay in ka badan 75 milyan oo macaamiil ah sanadkiiba, Mareykanka iyo 12 dal oo adduunka ah. Vero waxay bixisaa dhadhamin aan caadi aheyn oo wali ah iyo biyo dhalaalaya oo badal u ah biyaha dhalooyinka ku jira, sii waaraya deegaanka, iyo summad faa'iido badan u leh soo-dhoweynta martida iyo biyaha dhalada dhaqameed. Nidaamka sifaynta lahaanshaha ee Vero wuxuu macaamiisha u suurta geliyaa inay sifeeyaan, qaboojiyaan, buuxiyaan oo ay u adeegaan Vero iyo biyo dhalaalaya tubbada iyo dalabka. Vero water waxaa si sharaf leh ugu adeegta kuugga ugu guusha badan, maqaayadaha, hoteelada, khadadka dalxiiska, iyo xafiisyada adduunka oo dhan. Saxeex Vero saxeexiisu waa daahir oo waa hufan - oo lagu xusay afka raaxada leh iyo nal dhammaystiran oo qabow. Tayada aan caadiga ahayn, oo ay weheliso heerka adeeg ee aan la qiyaasi karin ee loo fidiyo macaamiisheeda, ayaa kicisay Vero Water makhaayadaha ugu caansan adduunka. Qalabka Makhaayada - Qalabka Hoteelka - Qalabka jikada - Biyo saafi ah oo dhalaalaya - Biyo dhalo ah
WitZense Adeeg Bixiye / Qaybiyaha Teknolojiyada Macluumaadka (Telecom) Raadinta Waxyaabaha RFID iyo Farsamada GPS GPS Tracking Technology Advanced IoT dabagalka hantida iyo xalalka maareynta halista, oo ay ku shaqeyso 4G LTE moobaylka, aaladaha daruuriga ku saleysan iyo barashada mashiinka si loo bixiyo goobta, fiidiyowga iyo heerarka hadda jira. GPS Raadinta Hantida - Fiidiyowga Telematics - Raadinta Waxyaabaha RFID - Qalabka IoT-ga Warshadaha
Women's Business Centers In Florida Urur aan dawli ahayn Ururka Horumarinta Dhaqaalaha Horumarinta Ganacsiga La talinta ganacsiga, tababarka, la talinta, iyo aqoon isweydaarsiyo loogu talagalay haweenka doonaya inay bilaabaan, koraan, maamulaan oo ay ballaariyaan ganacsiyada guuleysta. La-talinta Ganacsiga - Tababar Ganacsi - La talin Ganacsi - Ganacsi
World Housing Solution Manufacturer Amniga iyo Difaaca Qaabdhismeedka Qafiifka ah World Housing Solution, Inc waa soosaarid dhisme naqshadeyn ah oo soosaaray hanashada abuurista hoyga jiilka xiga iyo xalalka qaabdhismeedka. Teknoolojiyadaan waxaa loogu talagalay oo lagu soo saaray USA waa qafiif, qaybsan yihiin waxtarkooduna sarreeyo. Noocyada taabashada ee hoyga aadka u dahaaran waxay siinayaan dhaqdhaqaaqa awood isku dhafan, biyo iyo isgaarsiin, diyaarna u ah inay aadaan meel kasta oo xirmo sharci-weyn ah sida Xarumaha Caafimaadka ee Taayirada ™ iyo Qeybaha Jawaabta Moobaylka ™. Kuwani waxay awood u siinayaan dagaalyahannada dagaalyahannada, ka jawaab celinta musiibada, xeryaha shaqaalaha iyo xirfadlayaal caafimaad in ay ku shaqeeyaan jawi hawo tamar leh. Taariikhdeena 10-ka sano waxay leedahay macaamiil ay ka mid yihiin Waaxda Difaaca Mareykanka, CIIDANKA Mareykanka, US NAVY, US AIR FORCE, US Operations Special Operations, US MARINE CORPS, Departamento DE SALUD, United Nations, FEMA, The Salvation Army iyo Degmooyin badan iyo dawladaha hoose ee Maraykanka oo dhan. Qaab dhismeedka si dhakhso leh loo adeegsan karo oo darbi ah - Rug caafimaad oo taayir leh - Qaybaha jawaab celinta mobilada - Guryeynta Musiibada Guryaha - Milatariga - Hoyga Degdegga ah
World Panel Products Inc. Manufacturer Wax soo saarka Badda iyo Teknolojiyada Qalabka Dhisida Doomaha Waxyaabaha loo yaqaan 'World Panel Products' waxay bilaabeen sanadkii 1993 si ay wax uga beddelaan qaab dhismeyaasha Doomaha, kuwa dayactirka sameeya iyo malaayiinta milkiilayaasha doonyaha ah ay ku helaan alwaax tayo leh iyo agab isku dhafan. Maanta, waxaan nahay horseedka qaybiyaasha gudiga badda ee gudaha Mareykanka oo leh 2 xarumood oo xoogan, oo koraya. Kooxdayada iibinta aqoonta leh waxay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan wixii su'aalo ah ee aad ka qabto wax soo saarkeena iyo adeegsigooda loogu talagalay. Waxaan aad u xiiseyneynaa inaan ka caawino macaamiisheenna inay xal u helaan dhibaatooyinkooda si doomahooda loogu soo celiyo biyaha waqtigooda. Macaamiisheena waxaa inta badan noo soo gudbiya asxaabtooda iyagoo ku saleynaya khibrada wanaagsan ee ay nagala shaqeeyeen iyo tayadeena. Waxaan nahay kuwa xaliya dhibaatada: Laga soo bilaabo sheyga shelf si aan kuugu soo celiyo biyaha ama mashruuca wax soo saarka muddada dheer, waxaan leenahay habab aan ku dedejino amarkaaga ama jadwalka wax soo saarka si loo hubiyo in gaarsiinta loo sameeyo si badbaado leh oo qiimo leh wax ku ool ah. Ma ku takhasustay maskaxda? Ma dooneysaa alwaax isku habboon? Waxaan nahay khubaro qoryaha. Maraakiibta Maraakiibta - Guddiyada Qoryaha ee Sintetikada - Qalabka Dhismaha Doomaha
© 2021 Bandhigga Ganacsiga Caalamiga ah ee Florida. Lagu abuuray bilaash iyadoo la adeegsanayo WordPress iyo lugeyana-shimbir